[PDF] sexy-kiss - Free Download PDF
အ.... အရမျးကောငျးတယျကှာ…. ပွငျးပွငျးလေး လိုးပေးကှာ… နျော…. နရေောငျ….” တောငျးဆိုသညျ့သူက. တောငျးဆိုလာမှတော့....
နမ်းခွ့ င်ငရပေမယ် ရ် ပေမယ့် …ပန် ပန်းပွ့ င်ငဘဝကု ဘ်ဝကိုညှ ညာတာတယ်ာတာတာတာတယှယ် … ပန်
အချစ် တက္က အချစ် တက္ကသိ သုလ်ိ
ဇာတ် လမ် လမ်းရေးသူ စာစီ ဒီုဇိဇင်ငိ်း PDF
- နမ်းခွ့ င်င်ရပေမယ် ရပေမယ့် …ပန် …ပန်းပွ့ င်င်ဘဝကု ဘဝကိုညှ ညာတာတယ်ှ- badboy2 - ကဝိ (အချစ် တက္က (အချစ် တက္ကသိ သုလ်ိ) - netsoelay (အချစ် တက္က (အချစ် တက္ကသိ သုလ်ိ) - Achittatkatho PDF Team
လွန်နခဲခ့် သော...ေဲ သာ... သော သာ...၄ ...၄.. ၄..နှ ..နှ စ် က. က.... ....။ ...။ တောက် …. “မင်း…. တော်တော်ုမိ က်ုရိငးတဲ့် မိန်နးမပဲ်….. ….. ငါတစ်သက် သက် လု လုံး အထင် ကြီးခဲ့တာတွေ... ... လေးစားပေးခဲ့တာတွေ… ဘာမှ မပက် သက် တော့ပေမဲ့ … တစ်ချိချိ န်န တ်ုန်နးက....်၂နှ စ်ဲခွခ တွိတိ ချစ် ခဲ့ ခ ပြီဲး... ၆လတိ တိ ပေါငးခဲ့် ဖူးတာတွေနဲန့ ...ဲ... ငါ... မင်းကို..... ..... မင်းမို့ ပြောထွ က် ရက် တယ် တယ် ကွ ကွာ…. အေးလေ... မင်းက ဒီအချိ အချိ န်န မှ်ာပြောအားရှိပြီပေါ ပေါ ကွ့ာ.... ရပါတယ် ... သန္တာ... ... ရပါတယ် ... မင်းသိအောင် အောင် တစ်ခုခုတော တော့ပြောလိုက် မယ် မယ် .... မှ တ် ထား.... ထား.... မှ တ် သွားလိုက် ... ငါလမ်းဘေးကကောင် မဟု တ် ဘူးကွ... ... ကြောင် ကြာကြာ ကြောင် ကြာကြာ ရေမငု တ် ပါဘူ ပါဘူး…. နောင် တစ်ချိချိ န်န် မင်းနဲ့ ငါ... ငါ... ပြန် ဆု ဆံ့ခဲခု ရင် ရဲ င်…. …. ခု မင်းမျက် နှာအပေါ်က... အပြုး...ံအေးခု လိုပဲ… ပြုးနိုံင်င ပါစေ….်မင်းနဲ့ ငါ... ငါ... ပြန်ဆု ဆံချင် ပါသေးတယ် ချုင် ပါသေးတယ် … သန္တာ…. …. ပြန်ဆု ဆံချင် ပါသေးတယ် ချုင် ပါသေးတယ် …..”
လက်ိရှ…၂၀၁၂ ၂၀၁၂...။။ … ၂၀၁၂...။ ၂၀၁၂ “ဟန်နီန လား.....”ီ“အင်း…ဟု တ် တယ် တယ် ….” “ကို… ခု ပဲ ပြန်ရောက် ရောက် တာလေ…. တာလေ…. မဟု တ် ဘူး... ကို… မေးလ် လှ လှ မ်းပို့ ထားလိုက် သေးတယ် လေ... မရဘူးလား….. မနေ့ည ကမှ... ... ကို.... သေသေချာချာကိုသေသေချာချာကို.... ပို့ပေးထားတာ... ပေးထားတာ... အင်း.... ကို.... ညနေလာကြိုမယ် လေ... အလု ပ် ကို... ... ဟု တ် လား... လား... စိ တ် မကောက် မကောက် ပါနဲ ပါနဲ့ … ချစ်ရယ် ချစ် ရယ် ... ညနေကျရင် … ဟန်နီန ကြီကု တဲ တဲ့ ... ... ကြေးအိုးသွားသောက် မယ် မယ် လေ... နော် …. အင်း… အင်း… အာဘွား…. နော်…. အရမ်းချစ် တယ်းချစ် တယ် သိ လား….” --------------×--------------------×----------------×--------------------- “ဟွန်န့်.... .... ကိုကဘယ် တော့မှ ကြိုမပြောဘူး… ပြောဘူး… အမြဲ အဲ လိုပဲ…. …. ဘာလဲ…. …. ဘယ် သူတွေ တွေ လာကြိုခို င်ငးလိ်ု လဲ့  ….” ….” ချစ် သူ သလေးကေူ လးက မျက် နှာလေး စူ ပု ပွ ပွ လု ပ်ရင် ရင်းမျက် စောင်းလေး ထိုးကာ ပြောလာသည် ...။ ကျေ်ာခန့်  အသာယာပင် ပြုးလိုံ က် မိ မိသည် သည် ...။ “မဟု တ် ပါဘူ ပါဘူး… ဟန်နီနရယ် ရီ ယ် … မာမီ တိုလာကြိ့ုတာပါ... ကိုတို့အလု အလု ပ် က သိ တဲ့ အတိ အတိုင်ငးပဲ်... ... ဘယ် တော့မှ ကြိေု ပြာလိုမှ့  မရတာ… ခုတောင် တောင်... ... မန်နေဂ နေဂျာကို... ... ငါရောက် နေတာ..၂ လခွဲိရှရနေပြီှေ နပြီနော နော် ... မင်း...ခု… ငါအောက် သွေးတွေ အရမ်းတိုးနေပြီ... ... မင်းဘယ် လိ လိုတာဝန် ယူ မှာလဲ ပြောလိုက် မှ မှ ဒီကောင် ကောင်… မလွှ တ် ချင် လွှ တ် ချင် နဲ့  လွှ တ် လိ လိုက် တာ… တာ… ဟန်နီန့ီရဲရ...” .ဲ ..” “ကိုနော နော် .... သူ ဒါပဲတွေးနေ...” ဟန်နီန စီံ .... .... အရမ်းချစ် စရာကောင်းချစ် စရာကောင်းသည့်ချစ်သူ ချစ် သူလေး လေး မျက် နှာလေး ရဲ ကနဲ ဖြစ်သွ သားရင်ွး သူ လက့်  မောင်းကိုလက် သည်းး ချွန်လေးမ န် လေးများဖြင့်အသာဆွဲဆိ ဆ တ်ိသည် …။ သူ ချစ် သူ သလေးကိေူ လးကိုစချင် လာသဖြင် စချင် လာသဖြင့် … “ဟာ... ဒါဆို… ဟန်နီန က...ီမတွေးဘူးပေါ့... ... g talk မှာ… skype မှာကျတော့ကိုကိ့ုရော... ရော... ကို့ညီ ညလေးကိေီ လးကိုရော… ရော… လွ မ်းလှ ပြီဆိ ဆုတာ….ိဘယ် သူ လဲ… ကဲပြော….” ပြော….” နဂိုကမှ ပန်းဆီရောင် ရောင် သမ်းနေသော မျက် နှာလေးမှာုပိ ပြီးစတော်ဘယ် ရီရောင် ရောင်ဆန် ဆန်ဆန် ဆန် ရင့် သွ သားရင်ွး…. “ဟာ.... ကို..ကလည် ..ကလည်းကွးကွာ... ဆိုင်င ကြီ်းမှာ…. သူ များတွေ ကြားသွားဦးမယ် ….” အချစ် တက္က အချစ် တက္ကသိ သုလ်ိ
ဟု အရှ က် သည်းစွးစွာဆိုလာသဖြင့်သူ မှ့ာရင် ထဲ မှာလျှပ် စစ် ပ် စစ် ဓါတ် တစ် တစ်ခုခု ဖြတ် စီ စီးသွားလိုက် သလိုခံ စားလိုက် ရသည် …။ သူ ဒီကောင် ကောင် မလေးကိုတစ် ကယ် ချစ် ပါသည် ချစ် ပါသည် …။ ဟု တ် ပါသည် ပါသည် ...။ အတိုင်ငးအဆမရှ်ိ ကိုချစ် မိ ချစ် မိ ပါသည် …။ ဘယ် တော့မှ နောက် ထပ် ဖြစ် မလာနိုင်ငတောေ် တာ့ဟု ထင်ခဲ့ ခသေဲာသော အချစ် တစ် အချစ် တစ်ခုခ၊ု ဒီကောင် ကောင် မလေးနဲ့  စတွေ စဉ့်  အချိန် အချိ န် ကတည်းကးက ယခင် က အထင် အမြင် များ မှားယွ မှားယွင်ငးသွ်ားခဲ့ ကြောင် ကြောင်းသူရင် ရင်ခုခုန်န စွ်ာလက် ခံ့ ခဲခ မိဲ သည် သည် …။ ဘ၀တွင်င် တစ်ချိချိ န်န က်အမဲ စက်ိရှ့ ခဲခ ဖဲူးသော သူ လိုလူ ကိုမည် သည့်အပြစ် တင် ခြင်းများ၊ အနိုင်င ယူ်ုဗိ လ် က ကျ ခြင်းမ ခြင်းများ ကင်းစင် ကင်းစင် စွာဖြင့်ကလေးငယ် တစ်ယောက် ယောက် လိ လိုအမြဲ ဖြူစင် စွ စွာဖြင့်ဘ၀တစ်ခုခ လုံးလက် မထပ် မထပ်ရသေးပဲ ရသေးပဲ ရဲရဲရဲရင် ရ့ င်ရင် ရ့ င်ံပုအပ် အပ်ပေးခဲ ပေးခဲ့ သော သော ချစ်သူ ချစ် သူလေးမိ လေးမိုလည့်းး သူအတိ အတိုင်ငးဆမရှ်ိ မြတ် နိုးမိ ပါ သည် …။ ဒီလောက် လောက် ချစ် စရာကောင် ချစ် စရာကောင်းသော ချစ် သူ သလေးနှေူ လးနှင့် င် ဆုံဆည် ဆည်းပေးခဲးပေးခဲ့ သော သော ကံ တရားကိုလည်းး သူ ကျေးဇူးတင်းဇူးတင်နေမိ နေမိ သည် …။ ဟု တ် သည် လေ ကံဆိ ဆုတိာထူးဆန်းတဲ့ အရာမဟု အရာမဟု တ် လား...။ လား...။ သူ ကတော့သူ့ လောက် လောက် ကံကောင် ကောင်းသူ မရှိဟုသာ သာ ယူဆနေခဲ ဆနေခဲ့ သည် သည် ...။ ဒါပေမဲ့ကံဆိ ဆုတိာဘယ် သူ မြင်နိုနိင်င မှ်ာမိုလိ့ုလည့်း…။း…။ “အား.... ကို… တော်တော့ကွာနော်... ဟန်နီန မခီိံနုနုင်ငတောေ် တာ့ဘူး... ချစ် ပေးတော့ ပေးတော့ ကွာနော်…..” ဒီနေ့ နေ့ ချစ် သူ သလေးကိေူ လးကိုခွ့ င်င ယူ်ုခိခင်ငိးလိ်ု က် သည် …။ ဟု တ် သည် လေ သူ မှ့ာအချိ န် က သိ ပ် မရ အလု ပ် က ၃ ပတ် ခွ့ င်ငပေးလိေ် ပးလိုက် သည် ဆိုပေမဲ ပေမဲ့သူ တိုလိ့ုservice engineer တွေအဖိ အုဖိ က့  အရေးကြီးလာလျှင် ကြီးလာသလိုငြင်းဆန်ခွခ့ွင်င မရှ်ိ...။ ...။ ငြင်းး လည်းး မငြင်းရက် ...။ အလု ပ် ကလည်းး တော်ရုံဖြင့်မခေါ်ပါ…။ ဘာပဲ ဖြစ် ဖြစ် ရသမျှအချိ န်လေးကိ လေးကိုချစ်သူ ချစ် သူလေးကိ လေးကိုသာ သာ သူ ပေးဆပ်ချင် ချင် သည် လေ…။ “ကို… တော်ပြီ လို့... ... အရမ်းယားလာပြီ…. …. မခုံနိနင်ငိ တောေ် တာ့ဘူးကို့ရဲရ…..” …ဲ..” ချစ် သူ သလေးကေူ လးက အေးစက် သော ဟိုတယ် အဲ ကွန်နးခန်းထဲ မှာသူ ကိ့ုချွေးလေးများပြန် ကာ ကာ ပြောလာသဖြင့်သူ လည်းး ချစ် သူ သူ လေး ပေါင် ကြားထဲ ရေငု ပ်နေရာမှ နေရာမှ ထပြီး…. “အင်း… ဒါဆိုဟန်နီနီ ပေါင်လေး လေး ကားလိုက် နော်….” သူ ချစ် သူ သလေး၏ေူ လး၏ မလိုင်ငနှန် စ်ှ ရောင် ရောင် ပေါင်လေး လေး ၂ ခု ကြားထဲ ၀င် ပြီးနေရာယူရင် ရင်းညီလေး၏ လေး၏ ထိ ပ် ဖူးနှင့် င် အသာ ပန်းပွ့ င်င် လေး၏ ပွင့် င လွှ်ာဖတ် လေး ၂ခု ကြား အသာအယာ ပွ တ် ဆွဲလိုက် သည် ...။ မဟု တ် လှ လျှင် ၀တ် ရည် လေးများ မထွ က် မထွ က် ပဲ ပဲ ချစ် သူ သူ လေး ပွန်နးရ်ှသွ သားမွှာကိုစိးရိ မ် မိသည် သည် လေ…။ “အင်း... အင်း... အ..အ... ကို… ထည့် တော တော့လေ... ကွာ….” “အင်းပါ... မီးနာသွားမှာုစိးလိုပါ..”့  “ရတယ် … ကို.... ထည့် တော တော့...” မီးစိ မ်းပြပြီ ဆိုမှတော တော့သူအသာပင် အသာပင် တံချူ ချူကိုို ပန်းပွ့ င်ငလေး၏ေ် လး၏ ၀တ် ရည် လိ လှိုင် ခေါင် ခေါင်းလေးထဲ နှ စ်သွ သင်ငွးလိ်ု က် သည် …။ “အား… ကောင်းတယ် ကွ ကွာ.... ကိုရာ…. ရာ…. ကို့ညီ ညလေးကေီ လးကုပိ များ ကြီးလာသလား ကြီးလာသလား မသိဘူ ဘး….ူပြည့်ကျပ် နေတာပဲ နေတာပဲ….” ….” “အား... အဲ့လိုမွှေ မွှေရင် ရင် ပိုထိ တယ် ကွ ကွာ.... ကိုက..အရမ်းချစ် တတ်းချစ် တတ် တာပဲ တာပဲ..ကွ ..ကွာ…” သူအသာလေး အသာလေး ရှေ့တိ့ တိုးနောက် ဆု တ် လု လု ပ်ရင် ရင်း၁၀ချက် ၁၅ချက် လောက် လု ပ်ရင် ရင်းတစ် ၀က် လောက် အရောက် ဆတ် ကနဲ ကနဲ ဖိသွ သင်ငွးလိ်ု က် သည် ...။ “အ...ီရှး... ကိုရာ... ရာ... ရင်ခေါင် ခေါင်းထဲ ရောက် သွားသလားပဲ ကွာ….” “ရှီး...ီရှး... ကောင်းတယ် ... ကိုရယ် ရယ် … ဆောင့် ပေးပါ... ပေးပါ... ဆောင့် …. …. ဆောင့် ... အ... အ...” ဟု မြည် တမ် တမ်းရင်းချစ် သူ သလေးေူ လး ပြီးသွားပြီ ဟု သူသိ သ လို က် သည် …။ ခေတ္တအရှ အိရှန်န ကိ်ု အသာချပေးကာ အသာပင် သူ ၀တ် ရည် များ စိုရွှဲရနေသွေှာနေသော လှိုင်ခေါင်ခေါင်းလေးအတွင်င်း ညီတော တော်မောင် ကိုစိ မ် ထားရင်းသူ စိုလွ့  န်နးသဖြင့်် ပန်းသွေးရောင် မှ ပတ္တ မြား ညိုရောင် ပေါက် ကာစ ကာစ ပြုနေပြီ ဖြစ် နပြီ ဖြစ်သော သောုနိ့ သီ သးထီပ်ခေါင် ခေါင်းလေးကိုအသာ လျှာလေးဖြင့်မွှေနှေ နှောက် ကစားနေလိုက် သည် …။ “ကောင်းလိုက် တာ... တာ... ကိုရာ… ရာ… ကိုမပြီးသေးဘူးမှ တ် လား... လား... ပြီးအောင်ချစ် လိ ချစ် လိုက် နော်… ဘယ် လိ လိုနေပေးရမလဲ နေပေးရမလဲ…” …” အချစ် တက္က အချစ် တက္ကသိ သုလ်ိ
သူချစ် မိ ချစ် မိသော သော အကြောင်းများထဲ တျွားထဲ တွင်င လည်းးဒီ တစ်ချက် ချက် လည် လည်းး အပါအ၀င် ဖြစ်သည် သည် …။ လူရှေ ရှေ့တွ့ တွင်ငသာ သ်ာ မြန် မာမိန်နးကလေ်းပီ ပီ အရှ က် သည်းတတ်းတတ် သော်လည်းး ခု လိုနှ စ်ယောက် ယောက် ထဲ ထဲိရှချိန် ချိ န် တွင်ငတောေ် တာ့ပွ့ င်င လင်းစွာဆက် ဆံ တတ် သည် …။ သူ့ အနေ အနေ နှ့ င်င လည်းးဒါကိုသဘောကျသည် ...။ လွ ယ် လွ လွ ယ် နှင့် င်တော တော့မရ သူတော တော်တော်ကိုစည်းရုးရုံးယူခဲ့ ခဲရသည် ရသည် …။ “အင်း… ဟန်နီနဘေးကိေီ ဘးကို… စောင်းလိုက် ပါလား..." ပါလား..." “ဒီ လိုလား….” တစ်ဘက် ဘက် သို့ ခါးလေးကိုလိ မ် ကာ စောင်းလိုက် ရင်းသူ ကိ့ုလှည် ည့် မေးလာသည် မေးလာသည့်ချစ် သူ သလေးကိေူ လးကိုသူ မြတ်ုနိးစွာပါးလေးကိုအသာနမ်းရင်းပေါင်လေး၂ဘက် လေး၂ဘက် ကိ ကိုအသာနောက် မှ မှ ဟလိုက် ကာ ကာ သူ့ ညီ ညလေးကိေီ လးကိုအသာလေး နှ စ်သွ သွင်ငးလိ်ု က် သည် …။ “အား.... စီးနေတာပဲ ကွာ... ဟန်နီန ဟာလေးက…”့ီ သူအသာပင် အသာပင် ကပ် ပြီးညှောင့် ပေးနေရာမှ ပေးနေရာမှ တစ်ဆု ဆံးဆွဲု ထု တ် ပြီ ပြီးတစ်ဆု ဆံးပြန်ုထည့် သော သော နည်းဖြင်းဖြင့်ဆောင့် တော တော့သည် …။ ဖေါင်း…း… ဖတ် ... ... ဖေါင်း...း... ဖတ် ... ... စွိ… စွိ…. …. ပြွတ်…. … . ပြ …ိချစ် သူ သလေးလည်ေူ လးလည်းး ခါးလေးလိ မ် ကာ တစ်စောင် စောင်းလေးနေရာမှ တင်လေးကိ လေးကိုအနောက် သို့ ပိုပြီးပစ် လာရင်း… “အ… အ...ီရှး…ီရှး… ကောင်းတယ် ကိ ကို... ကောင်းလာပြီ... ... ဆောင့် ပေးပါ ပေးပါ… ဆောင့် … ပေး…” သူ လည်းး အရှိန်န ကိ်ု 3000 rpm နှုန်နးလောက်မြှ့ င်င တင်လိုက် ရင်း... “ကောင်းတယ် ကွ ကွာ... ချစ် ရာ.... ရာ.... ဟန်နီနအဖု အီဖု တ် လေးက... အရမ်းညှ စ် ထားတယ် ကွ ကွာ..." “အ… ထိ တယ် ကိ ကို... ... ထိ တယ် ကွ ကွာ...” သူအဆက် အဆက် မပြတ် မပြတ် ဆောင့် နေရင် နေရင်းတစောင်းအနေထားမှ နှု တ် ခမ်းဖူးဖူးလေးကိုဆွဲစု ပ် လိုက် ရင်းအနီးကပ် တိုက် စစ် စစ်အနေ အနေ ဖြင့်ကပ်ဆောင် ဆောင့် ရာ ရာ အထဲ မှ တထု တ် ထု ထု တ် ဖြင် ဖြင့်ထိ ပ် ကိုလာထိရာမှ ရာမှ… “အား.... အား... ထွ က် ကု ကုန်န ပြီ်ကိုရေ.... ရေ.... ထွ က် ကု ကုန်န ပြီ်...” ...” ဟု တွန်န လိ့် မ် စွာပြီးသွားသော ချစ် သူ သလေးကိေူ လးကိုကြည့် ရင် ရင်းပခုံးလေးနှ စ် ဖက် ကိ ကိုကိုင်င ကာဆောင့််ရင် ရင်း၂လခွဲစာ အောင်းထား သော သု တ် ရည် နွေးနွေးများကိုပန်းထု တ် လိ လိုက် မိ မိတော တော့သည် …။ “ဟန်နေ... တုင်ငိ်းး တွေ့ ချင် ချင် တာ တာ့း ရဲမျက မျက် နှနာလေှးလး... တုင်ငိ်းး…း… ကြားချင ကြားချင် တာ တာာ မင်းရဲ့း ရဲအသံ အ သံလေး....လေး.... ဟေး......” ““ ဟန် နေ... နေ န ... နေ့တိ တာ တာ မင်းရဲာေ လး ... နေ့တိ ကြားချင် တာ လေး လး .... ဟေး ..”
အဆက် မပြတ် မပြတ် မြည် နေသော ဖုန်နးသ်ံကြောင် ကြောင့်သူ မျက် စိ စိ မှိတ် ထားရင် ထားရင်းလက် က က ဖုန်နးရှ်ိုနိနိင်င မည့်် အသံ ကြားရာ နေရာကိုလိုက် စမ် စမ်းနေမိသည် သည် ...။ “ဟဲ လို….” ….” “ဟု တ် ကဲ ကဲ့ … ပြောပါ… ကျေ်ာခန့်  ပြောနေပါတယ် …” မနေ့ က ချစ် ရသူ ရသူလေးနှ လေးနှင့် င် အသားကုန်န် ကဲ ထားသည့်အရှိန်နကြောင်ေ် ကြာင့်သူ တိုက် ခန်းကိုညတော်တော်ုမိးချုပ မ်ှမှ ပြန်ရောက် ရောက် သည် …။ရောက် တာနှ တာနှ့ င်င် အ၀တ် အစားတောင် ဖြစ်သလိ သလိုလဲ ပြီးအိ ပ်ရာထဲ ရာထဲ တန်းဝင် ကာ ခေါင်းချလိုက် သည် နှ့ င်င် အိ ပ်ပေ ပျော် သွားသည် ...။ “ဟေ့ရောင် ရောင်... ... ကိုခန် ခန့် ... ... ငါ.. ကျေ်ာမြင့်ကွ….” ….” “မင်း..ရောက် နေတယ် လိ လို့... ... အန် တီ တို့ ပြောလို့... ... ငါဖုန်နးလ်ှမ်းဆက် လိ လိုက် တာ…. တာ…. မင်းတော်တော်နေနိုင်င တဲ့်ကောင် ကောင် ပဲ.... .... ငါ့ဆီတောင် တောင် ဖုန်နးဆက်ဖေါ်မရဘူး….” စသည် ဖြင် ဖြင့်မြည် တွ တွန်န် တောက် တီ တီးနေတော့ရာ၊ သူ မှ့ာမဖွင့် င်ချင် ချင် သော သော မျက် လု လုံးကိုအတင်းအားယူ ကာ ဖွ့ င်င ပြီ်း ကု တင်ပေါ်မှ ပေါ်မှ ထထိုင်င လိ်ု က် ရသည် …။ အချစ် တက္က အချစ် တက္ကသိ သုလ်ိ
“ဟေ့ ကောင်... ... အေပေး… စောစာစီးစီ စောစာစီးစီး... သူ များအိ ပ်ျားအိ ပ်ချိန် ချိ န် ကိုကျက် သရေ ယု တ် လိ လိုက် တာကွ တာကွာ…. ငှ က် ဆိုးထိုးသံနဲန့ ….” …ဲ.” သူနှန့ှင်င် ကျေ်ာမြင့်တိုက့  သူ တို့ ဆယ် တန် တန်းထဲ ကတူ တူ၊ နောက် သူ မာမီ့  တို့ရှိရှရာ ရာ US သို့ လိုက် သွားပြီးင် ကျောင်းသွာင်းသွားတက် သည့်အချိန် အချိ န် ကျတော့လည်းး သကောင့် သားက သားက သူ့ မွေ မွေးစားအမေ သူ့ အဒေါ်အရင် အဒေါ်အရင်းရှိရာ ရာ M.I.T တွင်ု့ မကြာခဏ လာလည် ရင်းသံယောဇဉ် ယောဇဉ် မပြတ့် ခဲသော သော ငယ် သူငယ် ငယ် ချင်းချင်းအရင်းခေါက် ခေါက် …။ ဒီကောင် ကောင့် အက အကျ င့်က USသိ တစ် မျိုး သူ လည် သူ လည်းး ဆယ် တန် တန်းတုန်နးက်အမှ တ် ကောင်းပြီးUS တွင်င် သူနှန့ှင်ငအတူ အ်တူ ကျောင်းတက်ာင်းတက် နိုင်ငသောေ် သ်ာလည်းး သူ က မြန် မာပြည် ကိ ကိုမခွဲနိုနိင်င ဟ်ုဆု ဆိကာုကျောင်းလာမတက်ာင်းလာမတက့် ခဲ…။ …။ ခု လက်ိရှ သူ ကစလုံးမှ engineering company တစ်ခုခ တွုင်င် နေချိ န်န တ်ွင်င် ကျေ်ာမြင့်က ရန် ကုန်န တ်ွင်င် architect ဖြင့်ပြီးကာ ကိုယ် ပိုပိင်င် senior service engineer အဖြစ် လု ပ်နေချိ ဆောက် လု လု ပ်ရေး ရေး ကု မ္ပ ဏီခပ် ခပ်သေးသေးတစ် သေးသေးတစ်ခုခု ထောင် ထားပြီးသူ ကိုယ် တိ တိုင်င ၀င်ကျေဲ နပြီ...။ “ဟေ့ ကောင်… မောင်ခန် ခန့် … မင်းထပြီ လား… ခု...” ...” ဟာ သေတော့မှာပဲ သူသိ သ လို က် ပြီ ပြီ ဒီကောင် ကောင် သူ တိ့ုက် ခန်းနား ရောက် နေလောက် ပြီ ပြီ ဟု သူ မနိုးမခြင်းနှောင့်ယှ က် နေမှာသေချာသည် ...။ “အေး... ဟေ့ကောင် ကောင်ရေ... ရေ... ငါ..ထနေပြီ ကွ… မင်းလာကြည့်ပါလား... ဘောင်းဘီတောင် တောင် ပေါက် ထွ ထွ က် တော့မယ် … သိ လား….” ဟု သူ လည်းး ခပ်ဲရွရွ့ရွ့ဲရွ့ပြောလိ့ ပြောလိုက် ရာ ထင်သည် သည့် အတိ အတိုင်ငး...်“[email protected]$##[email protected]##$$...” ဖုန်နးထ်ဲမှ သူ ကိ့ုဆဲနေတော နေတော့သည် …။ သူ လည်းး မနေနိုင်င စွ်ာဖြင့်တခစ်ခစ် ခစ် ရီ လိုက် ရင်း… (ကိုဟိ တ် … ခဏ ယူသု သံးလို က် တယ် တယ် နော်…ဟိ) “အေးပါ… ယောက် ဖရယ် ဖရယ် ... ငါက မင်းကိုချစ် လိ ချစ် လို့ စတာပါ…. မင်းကလည်းး စောစောစီးစီးကွာ…. မင်္ဂ လာမရှိ….. ….. ခု မင်းဘယ် မှ မှာလဲ... ... တိုက် အောက် ရောက် ပြီ ပြီ လား… ငါတံခါးဖွ ခါးဖွင်င ထားတယ့်် … တက် လာခဲ လာခဲ့ .... .... ကော်ဖီဖေ ဖျော် ပေးထားမယ် … ok ...” ...” ဟု ချော့ လိုက် တော့မှ သကောင့် သားက သားက မကျေမနပ်လေသံ မနပ် လေသံ ဖြင့် ... ... “တော်ပြီ… ငါအောက် ကစောင် ကစောင့် နေမယ် နေမယ် ... ပြီးရင် စိ တ် တိ တိုင်ငးက်ျ သွားရအောင် သွားရအောင်… မင်းမြန် မြန်ဆင် ဆင်းလာခဲ့ ….” ….” ဟု ပြန်ပြောဖော ပြောဖော် ရတော့သည် …။ သူ လည်းး ကမန်းကတန်းမျက် နှာသစ်၊ သွားတိုက် ပြီ ပြီးကျေ်ာမြင့်အတွ က် ၀ယ် လာသည် လာသည့်arrow shirt ထည့်ထားသည့်အိ တ် ကိ ကိုယူ levis 501 နက် ပြာရောင် ပြာရောင် တစ် ထည် နှ့ င်င် diesel တီရှရ ပ်ှ တစ် ထည် ပြီးစလွ ယ် ကောက် စွ စွ ပ် ကာ ဆံ ပင် တစ်ချက် ချက် နှ စ်ချက် ချက် ခန့်  သပ် ပြီးပြေးဆင်းလိုက် သည် …။ မဟု တ် က က ကျေးဇူးရှးဇူးရှင်င် ယောက်ျားတန် မဲ့စကားနာ ထိုးနေမည် ကိ ကိုစိုးရိ မ်ရလေသည် ရလေသည် …။ အောက် ရောက် သည် နှ့ င်င် မျက် နှာကိုရှ စ်ခေါက် ခေါက် ချိုးကာ အဖြူရောင် mark-2 ဘေးတွင်င် ရပ် ကာ သူ့ စောင် စောင့် နေသော နေသော ချစ်သူ ချစ် သူငယ် ငယ် ချင်းအား ချင်းအား သူ့ အတွ အတွ က် ၀ယ် လာသော လာသော လက် ဆောင်အိ အ တ်ိမြှောက် ပြလိ ပြလိုက် တော့မှ ငနဲသားမ သားမျက် နှာက ခေါက် ချိုး ပြေလေတော့ သည် သည် ...။ “ဟင်း… ဟင်း…. ဒီ လိုကျတော့ လည် တော့ လည်း…း… တပည့်ကြီးက တော်သားပဲ… ဆရာ့အတွ က် တော့မမေ့ရှရာဘှူးပဲ…” …” ဟု ကျေနပ် သော သော မျက် နှာဖြင့် ပြောဖော ပြောဖော် ရတော့သည် …။ သူ လည်း…း… “လစ်ရအောင် ရအောင်လေကွ လေကွာ… ငါဗိုက် ဆာနေပြီ ကွ... ... ကြက် သားပလာတာ စားချင် တာနဲ စားချင် တာနဲ့ … အတော်ပဲ….” ….” ဟု ပြောလိုက် ရာ…. “ချီး… “ချီး…ုဗိ က် ဆာပါလား… ဟင်… မင်းစောစောကကျတော့…. သေနေတာလေ... ထတောင် မထဘူးမှ တ် လား… လား… ခု မှဘာဆာတာလဲ ဘာဆာတာလဲ….” ….” ဘာလဲနှန့ င်င်ှစက် သနတ် ပစ် ပစ်သလိ သလိုပြောလေတော့သည် သည် …။ သူ လည်းး ပြန် ဖက် ပြောမနေတော့ပဲ S-3 လေးထု တ် နားတွင်င် နားကျပ် ထု တ် တပ် တပ် ကာ သီချင်းဖွ ချင်းဖွင့် နားထောင်နေလိ နေလိုက် တော့သည် …။ အချစ် တက္က အချစ် တက္ကသိ သုလ်ိ
“ကဲ… ရောက် ပြီ ပြီ ဆရာကောင်.... .... ဆင်းတော့….” ကျေ်ာမြင့်သူ လက့်  မောင်းကိုကိုင်င ပြီ်း ပြောတော့မှ သူ မျက် လု လုံး ပိ တ် ထားရာမှ ထားရာမှ ဖွ့ င်င ကြည့်် မိ လိုက် သည် …။ သီချင်းနား ချင်းနား ထောင်ရင် ရင်းသူမှေ မှေးကနဲ ဖြစ်သွ သားမွိသည် သည် ကိ ကိုး…။ ဆိုင်ငရှေေ် ရှ့မှ့ မှာတော့ထုံးစံအတိ အတိုင်င်း မပြောင်းလဲ ပဲ ကားများစျွာားစွာရပ် ထားတာ တွေ့ ရသည် ရသည် …။ တစ်ခါတစ် ခါတစ်ခါ ခါ သူ စဉ်းစားကြည့်မိသည် သည် မြန် မာပြည် ကလူ ကလူတွေ တွေ ကိုဆင်းရဲ ကြသည် သာ ပြောတာ ခု လိ ခု လိုဆိ ဆုင်င်ိတွေရယ် ရယ် ၊ ဘီ ယာဆိုင်ငတွေေ် တွရယ် ရယ် မှ မှာတော့လူ စည် ကားမြဲ ကားမြဲ စည် ကားလှ ကားလျှက် ပဲ ပဲ ဟု…။ …။ “ဟေ့ ကောင်…. …. ဆင်းလေကွာ….” ကျေ်ာမြင့်စိ တ် မရှ မရှည် ည စ်ွစွာထပ်ပြောတော ပြောတော့မှ… “အေးပါကွာ… ယောက် ဖကလည် ဖကလည်းး စိ တ် ကြီ ကြီးပဲ…." …." ဟု ပြန်ပြောရင် ပြောရင်းသူ လည်းး ကားပေါ်မှဆင် ဆင်းကာ ဆိုင်င ထ်ဲဝင် လာလိုက် သည် …။ “ငါကတော့ကြက် သားပလာတာ…. မင်းရော….” ဟု သူ ကျေ်ာမြင့်ကိုမေးလိုက် မှ မှ… “ငါတော့လက် ဖက် ဖက် ရည် ပဲ ပဲ သောက် တော့မယ် ….” ဟု ပြောရင်းတဆက် တည် တည်း…း… “ညီလေး… လေး… RUBY တစ်ဘူ ဘးပါပေးကွူာ…” ဟု လှ မ်းမှာနေသည် …။ သူ လည်းး ရေနွေးငှဲ့ရင် ရင်းနှင့် င မှ် … “ယောက် ဖ… ဖ… မင်း… အောင် ၀င်းစိုးတို့၊ ကျေ်ာလင်းတို့နဲန့ ရေဲာရော တွေ ဖြစ့်  သေးလား….” သေးလား….” ဟု သူသတိ သတိ တရ မေးလိုက် သည် …။ “အင်း…. တွေ ဖြစ့်  ပါတယ် … ဒီ တလော မတွေ တာတော့့နည်းနည်းနည်းကြာနေပြီးကြာနေပြီ….” ….” ဟု သဲူငှ့ ပေးထားသော ပေးထားသော ရေနွေးကိ ရေနွေးကိုမှတု သောက် ရင်းနဲ့  ပြန်ဖြေသည် ဖြေသည် …။ ဒီ လိုပဲ ဒီကောင် ကောင့်အကျင့်ကတော့မေးတစ်ခွခန်နွး၊် ဖြေတစ်ခွခန်နွးဆိ်ု တာ…။ သူ စိ တ် မရှ မရှည် ည စ်ွစွာဖြင့် …. …. “ဟေ့ရောင် ရောင်… ဆက် ပြောလေကွာ…. သူ တို့ ဘာတွေ လု ပ်နေကြလဲ နေကြလဲ…” …” ဟု မေးမှ သောက် လက် လက် စ စ ရေနွေးခွ က် ကိ ကိုချပြီး…. ချပြီး…. “အင်း… အောင် ၀င်းစိုးက ခု မြူးဇစ် ပရိ ပရိုဂျူဆာ လု ပ် ပ်နေတယ် နေတယ် … ဟိုကောင် ကောင် ကျေ်ာလင်းကတော့ခု သူ ကားတွေ့  ကိုကိုယ် ပိုပိင်င် စတူဒီဒ ယီု တစ်ခုခု ဖွ့ င်င ထားပြီ်း ရောင်းနေတယ် … ၂ယောက် လု လုံး အဆင်ြေ ပြေတယ် … ငါပြောထားပြီးပြီ… မင်းကိုလည်းး သူ တို၂ယောက့်  လု လုံး တွေ့ ချင်နေကြတယ် ချင် နေကြတယ် …. ကဲ…. …. ဘာများ သိ ချင် ချင် သေးလဲ….” ….” ဟု စိ တ် မရှ မရှည် ည်သော လေသံ နှန့ှင်င် ပြန်ဖြေဖော ဖြေဖော် ရလေသည် …။ ထိုအချိ အချိ န်န် မှာထားသည် မ များ ရောက် လာသည် လာသည် နှ့ င်င် စကားစ ပြတ် သွားတော့သည် သည် …။ သူ လည်းး စားသောက် ပြီ ပြီးruby တစ် လိ ပ် မီးညှိလိုက် သည် …။ ကျေ်ာမြင့်ကတော့ထုံးစံအတိ အတိုင်င်း လက် ဖက် ဖက် ရည် ကိ ကိုဇိ မ်ဆွ ဆွဲေ သာက် နေရာမှ… “ကိုခန် ခန့် … ငါမင်းကိုပြောစရာ တစ်ခုခိရှရု တယ်ှ… ပြောသင့်လား မပြောသင့်လား စဉ်းစားနေတာ…” ဟု ပြောလာသည် …။ သူ လည်းး စီးကရက် ကိ ကိုတစ်ချက် ချက်ိရှကု လိ လိုက် ရင်းမှ… “အေး… အေး… မင်းစဉ်းစားပြီးရင် ပြောလေကွာ…. နော်…” ဟဲုရွ့လိ့ လိုက် ရာ သူ ကိ့ုမျက် လု လုံးပြူးကြည့်ရင် ရင်းမှ… “ဟေ့ကောင် ကောင် ငါအကောင်းပြောနေတာ… မင်းကိ စ္စ ကွ… မင်းနဲ့ ဆိ ဆုင်ငိ တဲ့် ကိ စ္စ…. …. ငါ လာရွဲ့မနေနဲ့ မနေနဲ့ ….” ….” ဟု ပြောလာသဖြင့် … “ဘာ… ဘယ် လိ လို… ငါနဲ့  ဆိုင်င တယ်ဟု တ် လား…. လား…. ပေါက် ကရ ကရ ငါမနေ့ တနေ့ ကမှ ပြန်ရောက် ရောက် တာ တာ ဘာကိ စ္စ လဲ….” ….” အချစ် တက္က အချစ် တက္ကသိ သုလ်ိ
ဟု ပြန်မေးလိ မေးလိုက် မှ မှ… “အင်း… ဟု တ် ပါတယ် ပါတယ် လေ… မင်းနဲ မဆိ့ုင်ငဘူ ဘ်ူး ပြောလည်းရပါတယ်းရပါတယ် ….” ဟု ပြောလာရာ သူ လည်းး စိ တ် မရှ မရှည် ည စ်ွစွာဖြင့် … “ယောက် ဖ ဖ မင်းဘာတွေပြောနေတာလဲ ပြောနေတာလဲ… ငါနားလည် အောင် မင်းမပြောတတ် ဘူးလား….” ဟု ပြောလိုက် မှ မှ ကျေ်ာမြင့်လည်းး သက် ပြင် ပြင်းတစ်ချက် ချက် ချလိုက် ရင်းမှ… “ကိုခန် ခန့် … မင်းသန္တာ ကိ့ုသတိရသေးလား…. ရသေးလား…. သန္တာလေ… လေ… ပန်းပွင့် င်သန္တာ သန္တာပေါ ပေါ ကွ့ာ…” သူ ရင် ထဲ ဖျင်းကနျဲင်းကနဲ၊ ဒါမှ မဟု တ် တစ် ကိုယ် လု လုံးမှိာရှသော သော သွေးမးများ ပွ က် ပွ က် ပွ ပွ က် ဆူ လာသလို၊ အင် မတန် အေးခဲသော သော ရေခဲငွေ ငွေ ပါသော့  လေကိုရု တ် တရက် တရက် ရှလု က်ိရသလိုခံ စားလိုက် ရသည် …။ လွန်န့ ခဲခ် သော ခန် က….့  ….ေဲ သာ (၇ ( ၇) ၇၇) နှ စ်ခန် က အိ ပ် မက် တွေ ကို… အရေခွံလဲ လို့ရရင် ရရင်ကောင် ကောင်းမယ် …။ ဒါမှ… နှ စ်ပေါင် ပေါင်းများစျွာားစွာသူ တို့အသက် အသက် ရှင်င်ုနိနင်ငိ ကြမှ်ာပေါ့...။ ...။ တစ်ချို ချိ့ု အချိ န် မှာနိုးကြားနေရတာကောင်းပေမဲ့ .... .... တစ်ချို ချို့အခြေနေမှာအခြေနေမှာအိ ပ် မက် ...မက် နေရတာ ပိုကောင် ကောင်းပါတယ် ....။ ငါဟာ.... ကြယ် တွေ ကိုထမ်းပြီးလာလမ်းကို... ... ပြန် မလှည် ည့် ချင်သူ ချင် သူ ပါ...။ (နေနော်… နှင်ငးစက်ကကြိ ကကြိုး )
ဖတ်..ဖတ . .ဖတ် ..ပြွ ..ပြွတ်.စွ . စွတ်...ပြိ ...ပြိ .... “အင်း... အင်း... အား…. အား… အ... အ… ကောင်းတယ် ကွ ကွာ…. နေရောင်... ... ယူ က အရမ်းတော်တယ် ကွ ကွာ…. ဆောင့် …. …. ဆောင့် ... ... အင်း... နာနာလေး…. ဆောင် ဆောင့်… ဟု တ် တယ် တယ် …. အဲ လိုမျိုး… အ...အ....” “အဆင်ပြေလား… ပြေလား… ယမင်း.... ကိုယ် လု လု ပ်ပေးတာ….” ပေးတာ….” သူ အီ မိုကေဆန် ကေဆန်ဆန် ဆန်… ဆံ ပင် တစ် ခြမ်းစောင်းနှ့ င်င် စု လှိုင်န်ှနှင်င်း ဆံ ပင် ပုံစံ ဟု ခေတ် စားနေသော စားနေသော အောက် နားတွင်င် အတို၊ ရှည် ည မည်ီမညီ ညု ပ် ထားသည့်ဆံ ပင် ပုံစံနှန့ှင်င် ယမင်းရွှေဇင် ဇင် ဟုခေါ်သော ခေါ်သော အလန်းလေးကိုစည်းချက်းချက် ညီညီ ညီ ဆောင့် ပေးနေရင် ပေးနေရင်းမှ ဆံ ပင်လေးကိ လေးကိုသပ် တင်ပေးရင် ပေးရင်းမေးလိုက် သည် …။
“အ.... အ.... အရမ် အရမးကောင်းတယ် ကွ ကွာ…. ပြင်းပြင်းလေး လိုးပေးကွာ… နော်…. နေရောင်….” ….” တောင်းဆိုသည် သည့် သူ သ ကူတောင်းဆိုလာမှတော တော့သူ လည်းး စည်းချက်းချက် ကိ ကိုမြှင့် င တင်လိုက် သည် …။ ခါးကျင် က င် ကျင် လေး လေး နှ စ် ဖက် ကိ ကိုသေချာဆွဲကိုင်င လိ်ု က် ရင်း... “ယမင်း... နာရင်ပြောနော ပြောနော် ကိုယ့်ကို...” ...” ဟု အားပေးလိုက် ရင်းဒစ် ဖျားနား ရောက် သည် ထိ ထိ ဆွဲထု တ် ဥမြုပ် သွ သားလောက်ွအောင် ထိ ဆောင့် သွ သင်ငွးသည့်် နည်းဖြင်းဖြင့်ခပ် ကြမ်းကြမ်းစိ တ် ကိ ကိုလွှ တ် ပေးလိုက် သည် …။ ဖေါင်း..း.. ဖေါင်း..း.. ဖေါင်း..း.. ပြွက်.. .. ပြွတ် ... ... “အင့်...အင့် ...” ...” ဖန်းဖန်းဖန်း...း... “အ.. အား... အ… ဆောင့်ပါ.... ဆောင့် ပေးပါ... ပေးပါ... နေရယ် ... တို့ စပ် ပတ် ကွဲချင် ကွ ချင် ကွဲပါစေ... ဆောင့် ... ... ဆောင့် ... ... အု... အု... ... အု… ထိ တယ် … ဟင့် …. ထိ တယ် ကွ ကွာ...” ယမင်းတစ်ယောက် ယောက် အသံတောင် တောင် ထွ က် မလာနိ မလာနိုင်င်တော တော့ပဲ ခေါင်းအုန်နးနှ့်င်င် မျက် နှာအပ် ကာ ဘာတွေ မှန်နးမသ်ိဗလုံးပထွေးရေရွ တ် နေတော့သည် …။ ဘယ် နှ စ်ချီချီ လောက် လောက် ပြီးသွားမှန်နးလည်းးမသိတော တော့အဖု တ် မှ မှ အရည် မ များလည်းး ထွ က် ရလွန်နးလိ်ု့  ပေါင် ခြံ မှ စီးကျကာ မွှေ့  မွှေ့ ရာတစ် ရာတစ်ခုခ လုံးလည်းဲးရွှနစ် နစ်နေပြီ နေပြီ…။ …။ အော် ရလွန်နးလိ်ု လည့်းး လည် ချောင်းထဲ ချောင်းထဲ မှ အသံတောင် တောင် ပျောက် သလောက် ဖြစ်နေပြီ နေပြီ...။ သူ လည်းး လီးတစ်ချောင်းလု ချောင်းလုံး အတွင်ငးမ်ှတစစ် စစ်နှနင့် င်ှခလောက် ခံရသော ရသော ဘီ ယာဘူးကဲ့ သိ သုိ့ ဆူ တက် လာနေသည် လာနေသည် ကိ ကိုဆောင့် နေရင် နေရင်းသတိ ထားမိသည် သည် …။ ဖန်း...း... ဖန်း...း... ဖေါက်... . .. ဖေါက်.. စွိ.. .. စွိ… သူဆောင် ဆောင့် နေတု နေတုန်နးမှ်ာပင်... ... “ဟား... အွန်နး...်အ... အ... ပြီး..... ပြီ... ... အား…. တို့... ... ထွ က် ကု ကုန်န်... ... ပြီ... ... အ... အ..” ဟု လည် ပင် ပင်းညု စ်ခံခံရသလိ ရသလိုအသံ ဖြင့် အော အော် ရင်းပေါင်သားလေးမ သားလေးများ တဆတ် ဆတ် တု တုန်န က်ာတွန်န လိ့် န်န်ရင် ရင်းပြီးသွားလေ သည် …။ သူ လည်းး အရှိန်န ကိ်ု အနည်းငယ်းငယ် ထပ် မြှ့ င်င လိ်ု က် ရင်း.... ဖေါင်း...း... ဖေါင်း...း... ပြွတ်… ပြွတ်... . စီး...း... စွီး…း… စွိ... ... လေးဘက် ထောက် အနေအထားမ မှောက် လ လျ က် ဖြစ် ဖြစ်သွ သားသွောယမင်း၏ ကျောလေးပေါ် မှောက်ာက် ချလိုက် ရင်းသု တ် မ များ ကိုတထု တ် ထု ထု တ် ပန်းထု တ် လိုက် လေတော့သည် …။ ချွေးစေးများဖြင့်မောနေသော ယမင်းလည်းး မှောက် လ လျ က် မှ မှ ပက် လက် လက် အနေထားသို့ ပြောင်းလိုက် ရင်း... “အရမ်းကောင်းတာပဲ နေရယ် … ကောင် မလေးတွေ ဒါကြောင့်ယူ ကိ့ုုခိ က် နေတာဖြစ် မယ် ….” ဟု ပက် လက် လက် လှ လှန်နရင် ရ် င်းမှ ပြောလာသည် …။ “ဟက် … ဟက် … ပေါက် ကရတွေ ကရတွေ ကွာ… ယမင်းကလည်း….”း….” ဟု ပြန်ပြောရင် ပြောရင်းသူနသယ် နသယ် စပ် စပ် မှ စီးကျနေသော ခွေ ချွေးစေးလေးများကိုသူ ယု ယစွာသု တ် ပေးရင်းပြောလိုက် သည် …။ “ဟု တ် တယ် တယ် နေေ၇ာင်ရဲ့ ရဲ ယူ က အု-ိးသန်သလိ သလိုခု လိုကြင်နာတတ် နာတတ် တာတွေ တာတွေကြောင် ကြောင့်ဖြစ် မှာပေါ့….” ….” ဟု ပြန်ပြောလာသည် ပြောလာသည် …။ သူ လည်းး ဘာမှ ပြန် မပြောနေတော့ပဲ ယမင်းနဖူးလေးများနှ့ င်င် နားရွ က် ဖ ဖျားလေးများကိုသာ သာ နမ်းနေလိုက် သည် …။ သူ အမြဲ အကြင်နာဖြင် နာဖြင့် သာ သာ ဆက် ဆံ တတ် ပါသည် ပါသည် ...။ မိန်နးကလေးဆိ်ု တာ အားနွဲတဲ့့အမျိုး မဟု တ် မဟု တ် လား…။ “အော်…. မေ့နေလိ နေလိုက် တာ တာ နေရောင်… နောက် နောက် တစ် တစ် ပတ် ထဲ ထဲ မှာတို့မွေ မွေးနေိ့ရှ တယ် နော် သိ လား… ယူ လာရမယ် နော် ယူ ကိ့ုအလန်းလေးတွေနဲန့ဲ မိ တ် ဆက် ပေးမယ် လေ…. ဘယ် လိ လိုလဲ…” …” အချစ် တက္က အချစ် တက္ကသိ သုလ်ိ
ဟု မချို မချိုမချဉ် မျက် နှာထားဖြင့်မေးလာသည် …။ သူ လည်းး ဒါမျိုး ရှု တ် ရှု တ် ရှု တ် ရှ က် ရှ က် ပွဲပွတွေ တွေ ၀ါသနာမပါသော်လည်းး ယမင်း၏ ဒု တိ ယ၀ါကျကိုအနည်းငယ်းငယ် စိ တ် ၀င် ၀င် စားသွားသည် …။ ဒီ ကြားထဲ လောလောဆယ် လည် လည်းး ဘာမှ အလု ပ် မရှိသေးသဖြင့်သဘောတူ လိုက် သည် …။ “အချိ န်န က….”်“ည ၇ နာရီ တိ တိ နေရောင်….” ….” --------------×--------------------×----------------×--------------------- “ဟေ့ ကောင်… ကျေ်ာခန့် ….” ….” အနားမှ အော် လိုက် သည့်ကျေ်ာမြအသံကြောင် ကြောင့်သူအတိ အတိ တ် မှ မှ လက်ိရှအချိန် အချိ န်သိ သုိ့ ပြန် လည် ရောက်ိရှ လာသည် …။ “ဟာ... ဘာလဲ ကွာ… ယောက် ဖ ဖ မင်းကလည်းး အလန် တကြား….”့  “ဘာကွ…” …” ဟု ဒေါသတကြီးဖြင့်သူ ကိ့ုမျက် လု လုံးကြီးပြူးကြည့်ရင် ရင်းမေးလာသော သကောင့် သားကိ သားကိုကြည့် ရင် ရင်း… “ဟဲ… ဟဲ… ဆောရီးကွ ဆောရီးကွာ... ငါနည်းနည်းနည်းး အတွေးလွန်နသွ သ်ားလွို ပါ…့  သယ် ရင်းကလဲ... ... ပြောလေ.. ပြော… မင်းဘာပြေားဘာပြော မလိုလဲ့  ….” ….” ဟု မျက် နှာချိုသွေးရင် သွးရင်းသူမေးလိ မေးလိုက် သည် …။ ပြူးနေသော မျက် လုံးမှာထိုအခါ အခါုပိ ကျယ် သွားရင်း... “ဟေ့ ကောင်.... ကျေ်ာခန့် .... မင်း.. မင်း… ငါ ကို့ လာပြောင်နေတာလား… နေတာလား… ငါမေးနေတာကွ မင်းကို….” ….” ဟု ဒေါသတကြီးဖြင့်ပြောလာတော့သည် …။ သူ လည်းး အပြေးလွှား စဉ်းစားလိုက် ရင်း... “အော်… အေးပါ…” ဟု ပြောရင်း… “မင်းမေးတာ.. သန္တာ ကိ စ္စ မှ တ် လား…” လား…” ဟု ခပ် တည် တည် တည် နှ့ င်င်ီရွှးလိုက် တော့မှ… “အေးလေ…. မင်းသူ ကိ့ုသတိရသေးလား… ရသေးလား… ခု…” …” ဟု ထပ်မေးလာတော့ မေးလာတော့ မှ သူ လည်းး သက် ပြင် ပြင်းတစ်ချက် ချက် အသာချရင်း… အသာချရင်း… “အင်း… မှန်န တဲ့်အတိ အတိုင်င်း ၀န်ခံခရရင် ရံ ရင်တော တော့တစ်ခါတစ် ခါတစ်လေ လေ တိုက် ဆိုင်င မှု လေးတွေ လေးတွေ ရှိ့ခဲခရင် ရဲ င်တော တော့သတိရမိ ရမိ ပါတယ် မင်းကဘာလို့ လာမေးနေရတာလဲ….” ….” ဟု မေးရင်းသူ လည်းး အနည်းငယ်းငယ် စိ တ် ၀င် ၀င် စားသွားသည် …။ ဟု တ် သည် လေ သူ တို့ ပြတ် တောက် သွားခဲ့ သည် သည် မှ မှာလူ တစ်ယောက် ယောက် ဒါမှ မဟု တ် ဘ၀တစ်ခုခ ကို ပြောင်းလဲ ဖို့ ကောင်းကောင်းလုံလောက် လောက် သည် မဟု တ် ပါလား…။ ပါလား…။ “အင်း… ဘာမှတော တော့မဟု တ် ပါဘူ ပါဘူး… လွန်န့ ခဲခ် တဲ့ တစ်နှန စ်ှ လောက် လောက် က… က… သန္တာ ငါ့ဆီ ဆီ ရောက် လာတယ် လာတယ် ကွ ကွ… မင်းကိုမေးတယ် မေးတယ် ဘယ် မှ မှာလဲ တဲ့ …. …. ငါလည်းး ဒီ မိန်နးမကိ်ုေ-ာက် မြင် မြင် ကပ် တာနဲ့  မသိဘူ ဘး….ူနောက် .. ဟန်နီန စီံ နဲန့ဲ မင်းနဲ ကြားမှ့ာလည်းး စိ တ် အနှောင့်ယှ က် ဖြစ် မှာစိုးလို့… ငါမပြောလိုက် ဘူး….” ဟု ပြောလာလေသည် …။ သူတော တော်တော်စိ တ် ၀င် ၀င် စားသွားသည် …။ ဘာလဲ ဒီ မိန်နးမ်သူ့ သိ သ က္ခိာ၊ သူ မာန၊့  သူ့ အရှ အရှ က် တရား၊ တရား၊ အိုအားလုံးပါပဲ မာမီနှန့ င်င်ှဒက် ဒီရော ရော ဒီ မိန်နးမကြောင့််အမ အများကြီျးားကြီးပေးဆပ်ခဲ့ ခဲရပြီ ရပြီးပြီ…။ …။ ခု မှဘာလု ဘာလု ပ် ဖို့ ပေါ်လာတာလဲ ဒီ မိန်နးမ...။်သူငယ် ငယ် ချင်းချင်းအရင်းခေါက် ခေါက် အနေဖြင့်ကျေ်ာမြ လုံးဝမလွန်န်ချေ…။ ချေ…။ ဟု တ် ဟု တ် ပါသည် ပါသည် …။ ဒီကောင် ကောင် ကိုယ် တိ တိုင်င် တောင် ဒီဇာတ် ဇာတ် လမ် လမ်းမှာအများကြီျးားကြီးပတ် သက် ခဲ့ ရဖူ ရဖူးသည် ပဲ ပဲ…။ …။ အချစ် တက္က အချစ် တက္ကသိ သုလ်ိ
“အင်းလေ… ထားလိုက် ပါ… ပါ… မင်းမှန်န ပါတယ်သူငယ် ငယ် ချင်း… ချင်း… ကဲ… ပြန် ကြရအောင် န် ကြရအောင်… ငါ ကို့… ငါ့အခန်းပဲ ပြန် ပို့ပေးကွ ပေးကွာ… နော်… ညကျမှ မင်းရယ် ငါရယ် ဟိုကောင် ကောင် ၂ကောင်နဲန့ဲ ဆုံရအောင် ရအောင်…. မင်း.သူ တို၂ယောက့်  ကိ ကိုတစ်ချက် ချက် လောက် ချိန် ချိ န်းပေးပြီးညနေ ငါ့ ကိုလာခေါ်လေကွာ… နော်….” ဟု သူပြောလိ ပြောလိုက် ရာ ကျေ်ာမြလည်းး ခေါင်းညိ တ် လိ လိုက် ရင်း… “အေးလေ… ငါလည်းမင်းမင်းကိုပိုပြီ့းံရုးသွားလိုက် မယ် မယ် … မင်းနားလိုက် ပါဦး… ပါဦး… ညနေမှ ငါလာခေါ်လိုက် မယ် မယ် …” ဟု ပြောရင်း၂ယောက် သား ပြန်ခဲ့ ခ ကြတေဲာ့ သည် …။
ငါမုငိဘူ ဘး…ူး …။ …။ ဒါပေမဲ့နှ လုံးသားမှးသားမှာ ဘီ လူးဝး၀င် ၀၀င် ပူးတယ် …။ …။ လက် သည်းခွ သည်းခွ န် များနဲ့ျားနဲ့းချွန် မ မှော်ဆရာက ဆရာ က က ငါ့နှ လု လံးသားကိးသားကုို ရင်ဘတ် ဘတ် ကနေ ကနေ ဆွဲခွခာတယ်ွာ တယ် နာကျင် ပေမဲ ပေမဲ့ငါမုငိဘူ ဘးကွူယ် …။ …။ ငါ့ ရဲရ ၀ိ ညာဉ် မှာဝိဝဲ ညာဉ် ပန်းနှင်ငးဆ်ီတွေ တွေ အပြာလွင်ငဆု ဆ်ံးပွု့င်င် ငါ့ရွရ က် ကွတ်ိတိုင်င ကိ်ု အြ အမြင် မ့ င် မားဆု မားဆုံး လွှ လွှ့ င်င ထ်ူထ မယ်ူ…။ …။ ဟေး... ပင် လယ် ဟေး... ပင် ဟေး... လှဲအိ အ ပ်ိ နေတဲ နေတဲ့ပင် ပင် လယ် ဟေး... လှ ခု ထစမ်းသင့် ဆီ ဆီ ငါလာတယ် …။ …။ (တာရာ တာရာမင တာရာ မင်းဝေ်၀၀ ပန် ပန်းခေတ် ကလမင် ကလမငး) ( တာရာမင် တာရားေ်း ) သူ့ ရဲရဲ Audi x-6 တံခါးနှ ခါးနှ စ်ပေါက် ပေါက် ပါ ပါုမိးပြာရောင်ရင် ရ့ င်ရင် ရ့ င် sport ကွေ ၀င့်  လိုက် သည် နှ့ င်င် လုံခြုံရေးဂိ တ် စောင့်မှ ပြေးလာပြီး… အချစ် တက္က အချစ် တက္ကသိ သုလ်ိ
ပြိုင ကားက်ိကားကိ်ု အသင့်ဖွ့ င်င ထားသော်ခြံ တံခါးဝမှ ခါးဝမှ
“ဟာ… ကိုလေး… လေး… နောက် မှ မှာပွဲစနေပြီ…. …. ကားသော့ထားခဲ့လိုက် … ကျနော် … ပါကင် ထိုးထားလိုက် မယ် မယ် ….” ဟု သူ ကိ့ုပြောလာသဖြင် ပြောလာသဖြင့်သူ လည်းး ခေါင်းတစ်ချက် ချက် ဆတ် ပြလိ ပြလိုက် ရင်းတံခါးကိ ခါးကိုဖွင်င ကာ့် ထွ က် ရင်းမီးရောင် စုံပျိုးပျက် လက် နေသည့်တိုက် နောက် ဘက် သို့ လျှောက် သွားလိုက် တော့သည် …။ သူ နောက် ဘက် ရောက် သည် နှ့ င်င် မျက် စိ စိ ကိုဘေးဘယ် ညာ ဝေ့ ၀ဲ ဝေ့ ၀ဲ ကြည့် ရင် ရင်းကစားလိုက် ရာ တိုက် နောက် ဘက် အိုလံ ပစ် စတိုင်င် ရေကူးကန် ဘေးဘယ် ညာ မြက် ခင်းပြင်ပေါ်တွ ပေါ်တွင်င် အရောင်အသွေ အသွေးစုံစွာဖြင့်လူတော တော်တော်များများ ရောက် နေကြပြီ ကိုတွေ လိ့ုက် ရသည် …။ သူ့ ဘောင် ဘောင်းဘီ အိ တ် ထဲ ထဲ ညာက် လက် လက် ကိ ကိုနှိုန က်ိရင်းဘားကောင် တာရှိရာသိ ရာသို့ လမ်းလျှောက် သွားလိုက် သည် ...။ ထိုစဉ်…. …. “ဟေး... နေရောင် နေရောင်… ယူနောက် နောက် က ကျ တယ် ကွ ကွာ… တို့ ယူ ကိ့ုမျှော် နေတာ လွန်န့်ခဲခ တဲ့ တစ်နာရီ နာရီ ထဲ ကပဲ….” ….” ဟု ပြောရင်းသူ လက့်  မောင်းကိုတွဲလာသည့်ယမင်းကိုပြုးပြရင်ံး… “HAPPY BIRTHDAY ယမင်း…..” ဟု နှု တ် ဆက် လိ လိုက် သည် ...။ “THANK YOU ပါ နေရောင်…” …” “ရော့.... ယမင်း…. ဒီ မှာယူ့ အတွ အတွ က် ဘက် ဒေးပရဲဆင် ဆ့ င်…” …” ဟု ပြောရင်းသူ လက့်  ထဲ ထဲ မှ နက် ပြာရောင် ပြာရောင် ကတ္တီပါဘူးလေးကိုလှ မ်းပေးလိုက် သည် …။ “၀ိုး... နေရယ် … ယူ ကတော့အရမ်းချစ် စရားချစ် စရာ ကောင်းတာပဲ….” ….” ဟု ပြောရင်းမှ ဖွ့ င်င ကြည့်် လိုက် လေသည် …။ “အိုး… နေ.. နေ…. ဒါ.. ဒါ…. ဘယ် လ် လ် ဂ ဂျီ ယျီံ ယံ ကတ် (cut) Virgo နဲ့  လု ပ် ထားတာမှ တ် လား… လား… နေရောင်ရယ် ရယ် … ယူ ကတော့ဒါကြောင့်လည်းး ကောင် မလေးတွေ ကြွေနေတာဖြစ် နေတာဖြစ် မယ် …” ဟု သူပေးသော ပေးသော စိန်နရင် ရ် င် ထိုးလေးကိုကိုင်င ကြည့််ရင် ရင်းစိ တ် လှု လှု ပ်ရှရားစွှာ ပြောလာသည့်ယမင်းကိုသူ ပြုးကြည်ံ့ရင် ရင်း... “အင်း… ယမင်းကြိကု လား… လား… ယမင်းကြိကု တယ် တယ် ဆိုရင် ရင်…. …. တို့ပေးရကြိ ပေးရကြိုး နပ် တာပေါ နပ် တာပေါ့….” ….” ဟု ပြောလိုက် ရာ… “ဟာ… နေကလဲ… ဘယ် လိ လိုမေးလိုက် တာလဲ တာလဲ…. …. တို့ မာမီ ကိုပူဆာနေတာကြာပြီ ဆာနေတာကြာပြီ…. …. ဈေးကြီးသေးတယ် ဆိုပြီး… ပြောနေလို့…..” …..” “သြော်… ယမင်းရယ် ဈေးကအဓိ ကမဟျုးကအဓိ ကမဟု တ် ပါဘူ ပါဘူး…. ယူ ကြိကု နိုင်င တယ်လိ လို့ ထင် လို့ တို့.... သူငယ် ငယ် ချင်းကိ ချင်းကိုလှ မ်းမှာလိုက် တာပါ….” “ဟင်း..ဟင်း… သိ တယ် လေ…. အဲဒါကြောင် ဒါကြောင့်လည်းး တို့ ယူ ကိ့ဲုစွနေရတာပေါ နေရတာပေါ့ … ယူ ပွဲပြီးတဲ့ထိ နေရမယ် နော်… ဒီလောက် လောက် သိ တတ် တဲ တဲ့ယူ ကိ့ုတိုကလည့်းး ပြန် တာဝန်ကေ ကျေ ရမှာပေါ ရမှာပေါ့…” …” ဟု သူ့ နား နား နားကပ် ကာ စတော်ဘယ် ရီနံန့ံ သင်းပျံ့ နေသော့ နေသော နှု တ် တ် ခမ်းမှ ထွ က် သောလေသံ ဖြင့်ပြောလာရာ အောက် မှ မှ ညီတော တော်မောင် က ဖြောင်းကနဲ ကန် ထလာသဖြင့်သူ လည်း…း… “ကဲ… မွေးနေ့ရှရင်ငှ်…. …. ခု တို့ဗိဗ က်ိဆာနေပြီ… တစ်ခုခခုခုတော တော့အရင်ကွေ ကျွေးပါဦး…” ဟု ခပ်ရွှရ တ်ွှရွှ တ် ပြောလိုက် မှ မှ… “Oh! So sorry ပါ… နေရယ် …. လာ… တို့ ဘူဖေးကောင် ဖေးကောင် တာကိုလိုက် ပိုပိ မယ့်  …” ဟု ပြောရင်းရှေ့မှ့ မှ သမင် မခြေလှ မ်းဖြင့်ဦးဆောင် ထွ က် သွားရာ သူ လည်းး ယမင်း၏ ပေါင် လည် လောက် ထိ ထိ ရောက် နေ သော စကပ်အဖြူ အဖြူရောင် အောက် မှ မှ လုံးဝန်းသော စစ် ကိုင်ငးအိ်ုးကိုကြည့် ရင် ရင်းနောက် မှ မှ လိုက် သွားလိုက် တော့သည် …။ (ကိုဟိ တ် … ခဏယူသု သံးလို က် တယ် တယ် နော်… ဟက် .. ဟက် …)
တစ် ကယ် တော့သူ့ ဘ၀တွ ဘ၀တွင်င် လမင်းဆိုသည် သည် မှ မှာအမြဲကောင် ကောင်းကင် တွင်င် ထွန်နးလင်း နေသည် ကိ ကိုသာ သာ တွေ့ ခဲ့ ခဲဘူ ဘးပါသည်ူ…။ ဒါပေမဲ့ဒီညမှ ညမှာတော့ခြံထောင် ထောင့် ၏ ညာဘက် ထောင့်စွန်နးစ်ွန်နးမှ်ာ မျက် လု လုံးထောင့်မှာရိ ပ်ခနဲ ခနဲ လှ မ်းအမြင် တစ် ခြံ လုံး မီးရောင် စုံများ အရောင် အသွေ အသွေးစုံသောပန် သောပန်းပွ့ င်ငလေးမေ် လးများ အားလုံး ခဏမျှအမှောင် အမှောင် ကျသွားသလိ သွားသလိုခံ စားလိုက် ရသည် …။ ထို့နောက် နောက် ရု ပ်ရှရင်ငှ ထ်ဲမှ အနှေးပြကွ က် လိ လိုစိ တ် ထဲ ထဲ မှာတစ် စုံတစ်ရာက ရာက သူ ကိ့ုညှို့ ယူ လိ ယူ လိုက် သလိုခြေလှ မ်းများက ထိုလမင်းတစ် စင်းထွန်နးနေသော်စားပွဲဝိုင်ငးရှ်ိရာ ရာ တရွေ့ရွေ့ ရွေ့ အိ ပ် မက် တစ် တစ်ခုခ ထဲုလမ်းလျှောက် နေသလိုရွေ့လှ့ လျှားသွားမိားသွားမိသည် သည် …။ စားပွဲအနီ အနီးအရောက် ဖြတ် ခနဲ မျက် ၀န် ၀န်းတစ် စုံက ပင့်ကြည့် သည် သည် ဆိုရုံရလေး၊ုလေး၊ သူဘယ် ဘယ် လိ လိုလု ပ် ပြီးဘာစကား၊ ဘာခွင့် င မှ် မတောင်းမိ ပဲ ထိုင်င လိ်ု က် မိ မိသည် သည် ကိ ကိုမသိ လိုက် …။ံငု ထားသော့  ခေါင်းကလည်းး ရှေ့မှ့ မှ ချထားသော အအေးခွ က် ကိ ကိုသာ သာ ကြည့် နေပြီ နေပြီးထပ် ပြီးမော့ မကြည့်လာတော့...။ “ဟေး... နေရောင် နေရောင်… ယူ က ဘယ် ရောက် သွားတာလဲ လို့….” ….” ယမင်း၏ အသံ ကြားမှ စိ တ် နှ့ င်င လ်ူနှနင့် င်ှပြန် ကပ်သွ သားမွိသည် သည် …။ ယမင်းက ကော့တေးနှ တေးနှ စ်ခွခ က်ွကိုင်င က်ာသူ တိုဝိ့ုင်ငးဆ်ီရောက် လာသည် လာသည် …။ “အော်… ယူ က ပန်းပွင့် င်ဆီ ဆီ ရောက် နေတာကိုး... ဟင်း… ဟင်း….” ထပ် မံ ပြီးဒု တိ ယအကြိ မ် ဖြတ် ခနဲ ဝေ့ ကြည့်လာသော မျက် ၀န် ၀န်းကိုသူ မြင်ခွခ့ွင်ငရလိ ရ် လိုက် သည် …။ အပြာရောင် လုံးဝကြည် လင်နေသော နေသော မျက် သားအပြာရောင် တစ် စုံနှနှင့် င် လိုက် ဖက် ဖက် လှ လှသော သော မဟူရာရောင် ရာရောင် မျက် ဆံ အားလုံး ရင် ထဲ အေးကနဲ ဖြစ်သွ သားသည်ွကိ ကိုတော တော့စိ တ် နဲ ကိ့ုယ် နဲ့  မကပ် ပဲနေသည် နေသည့်ကြားမှ သတိ ထားမိ လိုက် သည် …။ “နေ… ဒါ… ပန်းပွ့ င်င တဲ့်… နာမည် အပြည့် အစု အံစု က ပန်းပွင့် င်သန္တာ သန္တာ တဲ့ ….” ….” “ပန်းပွ့ င်င…. …်. ဒါ… နေရောင် တဲ့ …. …. နေရောင်ကေ ကျေ်ာ ခန် တဲ့့ ….” ….” မည် သူ မျှမတောင်းဆိ မတောင်းဆိုပဲ ၀င်ရောက် ရောက် မိ မိ တ် ဆက် ပေးသော ယမင်းကိုပထမဦးဆုံးအကြိ မ် သူကေ ကျေးဇူးတင်းဇူးတင် မိသွ သားသည်ွ…။ သူ ခေါင်းပဲ ညိ တ် ပြလိ ပြလိုက် မိ မိသလား၊ သလား၊ ပြုးပဲံပြလိုက် မိ မိသလား သလား သတိ မထားမိ လိုက် …။ သေချာတာကတော့ဘယ် ဘက် ရင် ဘတ် အခြမ်းမှ သွေးတွေ တထိ တ် ထိ ထိ တ် ခုန်နနေတာတောေ် နတာတော့သေချာသည် …။ “ပန်းပွ့ င်င တဲ့် လား….” မိ တ် ဆက် လိ လိုက် တာလား၊ တာလား၊ ဒါမှ မဟု တ် မေးလိုက် တာလား တာလား မသေချာလိုက် …။ “ရှ စ်….” ….” သူ့ ဘာသာ ဘာသာ ခပ် တိုးတိုး ဆဲ လိုက် မိ မိသည် သည် …။ သတိ ထားစမ်းပါ ကျေ်ာခန့် ရာ ရာ မင်းသူငယ် ငယ် နှ ပ် စားလေးမှ မဟု တ် တော့တာပဲ…။ …။ ခု မှ မိန်နးမ်မြင် ဖူးတာ ကျနေတာပဲ …။ …။ ကိုယ့် ဘာသာ ဘာသာ စိ တ် ထဲ ထဲ မှ ကျိတ် ပြောရင်း... “ဟု တ် ကဲ ကဲ့ … သိရတာ ရတာ ၀မ်းသာပါတယ် ဗျာ…” ဟု ပြောရင်းခေါင်းတစ်ချက် ချက် ဆတ် ပြလိ ပြလိုက် မိ မိသည် သည် …။ ဟု တ် သည် လေ သူ လက် ကမ် ကမ်းပြီးမိ တ် ဆက် တာတိ တာတို့ ဘာတို့ မလု ပ် ချင် ပါ…။ ချင် ပါ…။ အထူးသဖြင့်မြန် မာမိန်နးကလေ်းတစ်ယောက် ယောက် အနေဖြင့်လက် ခံချင် မှ ချင် မှ လက် ခံ မည် …။ လက် မခံ မခံ ပါက သူ အူကြောင် ကြောင်ကြောင် ကြောင် အဖြစ် မခုံနိနင်ငိ ပါ…။်တစ်ဆက် ဆက် တည် တည်းး သူ ကိုယ့် ဘာသာ ဘာသာ တွေးလိုက် မိ မိသည် သည် …။ မဆိုး ဒီလောက် လောက် ဆိုကိုယ့်ကိုကိုယ် ထိန်နးချုပ် နိုင်ငသွ သ်ားပြွီဟု…။ …။ စူးကနဲ အကြည့်တစ်ချက် ချက် ရောက် လာတာကိ လာတာကိုတွေ လိ့ုက် ရသည် …။ အမတန် လှ ပ သော နှု တ် ခမ်းလေးမှ ဘာစကားမှတော တော့ထွ က် မလာခဲ မလာခဲ့ …။ …။ “ယမင်း… ငါပြန်တော တော့မယ် …. ရောက် နေတာလည်းး တော်တော်ကြာသွားပြီ…ုမိးလည်းချုးချုပ် နေပြီ… happy birthday ဖြစ် ပါစေ….” ချို ချိ သုာသည် ဟု ဟု ထင်ရသော ရသော်လည်းး အနည်းငယ်းငယ် မာဆတ် ဆတ် ဖြစ်နေသည် နေသည် ကိ ကိုသူသတိ သတိ ထားမိ လိုက် သည် …။ ထပ်တွေ တွေးမိ လိုက် သည် မှ မှာဟာ… ဒီ မိန်နးမ…်ငါတစ်ယောက် ယောက် လု လုံိးရှနေတာတောင် နေတာတောင်.... ငါ ကို့ မနု တ် ဆက် ပါလား… ပါလား… လုံးဝအဖက် မလု မလု ပ် တဲ့အချစ် တက္က အချစ် တက္ကသိ သုလ်ိ
သဘောပေါ့ ဟု ရင် ထဲအောင် အောင့်ကနဲ ဖြစ်သွ သားအောင်ွတွေးမိ လိုက် သည် နှ့ င်င် ဖျင်းကနျဲင်းကနဲ မာနက သွေးမ သွေးများကိုဆူဝေလာစေ ဝေလာစေ သည် …။ တွေ ကြသေးတာပေါ့  ကွ့ာ ဒါမျိုး မှ ကျေ်ာခန် တိ့ုကလည့်းး ကြိကု တာ…။ တာ…။ “ဟာ…. ပြန်တော တော့မလိုလား…့  တစ်ယောက် ယောက် ထဲ ထဲ…. …. ကျွန်တော န် တော်ပြန် ပို့ပေးရမလား….” ပေးရမလား….” ဟဲုရွ့ချင်သော့ ချင် သော စိ တ် တစ် တစ် ၀က် ၊ ရင် ထဲ မှ တစ် ကယ် ဖြစ် ဖြစ်သော သော စေတနာတစ် ၀က် စေတနာတစ် ၀က် နှ့ င်င် သူမေးလိ မေးလိုက် မိ မိသည် သည် …။ ထပ် မံ ပြီးမလိုလားသော အကြည့်စူးစူးနှ့ င်ငအတူ အ်တူ… “မလိုပါဘူး… တက္က စီတွေ တွေ မှ တစ် ပုံကြီး…. ရှ့ င်င ကြည့််ရတာ ရတာ သိ ပ်အချိ အချိ န်နတွေေ် တွ၊ ငွေ တွေ ပေါများနေတယ် နဲ့  တူ တယ် … အဲဒါ ဒါ ဆိုလည်းး လူတွေ တွေ အကျိုး ရှိတာတွေ လု ပ်ပေါ ပေါ့ …. ကျမအတွ က် မအတွ က် တော့မလိုပါဘူး…” ဟု့ မဲသလိ သလို၊ လှောင် လှောင်သလိ သလိုအပြံ အပြံုး နှ င့် င်…။ …။ ပထမဆုံးအကြိ မ် ထွ က် က ကျ လာသော ရှ ည် ည လ်လျားသော ၀ါကျနှ့ င်အတူ အတူ၊ မျက် နှာကိုဖြတ်ိရု က် လိ လိုက် သလိုပူ ကနဲ ခံ စားလိုက် ရသည် …။ သူ လက် သီးကိုတင်းကနဲ ဆု ပ် လိုက် မိ မိသည် သည် …။ သူ တစ်ခုခုခုခု ပြန်ပြော ပြော မည် ပြု ပြုစဉ် သူ မက လှ ပစွာပင် ယမင်းနှု တ် ဆက် သံ ကိုတောင် တောင် မစောင့်ပဲ ထွ က် သွားခဲ့ပြီ ဖြစ်သည် သည် …။ “ဟင်း.. ဟင်း.. နေရောင်… ယူခံခ လိုံ က် ရပြီ မှ တ် လား….” လား….” ဟု စာနာသလို၊ ကလိသလိ သလိုရီသံ သနှနံ့ င်ငှ အတူ အ်တူ ပြောလာသော ယမင်း၏အသံ ကိုလည်းး သူသတိ သတိ မထားတော့…။ သူ သတိ ထားမိ လိုက် သည် က က သူ့ ရင် ရင် ထဲ တွင်င် ဒီ မိန်နးမထ်ွက် သွားချိ န်န် ရင်ဘတ် ဘတ် ထဲ ထဲ မှ တစ် စုံတစ်ခုခု ထွ က် က ကျ သွားသလိ သွားသလို၊ တစ် စုံတစ်ခုခ ပဲု ရင်ဘတ် ဘတ် ထဲ ထဲ ခုန်န ၀င်လာသလို၊ မတူညီ ညသောေီ သာ ခံ စားမှု ၂ခု ဖြစ် ထွန်နးသည်ကိ ကိုတော တော့သတိ ထားမိ လိုက် သည် …။ ထပ် ပြီးသတိ ထားမိ လိုက် သည် က၊ က၊ (ငွေတွေ တွေ၊ အချိန် အချိ န်တွေ တွေ ပေါများနေရင် ဆိုတဲ့စကား…) သေချာပြီ ဒီ မိန်နးမ်သူ ကိ့ုသေသေချာချာကိုသိနေရမည် နေရမည် …။ မဟု တ် ရင် ကြားဖူးနေရမည် ဖြစ်သည် သည် …။ ထိုသိ သုိ့ တွေးမိ လိုက် သည် နှ့ င်င် စောစောက နောက် က ကျိသွ သားသွောစိ တ် က က အနည်းငယ်းငယ် ပြန် လည် ကြည် ကြည် လင် လင် လာသလိုခံ စားလိုက် ရသည် …။ တစ်ချက် ချက် လည် လည်းး သူညာဘက် ညာဘက် နှု တ် ခမ်းကိုတွန်န့ ရင် ရ် င်းပြုံးလိုက် မိ မိသည် သည် …။ ပန်းပွ့ င်ငသန္တာ သ်န္တာ တဲ့လား… ဟင်း.. ဟင်း.. စိ တ် ထဲ ထဲ မှ သဘောကျစွာစွာတွေးလိုက် မိ မိသည် သည် …။ နေရောင်ကေ ကျေ်ာ ခန့် နှနင့် င်ှတွေ ကြပြီ့  ပေါ ပေါ့ …။ …။ သူအတွေ အတွေးလွန်နနေရင်ေ် နရင်းမှ အနည်းငယ်းငယ်ုဗိ က် ဆာလာနေသည် ကိ ကိုသတိရလာသော ရလာသော ကြောင့်မရောက် ဖြစ် ဖြစ် လိုက် သေးသည့်ဘူဖေးကောင် ဖေးကောင် တာရှိရာသိ ရာသို့ ထသွားလိုက် သည် …။ ဒီလောက် လောက် ဧည့် သည် သည် မ များတာ တောင် အစားအသောက် မ များက အလှ အလျှပယ်ံ ပယ် ကျန် နေသေးသည် နေသေးသည် ကိ ကိုတွေ လိ့ုက် ရသည် …။ အင်းပေါ့လေ လေ ဒီလောက် လောက် က က တော့ယမင်းတိုက့  ဘယ် စာဖွ စာဖွဲမှ့ာလဲ…။ …။ တော်တော်လေးတော့ကုန်န က်ျ မည် ဟု ဟု သူသိ သသည် သိည် …။ “ဟေ့ … နေ.. ခု မှ မှ စားမလိုလား….့  စားနှ့ င်ငနောေ် နာ် …. တို့… ဟိုတယ် service အဖွဲကိ့ုငွေသွ သားရွှင်ငးပေးလိ်ု က် ဦးမယ် နော်…. ဗိုက် တော့သိ ပ် တင်းမနေစေနဲ့ ဦး…. ဦး…. သိ လား….” ဟု ပြောရင်းသူ ကိ့ုမျက် စိ စိ တစ် ဖက်ိမှ တ် ပြကာ ပြကာ ထွ က် သွားသည့်ယမင်းကိုသူ ပြုးကြည်ံ့နေလိ နေလိုက် သည် …။ သူဗိုဗ က်ိထဲ ထဲ က ဆာသော်လည်းး စိ တ် မပါစွ မပါစွာနှင့် င် ထည့်လာသော broccoli အနည်းငယ်းငယ် နှင့် င် lamb chop ကိုစိ တ် မ၀င် မ၀င် စားစွာနှ့ င်င် စားနေ ရင်းမှ ခေါင်းထဲသိ သုိ့ စောစောက ဟိုမိန်နးမ်ပြောသွားသော စကားတိုကိ့ုသတိရနေမိ ရနေမိသည် သည် …။ ဘာတဲ့အချိ န်နတွေေ် တွ၊ ငွေ တွေ တွေ ပိုနေသတဲ နေသတဲ့လား သူ စားနေရင်းမှ မဲ့ပြုးံ ပြုးလိုံ က် မိ မိသည် သည် …။ “ဟိ တ် … ဆရာကြီး…. ဘာတွေ သဘောကျနေလဲ ….” ….” ဟု ပြောရင်းမှ သူငှဲင ထားသော့ှုဝိင်ငခွခ် က်ွကိ ကိုယူသောက် သောက် နေသော ယမင်းကိုသူငေးကြည် ငေးကြည့် နေမိ နေမိသည် သည် …။ “အမလေး…. မောလိုက် တာ… တာ… နေရယ် … ခု မှ ပဲ အမောပြေသွားတော့တယ် ….” ဟု သူ ကိ့ုကြည့် ရင် ရင်းပြောလာသော ယမင်းကိုကြည့် ရင် ရင်းတွေးနေမိသည် သည် …။ တစ် ကယ် ဆိုယမင်းနှင့် င် သူ က လက် တွ တွဲမယ် ဆိုရင် ရင် ဘာမှပြောစရာ ပြောစရာ မလိုသလိ သလိုဘယ် သူ မှ လည်းး ကန့်  ကွ က် မည် မည့် သူ သ မရှိူ…။ …။ ယမင်းတို့ မိဘတွေ ဘတွေနှနင့် င်ှသူ မိ့  ဘတွေ ဘတွေ က ငယ် ပေါင်း၊ စီးပွားဖက် တွေ မဟု တ် ပေမဲ့နှ စ်အိ အ မ်ိ တစ်အိ အ မ်ိ ၀င် ထွ က် နေသူတွေ တွေ…။ …။ ယမင်းအဖေနှင့် င် သူ့ အဖေဆိ အဖေဆိုဆုံဖြစ် တိုင်င်း ယခင် က ဂေါက် ဖ် ဖ် ရိုက် နေကြ၊ တိုင်င ပင်နေကြ…။ နေကြ…။ ယခု အချစ် တက္က အချစ် တက္ကသိ သုလ်ိ
သူ မာမီ့  နှန့ င်င်ှဒက် ဒီ က ယူအက် အက် စ် စ် မှာအလု ပ် ကိ စ္စကြောင် ကြောင့်သွားနေရသလို၊ ယမင်းမိဘတွေ ဘတွေ ကလည်းး အော်ဇီ မှာပန်းချီ၊ပန်းချီ ၊ပန်းပု စသော လက် မှု မှု ပညာဆိုင်င်တွေ တွေ သွားရောက် ဖွ ဖွင့် င ထားတ်ာသူသိ သသည် သိည် …။ ဒီ ပြင် လု ပ်ငန် ငန်းခွဲတွေ တွေ အများကြီျးားကြီိးရှ မှန်နးလည်းးသူသိ သ ထားသည်ိ…။ ဒါပေမဲ့ဒီ ထက် ပိုပိ ပြီးသူသေချာသိ သေချာသိ သည် သည် က က ယမင်းကိုသူဘယ် ဘယ် လိ လိုမှ ရင် မခုန်န ခြင်းပင်…။ …။ သူနှနင့် င်ှယမင်းအနေထားက အနောက်ုနိင်င်ငံင မျာံးမှာလျိားမှာလို(sex friend) အနေထားမျိုး သာ ဖြစ် နေသည် …။ ယမင်းလည်းး သူ လိ့ုပဲ ဟု သူ ယုံကြည် သည် …။ “ဟေ့ … ဟာ…. လူ ကိုဘလိုင်ငးကြီ်းကြည့်ပြီးဘာစကားမှ လည်းး မပြောပါလား…..” ယမင်းပြောမှ ပင် သူအတွေ အတွေးလွန်နသွ သ်ားသည်ွကိ ကိုသိ လိုက် သည် …။ သူ ယမင်းလက် ထဲ ထဲ မှုဝိင်င်ခွခ က်ွကိ ကိုဆွဲယူမော မော့ သောက် ရင်း.. “မဟု တ် ပါဘူ ပါဘူး…. ယမင်းက အရမ်းလှနေလိ နေလို့ ငေးနေမိ တာပါကွာ…” “ဟ… ဟ… ပေါ်တင် ကြီးလာမြှောက် နေပါလား….“ ဟု နှု တ် ခမ်းလေးကိုချစ် စဖွ ချစ် စဖွ ယ် ဟရင် ဟရင်းသူ ကိ့ုလှေ လှောင်နေသည် နေသည့်ယမင်းကိုသူဘာမှ ဘာမှ မပြောပဲ ငေးသာကြည့် နေလိ နေလိုက် သည် …။ “အားလုံးလဲ ပြန်သွ သားပြွီ…. …. အရမ်းလည်း…း… ငြီးစီ စီ ကြီးဖြစ်နေလိ နေလို့…. …. ရေကူးမလား…. နေ…” ဟု သူ ကိ့ုကြည့် ရင် ရင်းမေးလာသည့်ယမင်းကိုသူငေးနေရင် ငေးနေရင်းမှ “အင်း… ကူးလေ ယမင်း…. တို့ စောင့် ပေးမယ် ပေးမယ် လေ….” ဟု ပြန်ပြောလိ ပြောလိုက် ရာ ချစ် စဖွ ချစ် စဖွ ယ် မျက် စောင်းလေး ထိုးရင်းမှ… “အိုး… ဒါတော့ ယူပြောမှ ပြောမှ လား… တူ တူ ကူးရအောင် လို့ ပြောတာကို….” ….” ဟု နှု တ် ခမ်းကိုထော်၍ပြောရင်းထိုင်င်ရာမှ ရာမှ ထကာ သူ ကိ့ုကျောခိုင်ငးက်ာထွ က် သွားသော ယမင်း၏ အကာကွ ယ် မရှိသော နောက် ကျောပြင် ဖွေးဖွေးလေးကိုကြည့် ရင် ရင်းသူ လည်းး ထလိုက် သွားတော့သည် …။ ရေကူးကန်းကန်ဘေးရှ ဘေးရှိ(dead ခပေါ်တွေု ပ်ါတွင်င် သူ ၀င် လှဲရင် ရင်းမှ နောက် ထပ် ထပ် ပု လင်းထဲ မှ လက် က ကျ န်ုဝိင်င်အနည် အနည်းငယ်းငယ် ကိ ကိုသူ ဖန်ခွခ က်ွထဲ ထဲငှ ထည့့် ရင် ရင်းchair) တစ်ခု ယမင်းကိုကြည့်လိုက် ချိန် ချိ န် တွင်င် ယမင်းက အင်္ကျီ တောင် တောင် ချွတ် ပြီ ပြီးသွား၍ စကပ် ကိုတောင် တောင် ကုန်နးက်ာချွတ် ချနေပြီ ဖြစ် သည် …။ သူအနည် အနည်းငယ်းငယ် ရင်ခုခန်န်ုသွ သားသလွို ခံ စားလိုက် ရသည် …။ မြင် ဖူ မြင် ဖူးတွေ ဖူ့းနေကြပေမဲ့ရင် ထဲ တစ် မျိုး ခံ စားလိ ခံ စားလိုက် ရ သည် …။ တွေးနေခိုက် မှ မှာပင် သူ မက ရေထဲသိ သုိ့ လှ ပစွာုဒိ က် ဗင် ထိုးချသွားပြီးချသွားပြီ ဖြစ်သည် သည် …။ တစ်ဘက် ဘက် ကမ် ကမ်းသို့ အရောက် တွ တွင်င် ပက် လက် လက် လှ လှန်န ကာ၊်ဒီဘက် ဘက် ကမ် ကမ်းသို့ ပြန် ကူးလာနေသည် ကိ ကိုတွေ့ ရချိန် ရချိ န် တွင်င် သူအာခေါင် အာခေါင်တွေ တွေခြောက် ခြောက် ကာ ကာ ရေငတ် သလိုဖြစ် လာသဖြင့်လက် ထဲ ထဲ မှုဝိင်င လက်က ကျ န် ကိ န် ကိုတစ်ချက် ချက် ထဲ ထဲ ကောက် မော့ လိုက် ကာ ကာ သူ့ အက အင်္ကျီတွေ တွေ ဘောင်းဘီတွေ တွေ အကုန်နခွခ်ျွတ် လိ လိုက် မိ မိသည် သည် …။ ထို့နောက် နောက် ရေထဲသိ သုို့ဒိ က် ဗင် ထိုးဆင်းလိုက် သည် …။ အေးမြသော်လည်းး နွေးထွေးသည် ဟု ဟု စိ တ် ထဲ ထဲခံခ စားလိုံ က် ရသည့်ရေ၏အထိတွေ တွေ့ ကြောင် ကြောင့်ညစ်ညူ ညးနေူသော သူ စိ့  တ် မ များ အနည်းငယ်းငယ် ကြည် လင် လင် လာသလိုဖြစ် လာသည် …။ သူ ယမင်းဆီသိ သုိ့ လက် ပစ် ပစ် ကူးသွားလိုက် သည် …။ “ခစ်.... ခစ်… ပြောသားပဲ ရေထဲ လိုက် မလာနဲ မလာနဲ လိ့ု့….” ….” ဟု ပြောရင်းသူ ကိ့ုလှောင်နေသည် နေသည့်ယမင်းကိုအနားအရောက် တွ တွင်င် ဆတ် ကနဲ ကနဲ ပွေ လိ့ုက် ပြီ ပြီးချိြုမသော နှု တ် နှု တ် ခမ်းလေးကိုအားနှ့ င်င်ံငု ကာဆွဲစု ပ် လိုက် သည် …။ “အွန်နး…်အွန်နး…်ဖရူး…. ဟွန်နး….”်သူ စကားပြောခွ့ င်င် မပေးချင်တော မပေးချင် တော့ပါ…။ သူ ကြမ့်းတမ်းမှုနှန့ှင်င် ထပ် တူ ပင် သူ မကလည်းး မွ တ် သိ ပ် စွာတုံပြန့်  လာလေသည် …။ သူနမ် နမ်းနေရင်းမှ လက် တစ် တစ် ဖက် က က ဘယ် ဘက်ုနိ တစ့်  ဖက် ကိ ကိုဆု ပ်ညှ ည စ်ှ ရင် ရင်းညာဘက် လက် လက် က က အောက် ဘက် ပင် တီလေးထဲ လေးထဲ လျှောကနဲ တိုးဝင် ကာ အမွေးစု စုလေးအောက် လေးအောက် မှ မှ အကွဲကြောင် ကြောင်းလေးထဲ လက် ခလယ် ကိ ကိုအမြှောင်းလိုက် ပွ တ် လိ လိုက် သည် …။ သူ မလက် ကလည် ကလည်းး သူ ကိ့ုတင်းကျပ် စွ ပ် စွာဖက် ရင်းနမ်းနေရင်းမှ လက် တစ် တစ် ဖက် က က သူ့ ဘောင် ဘောင်းဘီ ထဲ တိုးဝင် လာသည် …။ ထို့နောက် နောက် သူ့ ဒစ် ဒစ် လိုင်ငးတစ်လျှာက် လက် မလေးနှ မလေးနှ့ င်င် ဝေ့ ၀ိုက် ပွ ပွ တ် သပ်ရင် ရင်းကျန် လက် န် လက် ချောင်းလေး ချောင်းလေး အချစ် တက္က အချစ် တက္ကသိ သုလ်ိ
များကလည်းး ရှေ့တိ့ တိုးနောက် ဆု တ် ကစားနေတော့သည် …။ ထိုစဉ် ယမင်းက နမ်းနေရင်းမှ ဖြတ် ကနဲ ကနဲ ခွာလိုက် ပြီ ပြီးဆတ် ကနဲ ကနဲ ရေထဲသိ သုိ့ ငု ပ်သွ သားသည်ွ…။ နောက် သူ့ ဘောင် ဘောင်းဘီ ကိုချွတ် ပစ် ပစ် လိုက် သည် ကိ ကိုသူသိ သ လို က် သည် …။ နောက် ထပ် ထပ် အေးမြသော ရေထဲ မှာပင် သူ့ အတံ အတံ တစ်ချာင်းလု ချာင်းလုံး နွေးထွေးသွားသည် ကိ ကိုခံ စားလိုက် ရသည် …။ “အား…. အ… အ…” သူ မခုံနိနင်ငိ စွ်ာပင် နှု တ် မှ မှ ထု တ် ကာ ကာ ညည်းမိးမိသည် သည် …။ နောက် ၀ဲ ဂယက် တစ် တစ်ခုခ လို အားပါသော ပြင်းထန်းထန်သော သော စု ပ် စွဲမှု၏ နောက် တွ တွင်င် သူ့ အတံ အတံ ကြီးမှ သု တ် မ များ အရှိန်န ဟ်ုန်န် ပြင်းစွာထွ က် သွားသည် ကိ ကိုသိ လိုက် သည် …။ ဗွမ် မ်း…း….. “ဖူး…. ကောင်းလားဟင် နေ…..” ဟု မေးလာသည့်သူ မကိုသူအနမ် အနမ်းဖြင့်တုန်န ပြန့်် လိုက် သည် …။ အနည်းငယ်းငယ် ငံ ကျိ ခါးသက် ခါးသက် သော အရသာကိုသူခံခ စားမိံသည် …။ ပြဿ နာမရှိပါ...။ သူ မရွံပါ…။ သူ သ မတောင်ူသူ ကိ့ုဒီလောက် လောက် ဂရု ဂရု စိုက် ပေးသည် ပဲ ပဲ…။ …။ သူ လည်းး ရေထဲသိ သုိ့ ငု ပ် မည် ပြုစဉ် ဖျတ် ကနဲ ကနဲ သူ လက့်  ကိ ကိုဖမ်းဆွဲထားလိုက် ပြီ ပြီး... “ဟင့် အင် အင်း… နေ…. တို့နည် နည်းနည်းနည်းချမ်းနေပြီးချမ်းနေပြီ… အပေါ်က တို့အခန် အခန်းကိုသွားရအောင်နော နော် ….” ဟု ပြောလာသဖြင့်သူခေါင် ခေါင်းကိုဆတ် ကနဲ ကနဲ ငြိ မ် ပြီ့းစွေ ကနဲ့  ပခုံးပေါ် ရေထဲ မှာကောက် ထမ် ထမ်းလိုက် ပြီ ပြီးသူ မ အိ ပ်ခန် ခန်းဆီသိ သုိ့ တက် လာခဲ လာခဲ့လိုက် သည် …။ ထို့နောက် နောက် တွ တွင်င်တော တော့ပြင်းထန်သော သော ဆောင့် ချက် ချက် အသံ များ တအားအား ညည်းညူးညူသ မံများနှ င့် င် အတူ သူအိ အ ပ်ိ ပေ ပျော် သွားခဲ့ သည် …။ ဖြတ် ကနဲ လန့် အနု အိနုးတွင်င် သူ့ ဘေးတွ ဘေးတွင်င် ၀တ် လစ် လစ် စလစ် အိ ပ်ပေ ပျော် နေသာ ယမင်းကိုတစ်ချက် ချက် ကြည် ကြည့် ရင် ရင်းစောင် ကိုခြံေု ပးရင်းပးရင်းသူအ၀တ် အ၀တ် အစားများဝတ် ကာ ကာ ပြန် လာခဲ့လိုက် တော့သည် …။ --------------×--------------------×----------------×---------------------သူ လုံးဝမကျေနပ် ပါ…။ နပ် ပါ…။ ငယ် ငယ် လေးထဲ ကနေ ခု ၂၃ နှ စ် နှ စ် ထဲ ရောက် သည့်အချိန် အချိ န် ထိ ဘယ် ယောက်ျာားး တစ်ယောက် ယောက် ကိ ကိုမှ မပက် သက် ဘူးခဲ့ သလိ သလို၊ ပက် သက် လာနိ လာနိုင်င်သမှ သမျှကိုလည်းး ဝေးဝေးမှရှေ ရှောင်ခဲ့ ခဲသည် သည် …။ ပန်းပွ့ င်ငသန္တာ သ်န္တာ ဆိုသော သော သူ မဘ၀အတွ က် ယောက်ျားတစ် ယောက် ယောက် ဆိုသည် သည် မှ မှာဒါမှ မဟု တ် ယောက်ျားတွေဆို သည် သည် မှ မှာဝေးဝေးမှသာ သာ ရှောင်ရှရားစရှာဒါမှ မဟု တ် အန္တရာယ် ရာယ် တစ် တစ်ခုခု အနေဖြင့် သာ သာ သဘောထားခဲ့ သည် သည် …။ မေမေတို့၊ တီ တီ တို့၊ ဘွားဘွားတို့ ကိုလည်းး ဒီ တစ်သက် သက် ဘယ် ယောက်ျားမှ ပက် သက် စရာမရှ စရာမရှိဟု အမြဲကြွေ ကြွေးကြော့်ခဲသည် မဟု တ် ပါလား…။ ပါလား…။ မှ တ် မှ မှ တ် ရရ ယမင်းရဲ့မွေးနေ့ ကိုသူ မ မသွားဖြစ်ခဲ့ ခ လျှဲင် ယခု လိုယောက်ျား တစ် ယောက် ယောက် အကြောင်းကိုသူ မအချိ န်န က်ုန်နခံခ် ပြီံး တွေးနေမိ မည် မဟု မဟု တ် …။ အဲဒီဒမွေေီ မွးနေ့ တုန်နးကလည်းးတမင် ကိုလူတွေ တွေအထူ အထူးသဖြင့်ယောက်ျားတွေ နှန့ှင်င် မပက် သက် ချင်သဖြင် ချင် သဖြင့်လူအရှ အရှင်ငးဆုံးစားပွဲမှာရွေးထိုင်ငနေခဲေ် နခဲ့ သည် သည် မဟု တ် ပါလား…။ ပါလား…။ အဲဒီဒယောက်ေီ ယာက်ျားမွေးနေ့ားမွေးနေ့ ပွဲကိုဝင် လာကတည်းကးက သူ မြင် ပါသည် …။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည် မှု မှု အပြည့် ရှိရှ သော၊ ဂျစ် ကန်ျစ် ကန် ကန်နိုနိင်ငသောေ် သာ မျက် နှာပေးနှ့ င်င် လိုက် ဖက် ဖက် လှ လှ စွာပင် မြင် မားသော့  အရပ်အမောင် အမောင်းကိုပိင်င်ဆိ ဆုင်င်ိသော သော ထိုနေရောင်ကေ ကျေ်ာ ခန့် ဆိ ဆုသောေိ သာ ယောက်ျားကိုစ၀င် လာကတည်းကသူးကသူ မ သတိ ထားမိ ပါသည် …။ သူ မဘေးဝိုင်ငးမ်ှမိန်နးကလေ်းတော်တော်များများရဲ့တွ တ် ထိ ထိုးသံ များကြောင့်လည်းး ဒီယောက် ယောက်ျား ဘယ် သူဆိ ဆုတာသိူမသိ ပါသည် …။ တော်တော်ကိုဘ၀င် မြင့်မဲ့ပုံစံ ဟု လည်းး ရင် ထဲ မှ မှ တ် ချက် ချမိ့ ခဲခသည် သဲည် …။ သူ မ၀ိုင်ငးတ်ွင်င် လာထိုင်င ကတည်းကးက ထပြန်သွ သားဖွို့  ကောင်းပါ သည် …။ ဒါပေမဲ့တစ် စုံတစ်ခုခ ကုသူ မကိုဆွဲဆောင် ဆောင် ထားသလို၊ သူ မခြေလှ မ်းတို့ရဲ့ ရဲ သစ္စာဖောက် ခြင် ခြင်းကိုခံ့ ခဲခရသည် ရဲ သည် နှ ယ် သူ မထွ က် မသွ မသွားဖြစ်ခဲ့ ခဲ…။ …။
ဒီယောက် ယောက်ျား သူ မ၀ိ သူ မ၀ိုင်ငးတ်ွင်င် လာထိုင်င ကထ်ဲက ဘေးမှ စူးစမ်းသော မျက် လု လုံးများ၊ အမူ အရာမ အရာများကြောင့်သူ မ ထပြန် ဖို့ ယမင်းကိုနှု တ် ဆက် လိ လိုက် ချိန် ချိ န် မှာပြန် ပို့ပေးဖိ ပေးဖို့ လာပြောစဉ် သူ မ၏ တုန်န ပြန့်် မှုကြောင် ကြောင့်ယောက်ျားတန် မဲားတန် မဲ့ရဲ တွ တ် သွားသောမျက် နှာ၊ နောက် မခံချင် ဖြစ် ချင် ဖြစ်သွ သားပွုံရသော ရသော အမူအရာ အရာ အားလုံးကိုယခု ထိ သူ မ အသေးစိ တ် မှ တ် မိ မိ နေသေးသည် …။ ထို့နောက် နောက် ယမင်းရဲ့ပိုင်င စိုးပိုင်ငနင် န် င်းအမူအရာ အရာ (ကျွတ် ) သေတော့မှာပဲ ငါဘာလို့ ဒီယောက် ယောက်ျား တစ်ယောက် ယောက် အကြောင်းကိုခေါင်းထဲရောက် ရောက် နေရတာလဲ...။ မျက် ခုံးထူ ထူအောက် အောက် မှ မှ အမတန် ကြည် လင် လင်သော သော မျက် ၀န် ၀န်းများနှ့ င်င် ထိုယောက် ယောက်ျားဟာ ချောသည် ဟု ပြော၍မ၇ပေမဲ့အမတန် (maleness) ဖြစ်ကြောင် ကြောင်းကိုတော တော့သူ မ မလိုလားစွာပင် အသိ မှ တ် ပြုရမည် ဖြစ် ဖြစ်သည် သည် …။ ဒါကြောင့်လည်းး ဟိုနေ့ နေ့ က မိန်နးကလေးတွေ်သဲသဲ သ လှဲုပ် ဖြစ်နေကြတာ နေကြတာ နေမှာပေါ့…။ …။ ဟာ… မစဉ်းစားပါဘူးဆိုမှ ခေါင်းထဲ ထပ်ရောက် ရောက် လာနေပါလားဟု လာနေပါလားဟု တွေးရင်းနောက် တစ် တစ် ပတ် အတွ က် ကလေးတွေ ကိုသင် ဖို့ picture dictionary စာအု ပ် ကိုဆွဲယူ လိုက် မိ မိသည် သည် …။ မတွေးတော့ပါဘူးဆိုမှ ယောက်ျားတန် မဲားတန် မဲ့ဘယ် ဘက် နားမှာblack diamond ထင်သည် သည် နားကပ် တစ် ဖက် ကလည် ကလည်းး တပ် ထားလိုက် သေးသည် ...။ တော်တော်လှချင် တဲ ချင် တဲ့ယောက်ျားဟု နှု တ် ခမ်းကို့မဲ လိုက် မိ မိရင် ရင်းမှ နားကပ် တပ်သည် သည့်ယောက်ျားများကိုအမတန် အမတန် ကြည့်မရခဲ့ သော သော သူ မသည် ဒီယောက် ယောက်ျားကတော့ခြွင်ငးချက်ဖြစ် ဖြစ်ကြောင် ကြောင်းစိ တ် ထဲ ထဲ မှ လက် ခံ လိုက် ၇သည် ၇သည် …။ အော် … ပန်းပွ့ င်ငရယ် ရ် ယ် နင် လည်းး ကိုယ့်ရဲရ စဲံ တွေ တွေ ပျက် စီ စီးတော့မှာလား…။ ယောက်ျားတွေ ဟာားတွေ ဟာ တစ်ယောက် ယောက် မှ မှ ကောင်းတာရှိတာမှ မဟု တ် တာ၊ တာ၊ ဒီ ပြင် မကြည့် နဲန့ဲ ကိုယ့် အဖေ အဖေ အရင်းခေါက် ခေါက် ကိ ကိုပဲ ကြည့် …။ …။ အမတန် ချစ် လှ ချစ် လှ ပါသည် ဟု ဟုဆိ ဆုပြီိး အတင်းလက် ထပ် ထပ် ယူခဲ့ ခဲသော သော မေမေကိုတောင် တောင် ပစ်သွ သားပြွီး ယခု နောက် မိ မိန်နးမနှ့်င်င် ပျော် မွေ ပြီ့းနေတာပဲ မဟု တ် လားဟု လားဟု ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတိပေးရင် ပေးရင်းမှ ယိုင်ငနဲန့်ဲသွ သားသွောစိ တ် မ များကိုပြန် လည် စု စု စည်းး ယူ လိုက် မိ မိသည် သည် …။ --------------×--------------------×----------------×--------------------- “ချီးယားစ် “ချီးယားစ်……..” ……..” ဟု ပြိုင တ်ူတူ်ပြောကြရင်းမှ ခွက်လေးခွ က် တစ် ပြိုင တည်တည်းကုးကုန်နအောင်ေ် အာင် မော့ လိုက် ကြသည် ကြသည် …။ “ကဲ…. …. ဆရာသမား…. ပြောစမ်းပါဦး…. ပြောစမ်းပါဦး…. မင်းက မင်းက ဘယ် လိ လိုဖြစ် ပြီးငါတို့နဲန့ဲ အဆက် သွ ယ် ဖြတ် ထားရတာလဲ ထားရတာလဲ… မင်း… ငါတို့ ကျေနပ် အောင် အောင်ရှရှင်ငး….်ဒီ ကိ စ္စ ကို…” …” ဟု ပြောရင်းကျေ်ာလင်းက ကုန်န်သွ သားသွောစည် ဘီ ယာခွ က် ကိ ကိုချရင်းမှ ချရင်းမှ သူ ကိ့ုမေးလာသည် မေးလာသည် …။ “ဟု တ် တယ် တယ် … ဟု တ် တယ် တယ် … ဟေ့ ကောင်… မင်း.. ငါတို့… မင်းဆရာနှ စ်ယောက် ယောက် ကျေနပ် အောင် အောင်ရှရင်ငှး….”်ဟု အောင် ၀င်းစိုးကလည်းး ၀င်ပြောလာသည် ပြောလာသည် …။ ကျေ်ာမြကတော့ဘာမှ ၀င် မပြောပဲ ကိုက် လန် လန်ကြော ကြော်တစ် ဖတ် ကိ ကိုတူ ဖြင့်လှ မ်းယူရင် ရင်းသူ တိုကိ့ုကြည့် ရင် ရင်းပြုးနေသည်ံ…။ သူ လည်းး ကုန်န်သွ သားသွောစည် ခွ က် ကိ ကိုစားပွဲပေါ်ချရင်းပေါ်ချရင်းစားပွဲထိုးလေးကိုလက် သုံးချောင်းးချောင်းလှ မ်းထောင် ပြရင်းမှ… “အေးပါကွာ… အေးပါ… ငါမင်းတို့ ကျေနပ် အောင် အောင် ရှင်ငးပြပါမယ်… အေးဆေးပေါ့ … ခုလောလောဆယ် လောလောဆယ် … အရှိန်နလေးေ် လး ထပ် တင် လိုက် ကြတာပေါ ကြတာပေါ့ …. …. ခု မှ ညနေ ၆နာ၇ီ ပဲိရှသေးတာပဲ သေးတာပဲ…. …. စောပါသေးတယ် …. မဟု တ် ဘူးလား….” ဟု ပြောတော့မှ နှ စ်ကောင် ကောင်သား သား အင် တင် တင် ပုံစံ ဖြင့်ငြိ မ်သွ သားတွော့ သည် …။ “ကဲ… သယ် ရင်းတို့… ဘာထပ် မှာဦးမလဲ… ဒီ ၀ိုင်ငးကိ်ု ငါရင်ငှးမှ်ာပါ… လိုတာထပ် မှာ….” ဟု သူ ထပ်ပြောလိ ပြောလိုက် တော့မှ အစားသမား ကျေ်ာလင်းက…. “စိ တ် ချ… ဟေ့ ကောင်…. …. မှာဦးမှာ.... မင်းကိုဆု ဆံးမဦးမှုာ…. စိ တ် မပူ မပူနဲန့ ….” …ဲ.”
ဟု ပြန်ပြောဖော ပြောဖော် ရလေသည် …။ အသောက် သမား အောင် ၀င် အောင် ၀င်းစိုးကတော့သူ ထု့ံးစံအတိ အတိုင်င်း ဒု တိ ယခွ က် ကု ကုန်န လိ်ု့  တတိ ယ ခွ က် တောင် လှ မ်းမှာနေပြီ ဖြစ်သည် သည် …။ ဟိုကောင် ကောင်ကေ ကျေ်ာ မြကတော့ကြည့် ရတာ ရတာ ဒီညမှ ညမှာသူ ကိ့ုဒီနှန စ်ှ ကောင် ကောင်နှန့ င်င်ှဖြစ်ချင် ချင် တာဖြစ် ဟု လွှ တ် ထားပြီ ထားပြီဲးပွ ကြည့်ပရိ တ် သတ် လု ပ် မည့်ပုိံရှရသည် သှည် …။ သူ တို့ ၄ယောက် ခု လိုအတူ တူ မဆုံဖြစ် ကြသည် မှ မှာ၁၀ စုနှန စ်ှ တစ်ခုခု နီးနီးရှိပြီ ဟု သူ ထင်သည် သည် …။ သူ ဟိုမိန်နးမနဲ့် ပြဿ နာတွေ ဖြစ်နေတု နေတုန်နးကလည်းးကျေ်ာလင်းက နယ် တွေ မှာအောက်ုဒိးတွေ ထွ က် ရေးနေတုန်နး၊် အောင် ၀င်းစိုးကလည်းး သူနှန့ှင်င် သေချာမဆုံဖြစ့် ခဲခဲ…။ …။ ထိုစဉ် တုန်နးက်ကျေ်ာမြတစ်ယောက် ယောက် သာ သူ ပြဿ့  နာ အလုံးစုံနီနးပါးကီု ပါဝင် ပက် သက့် ခဲသည် သည် ပဲ ပဲ မဟု တ် လား…။ လား…။ သူ တို့ ၄ယောက် က က ခင် တာတော့သာမာန် သူငယ် ငယ် ချင်းတွေ ချင်းတွေ ထက် ပိုပါသည် …။ ဒါတော့သေချာပါ သည် …။ တစ်ယောက် ယောက် နှ့ င်င တစ်ယောက် ယောက် ဘယ် လောက် ပဲ ပဲ အနေဝေးဝေး မိန်နးကလေးတွေ်လိုဖွဲ့နွဲန မပြောကြသည့်ွ ကလွ ကလွဲလျှင် အားလုံး အမြဲရင် ရင် ထဲ မှာုခိင်င မာသော်ခင် မင် မှုနှ င့် င် သံယောဇဉ် ယောဇဉ် ရှိကြတာကတော့သေချာပါသည် …။ “ကဲ… ဟေ့ ကောင်… နေရောင်…. …. လု ပ်လေကွ လေကွာ… မင်းပဲအရှ အိရှန်န်လေး လေး တင် မယ် ဆို…. …. ချလေ….” ဟု အောင် ၀င်းစိုးက ပြောလာသည် တွ တွင်င် သူ လည်းး တစ် ၀က် လောက် က ကျ န် သော သော ခွ က် ကိ ကိုတစ်ရှိရှန်န ထိ်ုးမော့ လိုက် သည် …။ “လု ပ် ပါဦး… နေရောင်… မင်း.. လွန်န့်ခဲခ တဲ့ ၇နှ စ်လောက် လောက် ကနေ ကနေ ခုချိန် ချိ န် ထိ ဖြစ့် ခဲခ တာတွေဲတစ် လုံးမကျန် ငါတိုကိ့ုရှင်ငးပ်ြပါဦး…. နောက် …. ငါတို့ ၂ယောက် နဲ့  အဆက် သွ ယ် ပြတ် သွားရတဲ့အကြောင်းရင်းလေး...” ဟု ကျေ်ာလင်းက ပြောလာသည် တွ တွင်င... .် .. “အင်း…. မင်းတို့ ၂ယောက် နဲ က့  တမင်အဆက် အဆက် သွ ယ် ပြတ် ပြတ် တာ တာ ဖြတ် ထားတာ ထားတာ မဟု တ် ပါဘူ ပါဘူးကွာ…. ငါ… မင်းတို့အ ကြောင်းကိုကျေ်ာမြနဲ့  အဆက် သွ ယ် ရတိုင်င်း အမြဲမေးပါတယ် …. ဒီ မှာဒီကောင် ကောင်ရှေ ရှေ့မှ့ မှာငု တ် တု တု တ် ကြီ ကြီး…. မင်းတို့မေး မေး ကြည့်ပါ…. အဲ… အဆက် သွ ယ် မလု ပ် ဖြစ် တာကတော့ငါက ဟိုသွ သားလွို က် ဒီသွ သားလွို က် နဲ ကွ့ာ…. ပြီးတော့အလု ပ် က မပင် ပန်းပေမဲ့ခေါင်းစားတော့လူ က ဘာမှ ကိုမလု ပ်ုနိနိင်ငအောင်ေ် အာင် ကိုဖြစ်နေတာ…. နေတာ…. ငါ… ဟန်နီန့ တောင်ေီ တာင် တစ် ပတ် မှ မှ တစ်ရက် ရက် လောက် ပဲ ပဲ ဖုန်နးမနည်းဆက်းဆက် ရတာ….” ဟု ရှည် ည လ်ှလျှားစွာားစွာရှင်ငးပြလိ်ု က် မှ မှ ၂ယောက် သား အနည်းငယ်းငယ် ကျေနပ် သွ သားဟန်ွဖြင့်ခေါင်းညိ တ် နေလေသည် …။ “လွန်န့်ခဲခ တဲ့ ၇နှ စ် က ကိ စ္စ ကိုရှင်ငးပြရမယ်ဆိုရင် ရင်တော တော့ငါ ဒီ စည် လောက် နဲ့  ရမှာမဟု တ် ဘူး…. အပြင်းကစ် မှ ရလိ မ့်မယ် … မင်းတိုက့  နားထောင်ချင် တယ် ချင် တယ် ဆိုတော တော့ငါ ကို့ ၀ိုင်ငးက်ူကြပေါ့…. …. မကောင်းဘူးလား….” “ဟာ…. ဟေ့ ကောင်တွေ တွေ…. …. မင်းတို့ ကွဲပြဲနေဦးမယ် နေဦးမယ် နော်…. ငါ.. မင်းတိုကိ့ုထမ်းမပို့နိနင်င်ိဘူ ဘးနောူ် ….” ဟု ကျေ်ာမြက အလန် တကြာ့း  ထပြောလာရာ… “စိ တ် ချပါ…. ယောက် ဖရာ…. ဖရာ…. ငါတို့ အရှိန်နနဲန်ဲနဲနလေးေဲ လး ထပ် တင် ယုံပါ…. မင်းလည်းး ချလေကွာနော ချလေကွာနော်…” ဟု သူပြောလိ ပြောလိုက် ရာ…. “ဟာ… တော်တော်… ငါအပြင်းမသောက် နိုင်ငဘူ ဘ်း…ူမင်းတို့ဘာသာ ဘာသာ သောက် ကြ…. မူးရူးအောင်တော တော့မသောက် နဲ့ … ဒါပဲ….” ….” ဟု စိ တ် မပါလက် မပါလက် မပါ မပါ သဘောတူညီ ညချက် ချီက် ရသဖြင့်သူ လည်းး ၀ိ တ် တာလေးကိ တာလေးကို… “ညီလေး… လေး… ကိုယ် တိ တိုကိ့ုCHIVAS တစ် လုံး… ခွ က် ၃ခွ က် … ရေသန် တစ့်  ဗူဗး…ူရေခဲ တစ် ပွဲ… ပေးကွာ….” ဟု လှ မ်းမှာရင်း… “ဒီ လိုကွ………..” ………..”
--------------×--------------------×----------------×---------------------အချစ် တက္က အချစ် တက္ကသိ သုလ်ိ
ငါ့ မှာသုံးရာသီးရာသီ ကိုတစ်ရက် ရ က် က် စွ စွန်နးတဲ့်အထိ အထိ… မင်းရဲိမ်တွေ တွေနဲန ပဲ့ဲ့းရဲ မိုမးတိ သာယာနေမိ တယ် …။ …။ ကောင် မလေးရေ… မလေးရေ… မလေးရေ ရ… မင်းဘယ် တော့ရွာချလိ မှာလဲ…. ….ာချလိုက် မှြေ မကြီ မကြးထဲီက သံယောဇဉ် ယောဇဉ်အြ အ မစ်ြ မစ်တွေ တွေြေ အြ အိ ပ် မက် နဲ ပဲ့  စိုစိ စွ တ် နေရပေါ့... .....။.။ တမ်းတခြင် ပေါင်ငးမြက်မက် တွေနဲန့ဲးတြ ခင်းပေါြး ငါ့ရင် ဘတ် ဥယျာဉ် အပ အပျက် ဟာ ဟာ ရင်ဘတ် အသက် ကိ ကိုတစ် တစ် ၀က် ပဲရူရနေ ၀၀ က် ပဲေူ န၇ န ၇တာ ၇၇ တာ ကြာပြီြ ကာပြီြြ …။ …။ (ချောင်းကြည် ချောင်းကြည့်တတ် တတ် သူ တစ် တစ်ယောက် ယောက့် ရဲည… မင်းခိုက် စိုစိးစန်) (ချောင်းကြည် ည…။ …။ မင်
ခပ် မတ် မတ် မတ် စတိ စတိုင်င် ခရမ်းရင့် ရောင် ရောင် ၀မ်းဆက် ဖြင် ဖြင့်လမ်းလျှောက် လာနေသော လာနေသော သူ မကိုကြည့် ရသည် ရသည် မှ မှာဂရိ (mythology) နတ် ဘုရားမ ရားများ ပုံပြင် ထဲ မှ အပရိုဒိဒ က်ိ(aprodite) ဟူသော သော အလှနတ် နတ် ဘုရားမ ရားမ ကမ္ဘာပေါ်သိ ပေါ်သို့ အလည် လာရောက် ပုံပုနှနင့် င်ှတောင် တောင် တူနေလေသည် နေလေသည် …။ ဓာတ် တိ တိုင်င် ၃တိုင်င် အကွာသို့အရောက် အရောက် သူ ကားထဲ တွင်င် ထိုင်င်နေရာမှ နေရာမှ တံခါးဖွ ခါးဖွ့ င်င် ထွ က် ကာ ကာ ဘောင်းဘီအိ အ တ်ိထဲ ထဲ မှ ပီကေတစ် ကေတစ်ခုခ ကို ထု တ် ကာ ကာ ၀ါးလိုက် ပြီ ပြီးစောင့် နေလိ နေလိုက် သည် …။ သူ ကိ့ုအမြင် အမြင် မှာတုန်န ကနဲ့် မဆိုစလောက် တစ်ချက် ချက် ဖြစ် ဖြစ်သွ သားပြွီး လွ ယ် လွ ယ် ထားသော ထားသော အိ တ် ရဲ့ကြိုးကိုတင်းတင်းဆု တ် ကိ ကိုင်င် လိုက် တာကိ တာကိုသူ သတိ ထားမိ လိုက် သည် …။ “ဟိ တ် ….” အနားသို့ သူ မအရောက် သူ ပါးစပ့်  မှ အသံဘယ် ဘယ် လိ လိုထွ က် သွားမှန်န်း မသိ လိုက် …။ ဒါပေမဲ့ထွ က် သွားပြီ…။ …။ သူ မကတော့ထုံးစံအတိ အတိုင်င်း ယောင် လိုမှ့  လှည် ည့မကြည့််...။ ...။ သူ ကိ့ုလမ်းဘေးမှာံပု မှန်နရှိရ် သှောသော ကြော်ငြာဆိုင်ငးဘ်ုတ် လောက် တောင် သဘောထား ဂရု စိုက် ပုံပု မရ…။ ရတယ် လေ ကိ စ္စ မရှိပါ…။ ဆတ် ကနဲ ကနဲ သူ သူ မလွ ယ် ထားသော ထားသော အိ တ့် ရဲ ကိုင်ငးကြိ်ုးကိုနောက် မှ မှ အသာလှ မ်းဆွဲလိုက် သည် …။ “တောက် ….” ဟာ… မိန်နးမတစ်ယောက် ယောက် တောက် ခေါက် သံ သူ တစ်သက် သက် နှင့် င် တစ် ကိုယ် သေသေချာချာ မကြားဘူးပါ…။းပါ…။ ဒါပေမဲ့ခု ကြား ဘူးရပြီ ဖြစ်သည် သည် …။ အသံနှနင့် င်ှအတူ အတူ စူးကနဲ အကြည့် နှန့ှင်ငအတူ အ်တူ ချာကနဲ လှည် ည့ကြည့်် လိုက် သော အကြည့်က နဂါးမလေး သာဆိုသူ ချက် ချင်းချင်းပြာဖြစ်သွ သားလောက်ွသည် …။ “ရှင်င် ဒါဘာလု ပ် တာလဲ…. …. မိုက် ရိုင်ငးလ်ှချေလား…. ချေလား…. ဟင် …. မိန်နးမကလေးတစ်ယောက် ယောက် အိ တ် ကိ ကိုလမ်းပေါ်မှာ…. ဘာလဲ….. ….. အလစ်သု သ တ်ုမလိ မလိုလား….”့  စက် သေနတ် ပစ် လိုက် သလားပင်…။ …။ အင် မတန် ချစ် စရာကောင် ချစ် စရာကောင်းသော မျက် နှာလေးနှ့ င်င မှ် မလိုက် ထွ က် က ကျ လာသော ၀ါကျများက ဒါနှ င့် ဆိ ဆို ဒု တိ ယအကြိ မ်ိနှ ပ် ကွ ပ် ခြင်းပင်…။ …။
“Sorry ပါကွာ…. တိုမင့်းကိုအဲ လိုမှ လှ မ်းမဆွဲလိုက် ရင် မင်းကတိုကိ့ုသတိတောင် တောင် ထားမိ လိုက် မှ မှာမဟု တ် လိ လိုပါ…့  အဲ…. စောစောကပြောတာ ဘာတဲ့ …. …. အလစ်သု သ တ်ုမလိ မလိုလား…့  ဟု တ် လား… လား… အင်း… အလစ်သု သ တ်ုဖိုဖိ့ တော တော့မဟု တ် ပါဘူ ပါဘူး… အလု ပ်သစ် သစ် လု ပ် မလို့တော တော့ဆိုနိနင်ငိ မလားပဲ်….” ….” မတတ်ုနိင်င ပါ…။်ဒီ မိန်နးကလေ်းဒေါသထွ က် လာပု လာပုံမှာသူ့ အတွ အတွ က် တော့အင် မတန် ချစ် စရာ ချစ် စရာ ကောင်းသည် ဟု ဟု သူ ထင် သည် …။ သူ ကိ့ုမျက် စောင်းတစ်ချက် ချက်ုဒိင်ငးကန်ဲဆောင့်ထိုးရင်းသူ စကားကိ့ုလုံးဝအဖက် မလု မလု ပ် ပဲ ထွ က် သွားပြန် ပြီ ဖြစ်သည် သည် …။ ဒီ လိုတော တော့သူ ဒု တိ ယအကြိ မ် လွ ယ် လွ လွ ယ် နှင့် င် အရှုံးမပေးချင် ပါ…။းမပေးချင် ပါ…။ သူ နောက် မှ မှ ပြေးလိုက် သွားရင်း... “ဟား… ဖြေးဖြေးလျှောက် ပါကွ ပါကွာ…. ဘာလဲ… ဟိုမြို့ တော်ဝန် မာရသွန်န ပွဲ် အတွ အတွ က် ကျင့် နေတာလား… နေတာလား… ပန်းကလေးရာ…” ပန်းကလေး…။ ဟာ…ုမိ က် တယ် တယ် သူနှုန တ်ှုမှ မှ ဘယ် လိ လိုဖြစ် ပြီးခေါ်မိသွ သားလွဲသူ မသိ ပါ…။ ဒါပေမဲ့သူ သဘောကျမိ သွားသည် …။ ထိုစဉ် သူ မက ဆတ် ကနဲ ကနဲ လှ မ်းနေရာမှ ရပ်သွ သားပြွီး… “ဒီ မှာ… ကျွန် မဘာသာ…. န် မဘာသာ…. နှေးနှေးမြန် မြန် ရှင်င့ အပူ အ်ပူ တစ် ပြားသားမှ မပါဘူး…. နောက် ပြီ ပြီး… ရှင်င်… ခုနကလိ နကလိုကျွန် မကိ န် မကိုမခေါ်ပါနဲ့ုပိင်င စိုးပိုင်င်နင် နင်းနဲ့ …. …. ကျွန် မက န် မက ရှင်ငတွေေ် တွ့ ဘူ ဘးတဲူ့ အပေါစား မိန်နးမတွေ်ထဲ က မဟု တ် ဘူး…” ဒု တိ ယအကြိ မ် ရင်ဘတ် ဘတ် ထဲ ထဲ အောင့်ကနဲ ဖြစ်သွ သားမွိသည် သည် …။ ဒီ မိန်နးမန်ှင့် င် သူ ကတော့… “ဘာလိုလဲ့  … ပန်းကလေးရာ…. တိုက့  မင်းနဲ့  ခင်ချင် လိ ချင် လိုပါ….့  မင်းကလည်းး အသားလွ တ် မာနကြီးလှချေလား…. ချေလား…. တို့ လမ်းဘေးကကောင် မဟု တ် ပါဘူ ပါဘူး…” လှ မ်းနေရင်းမှ သူ မခြေလမ်းတို့ တုန်န ကနဲ့် ရပ်သွ သားရင်ွး သူ ကိ့ုတည့်တည့်မတ် မတ် မတ် ကြည့်လာရင်း… “ခင်ချင် လိ ချင် လို့ ဟု တ် လား…. လား…. ခင် ပြီးဘာလု ပ်ရမှ ရမှာလဲ… ခင် ပြီးရင် ရှင်င ကွ်ျန် မကိ န် မကိုရည်းစားစကားပြောမယ်းစားစကားပြောမယ် အဖြေတောင်းမယ် … နောက် ထပ် ထပ် ချစ် လိ ချစ် လိုပါ့  ဘာဖြစ် တယ် ညာဖြစ် တယ် ဆိုပြီးဟိုဟာလိုချင် တယ် ချင် တယ် ဒီ ဟာလိုချင် တယ် ချင် တယ် တွေ လာမယ် မှ မှ တ် လား…. လား…. ကဲ….” ….” ဟာ… သူ မ့ျက် နှာထပ် မံ ပြီးဒု တိ ယအကြိ မ် ဖြတ် ရိုက် ခံ လိုက် ရပြန် ပြီ ဒီ မိန်နးမတော့် ကွာ…. ဒီလောက် လောက် တောင် ဖြစ် လှ ဖြစ် လှ တာ သိ ကြသေးတာပေါ့…။ …။ စိ တ် ထဲ ထဲ မှရေရွ ရေရွ တ် ရင်း… “ဟာ… တိုက့  ခင်ံရုရုလေးထိ လေးထိ ပဲ တွေးထားတာ ခုချိချိ န်န ထ်ိသိ သ လား….ိပန်းလေးက အဲလောက် လောက် တောင် တို့နဲန ပက့်ဲ သက် ပြီ ပြီးကြိုတောင် တွေးထားတယ် ပေါ့… ဟု တ် လား….” လား….” မတတ်ုနိင်င ပါ…။်မိန်နးကလေ်းတစ်ယောက် ယောက် ကိ ကိုသူ ဒီ လိုနည် နည်းဖြင်းဖြင့်အနိုင်င မယ်ူချင် ပါ…။ ချင် ပါ…။ ဒါပေမဲ့ဒီ မိန်နးကလေးက့်ဒီ ပြင် မိန်နးကလေးတွေ်လိုမှ မဟု တ် ပဲ ပဲလေ…။ လေ…။ မှင်င်အနီ အနီရောင် ရောင် ရင့် ရင် ရ့ င် ဖြင့်ပက် လိ လိုက် သလိုမျက် နှာလေး ရဲ တွ တ် သွားပြီးပါးပြင် လေးနှ စ် ဖက် ပေါ်ရှိသွေးကြောစိ မ်းစိ မ်းလေးများ တဆတ် ဆတ် တုန်န်နေသည် နေသည် မှ မှာယခု ပင် ပြတ် ထွ ထွ က် သွားမည့် အလား...။ အလား...။ “ရှင်င…. …်. ရှင်င…” …်” သူ ကိ့ုလက် ညိုးထိုးရင်းတစ် ကိုယ် လု လုံး တုန်နခါနေသည် ခ်ါနေသည် မှ မှာချက် ချင်းချင်းလဲ ကျသွားမည် သွားမည့်အလားပင်…။ …။ သူ ဒီ လိုတော တော့မနေ နိုင်င ပါ…။်နောက် ရင် ထဲ မှာသနားကြင်နာခြင် နာခြင်းများ တလိ မ် တလိ မ့်လိ မ့်တက် လာသည် လာသည် မှ မှာသွေးကြောများ တု န်နခါလာသလိ ခ်ါလာသလိုပင်…။ …။ “ဆောရီးနော်… ဆောရီးပါကွးပါကွာ… တို့.... မင်းကိုစလိုက် တာပါ… တာပါ… ဘယ် လိ လိုသဘောမှ သဘောမှ မဟု တ် ပါဘူ ပါဘူး…. တစ် ကယ် ပါ… ပါ… တစ် ကယ် တောင်းပန် ပါတယ် …. ပန်းလေးရာ…. နော်….” သူ ကိ့ုဘာစကားမှ မပြောပဲ ဒေါသကြောင့်လား၊ ရှ က် ခြင် ခြင်းကြောင့်လား မသိ မျက် ရည် တိ တိုဖြင့့်ဝဲနေသော နေသော မျက် ၀န် ၀န်းတိုဖြင့့်စူးကနဲ ကြည့်ပြီးလှည် ည့ထ်ွက် သွားတော့သည် …။ သူ ထပ် မလိုက် တော့ပဲ နေရာမှာပင် ရပ် ကျန့် ခဲခတောေဲ တာ့သည် …။ သူ ထပ် မံ ပြီးသူ မလေးကိုစိ တ် ဒု က္ခ မပေးချင် တော တော့ပါ ဒီနေ့ နေ့အတွ အတွ က် ပေါ့...။ ...။ “ဆိုကြပါစိုကွ့ာ… ငါ ၄လ ၅လလောက် အသဲသန် သန် ကြိုး စားလိုက် တာ တာ နောက် ဆုံး… ငါနဲ့  သူနဲန့ဲ ချစ် သူ သတွေေူ တွ ဖြစ် သွား ကြတယ် …. ချစ် သူတွေ တွေ ဖြစ် ပြီးတော့တဲ့နောက် မှ မှာဘာသိ လာလဲဆိ ဆုတောေိ တာ့ဒီ မိန်နးမက်တော်တော်အတ္တ ကြီးတယ် ကွ ကွ… အချစ် တက္က အချစ် တက္ကသိ သုလ်ိ
နောက် ပြီ ပြီးတော့သူ မှန်န တယ်ထင် ထင်ရင် ရင် ဘယ် သူ မ့ျက် နှာမှ မထောက် ဘူး… အထူးသဖြင့်သူ့ အမေ အမေ အဒေါ် အဖွားတွေ က အလိုလိုက် ထားတော ထားတော့သူ့ အိ အ မ်ိ မှာသူုဗိဗ လ်ိပဲ ပဲပေါ ပေါ့ …” သူ စကားကိုခဏနားလိုက် ရင်းအရက် ကိ ကိုတစ်ငုံငုမော မော့ လိုက် သည် …။ ရေတောင် မသောက် ချင်တော ချင် တော့…။ အထူးသဖြင့်ဒီ မိန်နးမနှ့်င်င် ပက် သက် လှ လျှင် အရက့် ရဲ ပြင်းရှ မှုတောင် လိုက် မမှ မမှီ…။ …။ “အင်း…. ဆက် ပါဦး…” ပါဦး…” ကျေ်ာလင်းက စိ တ် ၀င် ၀င် စားစွာဖြင့်စကားထောက် ပေးသည် …။ “ငါတို့ ၂နှ စ်လောက် လောက် ချစ် သူ သတွေေူ တွအဖြစ် အဖြစ် အဆင် မပြေစွာနဲ့ နေပြီ နေပြီးလက် ထပ် ထပ် လိုက် တယ် တယ် … မာမီ တို့၊ ဒက် ဒီ တိုကတော့  ဘာမှ မပြောပါဘူး… တို့ငှငားထားတှဲ့ အိ မ် ၃ လုံးထဲ က တစ် လုံးကိုကြိကု တာယူ တာယူ လိုက် ဆိုပြီးလက် ဖွဲဖွ တယ့်  …. အေး…. ပြဿ နာက မင်္ဂ လာဦးညမှာစတက် တော့တာပဲ….” ….” “ဟေ…. ဘယ် လိ လိုဖြစ် တာလဲ…. …. လု ပ် ပါဦး….” ဒီ တစ်ခါတော ခါတော့ငြိ မ် ပြီးနားထောင်နေသော နေသော အောင် ၀င်းစိုးပါ စိ တ် ၀င် ၀င် တစား မေးလာသည် …။ “ဟင်း….” သူသက် သက် ပြင် ပြင်းပဲ ချလိုက် မိ မိသလား၊ သလား၊ သက် ပြင် ပြင်းချဖိုပဲ့  ဆုံးဖြတ် လိ လိုက် တာလား တာလား ဝေခွဲမရ…။ “မင်္ဂ လာဦးညမှာသူ့ အဘွ အဘွားနဲ့  သွားအိ ပ် တယ် ကွ ကွာ… တစ်ခါမှ ခါမှဲခွ မအိ ပ် ဖူးဘူးတဲ့ …. …. ကဲ….” ….” သူ မပြောချင် ပါ…။ မပြောချင် ပါ…။ အထူးသဖြင့်ဒီ မိန်နးမနဲ့် ပတ် သတ် ပြီ ပြီးသူမေ့ မေ့ ထားခဲ့တာ ကြာပြီ ဖြစ်သည် သည် …။ “ဘာ… ဘာပြောတယ် … ဟား..ဟား… မင်းညစာ ငတ် သွားတာပေါ့…. …. ဒါဆု…” …ိ” ကျေ်ာလင်းရဲ့လှောင်ပြောင် ပြောင် မှု ကိုတောင် တောင် သူ ပြန် ပြီးမတုန်န ပြန့်် ချင် ချင် တော့ပါ…။ သူချစ် ပါသည် ချစ် ပါသည် …။ ချစ်ခဲ ချစ့် ခဲ ပါသည် …။ တစ် ကယ် ကိ ကိဲုစွ လန်းမြတ်ုနိးစွာဖြင့်ကိုရိုးရိုးသားသား ချစ့် ခဲခ ပါသည်ဲ…။ ဒါပေမဲ့မယုံကြည်ုနိင်င် လောက် အောင် အံ့သြမှု များစွာနျှားစွာနှင့် င် သူ ကျရှုံးခဲ့ ရပါသည် ရပါသည် …။ အချစ် တစ် အချစ် တစ်ခုခု သက် သက် ဖြင် ဖြင့်ဘ၀ကိုတည် ဆောက် မရ မရ ဆိုတာကိုလည်းး သူ ဘ၀နှ့ င်င် ရင်းပြီးမှ နားလည့် ခဲရပါသည် ရပါသည် …။ ထိုမျှလောက် အတ္တ ကြီးသည့်ချစ် သူ သ၊ူ ဇနီးသည် မ မျိုး နှင် နှ့ င် ဆုံတွေ တွေ့ ရလိ ရလိ မ့်မည် ဟု လည်းး သူ မမျှော် လင့်ခဲခဲပါ…။ အဆိုးဆုံးက သူ့့ ရဲရဲသိ သ က္ခိာနှင့် င် ကိုယ် က ကျ င့်  င် တရားကိ့ုထိ ပါးလာခြင်းပင် ဖြစ်သည် သည် …။ သူ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကောင်းသည် ဟု ဟု မကြွေးကြော်ခဲ့ပါ…။ အိ မ်ထောင် ထောင် ကျသည့်အချိန် အချိ န် မှ စကာ သူ အရာရာကိုသူ မအတွ က့် ငဲညှ ညှာ ထောက် ထားကာ ထားကာ စွန်န လွှ့် တ့် ခဲ ပါသည် …။ ဒါပေမဲ့သူ ပြန်ရခဲ ရ့ ခဲ ခြင်းက သူ့ နားလည် နားလည် ပေးမှု များနှ င့် င် ဆန် က့ျင် စွ င် စွာ...။ “အဲ့ ဒီဒီနောက် နောက် ရော သူငယ် ငယ် ချင်း…” ချင်း…” ကျေ်ာလင်းက စာနာစွာမေးလာသည် …။ အောင် ၀င် အောင် ၀င်းစိုးကတော့ခေါင်းကိုတဆတ် ဆတ် အသာငြိ မ့် ရင် ရင်းနဲ့  နားထောင်နေ နေ သည် …။ ကျေ်ာမြတစ်ကောင် ကောင်သာ သာ ဘာမှ မပြောပဲ လက် ပိုပိ က် ကာ ကာ သူ တိုကိ့ုကြည့် နေလေသည် နေလေသည် …။ သူသက် သက် ပြင် ပြင်းတစ်ချက် ချက် လေးကန် စွာချရင်း…ာချရင်း… “အင်း… သူ က ငါနဲ့  ယမင်းကိုစွ ပ် စွဲတယ် လေ…. ယမင်းက အဲဒီဒချိန် ချီိ န် မှာငါ ထက့်တောင် တစ်နှန စ်ှ လောက် လောက် စောပြီးအိ မ်ထောင် ထောင် ကျသွားတာ သွားတာ မဟု တ် လား… လား… ငါရှင်ငးပြပါတယ်ဒီကောင် ကောင်ကေ ကျေ်ာ မြရောပေါ့… ဒီကောင် ကောင့်လည်းး အလိုတူ အလိုပါ ဆိုပြီးစွ ပ် စွဲလို့ နောက် ဆုံး ဘယ် လိ လိုမှ ညှိနှိုနှုင်ငးလိ်ု့  မရတဲ့ အဆု အဆုံး ငါတို့ လမ်းခွဲလိုက် ကြတယ် ကြတယ် လေ… နောက် … ငါ ဟန်နီနီနဲန့ဲ တွေ တယ့်  …. ဒါပဲလေ… လေ… ဒါပဲပေါ ပေါ ကွ့ာ…” သောက် ထားသည် ထားသည့်အရက် က က မများပါ…။ ဒါပေမဲ့သူ့ ခေါင် ခေါင်းထဲ တရိ ပ်ရိရ ပ်ိ တက် လာနေသလိ လာနေသလိုသူခံခ စားနေရသည်ံ…။ “ဟင်း… ဟင်း… မင်းဆီ က ဘယ် လိ လိုလှေ လျှော် ကြေး တောင်းသွးသွားသလဲ… ဘယ် လောက် တောင် တောင်းသွားသလဲ ပါ ထည့် ပြောလိ ပြောလိုက် လေကွာ….” ပထမဆုံးအကြိ မ်အဖြစ် အဖြစ် တစ်ချိန် ချိ န် လုံးငြိ မ်နေသော နေသော ကျေ်ာမြထံ မှ စကားသံ ထွ က် လာသည် လာသည် …။ အချစ် တက္က အချစ် တက္ကသိ သုလ်ိ
“ဘာ… ဘယ် လိ လို… လျှော် ကြေးဟု တ် လား… လား… ဘယ် လိ လိုလှေ လျှော် ကြေးလဲ… ဟေ့ကောင် ကောင် နေကြး…ီပြောစမ်းပါဦးကွ…” …” အောင် ၀င်းစိုး၏ စိ တ် ၀င် ၀င် တစား မေးသံ ထွ က် လာသည် လာသည် …။ သူ မပြောချင် တော တော့ပါ…။ အကူညီ ညတောင်ေီ တာင်းသလိုကျေ်ာမြကိုသာ လှ မ်းကြည့်မိသည် သည် …။ “ဘယ် လိ လိုလျှော် ကြေးရမှာလဲ ကွ… သူ တို့ရဲ့ ရဲ ဘိုးဘွားပိုင်င် ဓမ္မစေတီ စေတီ လမ်းက အိ မ် ကြီးရယ် … သူ့ အဖွ အဖွားဝတ် ခဲ့တဲ့ပတ္တ မြား ဘယက် ကြီ ကြီးလေကွာ… တော်တော်မျက် နှာပြောင် တိုက် တဲ တဲ့မိန်နးမကွ်ာ… ချီး… ချီး… ငါမပြောချင် ဘူ ဘး….ူတော်ပြီ.... တော်ပြီ…. …. ဒါပဲ…. …. မင်းတိုလည့်းး ဒီအကြောင် အကြောင်းထပ် မမေးနဲ့ တော တော့….” ကျေ်ာမြရဲ့ဒေါသသံနှန့ င်င်ှအတူ အတူ ဖြေရှင်ငးချက်အဆုံး အားလုံးခဏမျှတိ တ် တ် ဆိ တ် သွားကြသည် …။ ကျေ်ာလင်းရဲ့တိ တ် ဆိ တ် မှု မှု ကိုဖြိုခွဲ သော သော စကားသံနှန့ င်င်ှအတူ ခြောက် သွေ့ သွ သားသွောစကားဝိုင်ငးက်ပြန် လည် အသက် ၀င် ၀င် လာသည် …။ “ကဲ…. …. ဟု တ် ပါပြီ ပါပြီ… ထားပါတော့... မင်းကရော ဘယ် နေ့ ပြန် မှာလဲ…. …. ဘာတွေ စီ စဉ် ထားလဲခုခ….ု…. လု ပ် ပါဦး….” “နောက် တစ် တစ် ပတ် ထဲ ထဲ မှာပြန် မယ် လေ… သူ တိုလွှ့  တ် တဲ တဲ့နေရာကို… ဒါပေမဲ့ … ဒီ တစ်ခါက် ခါက် တော့ငါ အလု ပ် ထွ က် လိ လိုက် တော့မယ် ကွ ကွာ…” “ဟေ... ဘာလိုတု့  န်နးဟ….”်သူ ကျေ်ာလင်းကိုလက် ကာပြရင် ကာပြရင်း… “နေပါဦး… ငါ့ စကားတောင် မဆုံးသေးဘူး… ငါမပြန်ခင် ခင် မှာဟန်နီနနဲနီ့ဲ လက် မှ မှ တ် ထိ ထိုးသွားမယ် … အလု ပ် ထွ က် မယ် မယ် … ပြန် လာမယ် …. မင်္ဂ လာပွဲလု ပ် မယ် …. နောက် မြန် မာပြည် မှ မှာပဲ အခြေချမယ် … အဲ လိုစိ တ် ကူ ကူးထားတယ် … အဲဒါ ဒါ မင်းတိုကိ့ုပြောရင်းသက် သေနေရာမှာလက် မှ မှ တ် ထိ ထိုးဖိုပါ့  ခုပြောတာ….” ပြောတာ….” သူ့ ရှရည် ညှလ်ှလျှားသော စကားသံ အဆု အဆုံးမှာ“ဟာ…ုမိ က် တယ် တယ် …. ဂွ တ် … ဒါဆိုငါတို့ တူ တူ ပြန်ဆု ဆံလို့  ရပြီပေါ ပေါ ကွ့ချီးယားစ် ချီးယားစ်….” ….” ဟု အောင် ၀င်းစိုးက ပြောလည်းပြေားပြော လက် ထဲ ထဲ မှ ဖန်ခွခ က်ွကိ ကိုပါ မြှောက် လိ လိုက် သည် …။ “ဟင်… နေပါဦး ဒီအရက် အရက် သမားကလည်း….း…. လက် မှ မှ တ် ဘယ် နေ့ ထိုးမှာလဲတောင် တောင် မသိ တာ… သောက် ဖိုဖိ ပဲ့  ….” ….” ကျေ်ာလင်းရဲ့နှိပ် ကွ ပ်သံ သနှနံ င့် င်ှအတူ အတူံရှု မဲ့ သွ သားသွောအောင် ၀င်းစိုး မျက် နှာကိုကြည့် ရင် ရင်းသူအနည် အနည်းငယ်းငယ် ပြန် လည် လန်းဆန်းလာသည် …။ “အင်း… ငါက စနေနေ့ သွားမှာဆိုတော တော့... ကြာသပတေးနေ့ ၁၀ နာရီ မှာပန်းဆိုးတန်းက တရားရုံးမှာလက် မှ မှ တ် ထိ ထိုး မယ် လေ… ဟိုမှာဒက့် ဒီ မိ တ် ဆွေ တရားသူ ကြီးဦးဇော်ရဲ ကိုချိန် ချိ န်းထားတယ် …” သူဆက် ဆက် ပြီ ပြီး… “အဲဒါ… ဒါ… မင်းတို့ ၉ နာရီဲခွခွလောက် လောက် အရောက် လာခဲ လာခဲ့ ပေးလေ…. ပေးလေ…. နော်….” သူပြောပြီ ပြောပြီးသည် နှ့ င်င် “ဟား… ဟား… နောက် တစ် တစ် ပွဲပေါ ပေါ့ ...” ...” အောင် ၀င်းစိုးရဲ့ဝမ်းသာအားရ အသံနှနင့် င်ှအတူ အတူ ကျေ်ာမြ၏ မျက် စောင်းလှ မ်းထိုးလိုက် ပုံပု ကိုကြည့်ကာ သူသဘောက သဘောကျ စွာစွာရီ လိုက် မိ မိသည် သည် …။ “ဟား…. ဟား….. ဟု တ် ပါပြီ ပါပြီ….. ….. ကဲ…. …. ချီးယားစ် ချီးယားစ်….” ….” ဒါပဲလေ လေ ဒါပဲပေါ ပေါ့ သူဒီဒ တစ်ီခါတော ခါတော့ကံကောင် ကောင်းမည် ဟု ဟု မျှော် လင့်ပါသည် …။ --------------×--------------------×----------------×----------------------
“ဘ၀ ““ဘ၀” ဘ၀”” ဆိုတာ… တာ… အချစ့် ရဲရဲ လက် ပါးစေလားကွ ပါးစေ လားကွ ပါးစေလားကွ ယ် …။ …။ အချစ် သီ သဆိ ဆီုရာသီ ရိာသီချင်းချင်းချစ် သူ သ တိူု့ ၏ရင်ု့  ၏ရင် တွင်ငးသိ သက် ဆင်းခိုဝင်ေ် စရန်၊ ၀၀င်ိနုနင်ငု စေရန် အသံ မဲ့ဂီဂီ တတစ် တတစခုခ်ုပြု ပုပ်ုဖန်ဆင် ဆင်းပေးတေားပေးတေ်ာ မူ ပါြြြြ လ ပ်းပေးတော ဘုရားသခင် ရားသခင်…..။ …..။ ….. (အချစ် သဆိ ဆီုရာသီ ရိာသီချင်း) ချင်း) ချင်းခြောင် ချင်းခြောင်ြးေ ခာင်းခြံ။ (အချစ် သီ ချင်းး) မောင် လှ မျိုး၊ ချင် ချင်ြးေြးေ
သူ တိုက် အောက် မှ မှာကားထိုးပြီးသည် နှင့် င် အောက် ထပ် ထပ် မှ ဟန်နီန တီု့ ရှိရရှာရာ အထပ် ဘဲ လ် ကိ ကိုတီးလိုက် သည် …။ အင် တာကွန်နးမှ်… “ကိုလား… ဟန်နီနီခုခဆင် ဆုင်းလာပြီ…. …. ခဏလေးနော်….” ဒီ မိန်နးကလေးအသံ်၊ သူ ကြားလိုက် တိ တိုင်င်း အမြဲရင် ရင် ထဲ မှာရေခဲ မြစ် တစ် စင်းစီးသွ စီးသွားသလိုခံ စားမိ မြဲ…။သူ …။သူ ကားရပ် ထားရာသို့ ပြန်လှေ လျှောက် သွားပြီးဘေးနားမှာရပ်စောင် စောင့် နေလိ နေလိုက် သည် …။ တိုက် ပုံပုဘေးအိ ဘေးအိ တ် ထဲ ထဲ မှ ဖုန်နးကိ်ု ထု တ် ကာ ကာ ကျေ်ာမြနံ ပါတ် ကိ ကိုနှိပ် လိုက် သည် …။ ခဏမျှစောင့်လိုက် ရင်း… “အေးပြော ကျေ်ာခန့် ….” ….” “ယောက် ဖ ဖ မင်းသွားနေပြီ လား…. ငါခု ငါ ခု ဟန်နီန တီု့  တိုက် အောက် ရောက် နေပြီ… နောက် မိနစ် နစ် ၂၀ ၂၅ မိနစ် နစ်လောက် လောက် ဆိုရောက် ပြီ ပြီ…” …” “…..….” “အေးပါ… မကြာပါဘူး… ဟိုကောင် ကောင်တွေ တွေရော ရော ရောက် ပြီ ပြီ လား…. အောက် မှ မှာပဲ ခဏစောင့် နေလိ နေလိုက် နော်….. အေးအေး…. အန် ကယ့်ကိုလည်းး လာပြီ လို့နော နော် ….” သူ ဖုန်နးချလိ်ု က် ရင်းလှေခါးဝဆီ ခါးဝဆီ လှည် ည့် အကြည် အကြည့်တွင်င် စိ မ်းလန်းနေသော ဟောဒီ့မနက် ခင်းမှာအရာအားလုံး လန်းဆန်းသွားသလိုပင် ပန်းရောင် ၀မ်းဆက် ဖြင် ဖြင့်နတ် သမီးလေးတစ် ပါးကိုမျက် ၀ါးထင် ၀ါးထင် ထင် မြင် လိုက် ရသလိုပင်…။ …။ “ဟား… လှ လိုက် တာ… တာ… ဟန်နီနရယ် ရီ ယ် … ကို့ချစ် ချစ် သူ သူ ဒီလောက် လောက် လှ လှ မှန်နးကိ်ု ခု မှ ပဲ သေသေချာချာ သိ တော့တယ် ….” သူ မနေနိုင်င စွ်ာပင် ထု တ် ပြောလိုက် မိ မိသည် သည် …။ “တော်ပါ…. ကိုယ့် ငါးချဉ် ငါးချဉ် ကိုယ် ချဉ် နေပြန် နေပြန် ပြီ…. …. အပိုတွေ တွေ ကိုကလေ…” မဲူနွန စွ့ွာပြောလာသော ချစ် သူ သလေးကိေူ လးကိုသိ ပ် မကြာခင်အချိန် အချိ န် မှာဖြစ် လာတော့မည့်ဇနီးလေးကိုသူ မြတ်ုနိးစွာကြည့် ရင် ရင်းကားတံခါး ခါး ဖွ့ င်ငပေးလိေ် ပးလိုက် သည် …။
“ကဲ…. …. ချီးယားစ် ချီးယားစ် ကွာ…. ဒီ လင်ဒီဒ မယာီးအိုအောင် အောင် မင်းအောင် ပေါင်းနိုင်င ကြပါစေ…”်ကျေ်ာလင်းရဲ့စကားသံအဆု အဆုံး လေထဲခွခ က်ွလေးခွ က် ထိသံ သံ ထွ က် ပေါ်လာသည် …။ သူ လည်းး လက် ထဲ ထဲ မှ လက် က ကျ န် ခွခ က်ွကိုအပြီးသတ် လိ လိုက် ရင်း…. “ကဲ…. …. သူငယ် ငယ် ချင်းတိ ချင်းတို့ ကျေးဇူးအရမ်းဇူးအရမ်းတင် တယ် ကွ ကွာ… မင်းတို့အားလု အားလုံးကိုနော နော် …. ဒါအကြိုပဲလွို ပဲ့  သဘောထားပေါ့…. …. ငါ ဟိုက ရှင်ငးစရ်ာလု ပ် စရာလေးတွေ ပြီးလိုပြန့်  လာရင် မင်္ဂ လာပွဲကြမှ အကွဲသောက် သောက် ကြပေါ ကြပေါ ကွ့ာ… နော်….” သူပြောရင် ပြောရင်းထရပ် လိုက် သည် …။ အောင် ၀င်းစိုးက… “ဟ… ဟ… နေပါဦးကွ…. …. မင်းတိုက့  ပြန်တော တော့မလိုလား….့  ခု မှ နေတောင် မစောင်းသေးဘူး…. ဟင်း.. ဟင်း… နာ သိ တယ် နော်… ဟင်း… ဟင်း…” “ဟာ…. ကိုအောင် အောင် ၀င်းစိုးကြီးကလဲ.... .... သွား… ဘာမှန်နးလ်ဲမသိဘူ ဘး….”ူနီနီနရဲရီဲရဲရဲ မျက် နှာလေးဖြင့်ဟန်နီန ကီအရှ က် သည်းစွးစွာဆိုမှ…. …. “ဟာ… ညလေး… ချောရီး… ချောရီး… ဟီး… ဟီး… ငါ.. နင်ိရှရ မှ န်န်း သတိတောင် တောင် မရဘူး…” ဟု တဟီးဟီးဖြင့်ရီနေလေတော နေလေတော့သည် …။ ကျေ်ာမြက ထုံးစံအတိ အတိုင်င်း မျက် စောင်းကြီးထိုးရင်း… “ဘယ် သတိရမလဲ ရမလဲ အရက် သမားရဲ့ … မူးနေတာကိုး…. ကြွ က် တွ တွင်ငးရဲ့် ရေတံလှေ လျှောက့် ရဲ….” ….” ဟု အားမနာတမ်ိးနှ ပ် ကွ ပ်လေတော လေတော့သည် …။ အောင် ၀င်းစိုးက ဒီ တစ်ခါတော ခါတော့ငြိ မ် မသွားပဲ သွားဖြဲရင် ရင်းမှ… “ဟေ့ ရောင် ကျေ်ာကြီး…. မင်းကိုငါ ငါ ကြည့်ကြည့် နေတာသိ နေတာသိ လား…. မင်းတစ်နေ့ နေ့ တစ် ခြား မိန်နးမကြီ်းနဲ့ုပိ ပိုတူ လာတယ် …. မင်းမိန်နးမ်မယူတော့ တော့ဘူ ဘးလား….ူဟီး… ဟီး….” “ဘာကွ…. …. ငါ့ဘာသာ မိန်နးမယ်ူယူ မယူ ယူ မင်းအပူ လား…. အရက် သမား…. မင်းနဲ့ ဘာဆိ ဘာဆိုင်င လဲ်…. …. ငါ ဟန်နီန့ီ ရှေ့မှ့ မှာမို့ လို့နော နော် …. မင်း…” “ကဲ…. …. ကဲ…. …. တော်ကြပါတော့ကွာ… မင်းတို့နှန စ်ှ ကောင် ကောင် ကလဲ သူ များ မင်္ဂ လာယူ မင်္ဂ လာယူနေတာ…. နေတာ…. ငါရေနဲ့  ပက် လိ လိုက် မယ် မယ် နော်…. ဟီး…” ကျေ်ာလင်းက မျက် နှာပိုးမသတ် ပဲ ပဲ မနေနိုင်င စွ်ာဝင် စပြန်လေတော လေတော့သည် …။ “ဟေ့ ကောင် ကျေ်ာလင်း… မင်း… နော် မင်း… ငါ ကို့ ခွေးနဲ့ နှိုနိင်ငးတယ်ပေါ့… မင်း..နော်…” “ဟာ… မင်းကလဲ… ငါက ခွေးနဲ့ှုနိနင်ငိးပ်ါမလား…့အလကားနေရင်းခွေးသိ က္ခာကျတယ် လေကွာ… ဟီး… ဟီး….” ကျေ်ာမြ မျက် နှာကြီးနီ လာရင်းမှ… “ဘာ….. ဘာကွ…. …. ဘာပြောတယ် … ကျေ်ာလင်း… ငဖောင်ရိုရး…ိပဲ လင်းမြွေ မသား… မင်းသေဖို့သာပြင် သာပြင်…” …” ဟု ပြောရင်းမှ ထလိုက် တော့မည့်ပုံပြင်သဖြင် သဖြင့်သူ လည်းး မနေနိုင်င်တော တော့ပဲ… “ကဲ… တော်ကြစမ်းပါကွာ… မင်းတိုကလည့်း…း… ကလေးလေးတွေ ကျ နေတာပ နေတာပဲ … ဟိုမှာဟန်နီနတောင်ေီ တာင် ရီနေပြီ နေပြီ…” …” “မင်းယောက် ဖ ဖ ၂ကောင် ကိုကြည့် ပြောထား… ပြောထား… ငါ တင်းလာပြီ… တွေ မယ့်  …. ဒီကောင် ကောင်တွေ တွေ….” ….” ဟု မကျေမချမ်းး ပွ စိ ပွ စိ ရေရွ တ် ပြီ ပြီးပြန် ထိုင်ငသွ သ်ားတွော့ သည် …။ သူ လည်းး ရီနေမိ နေမိရင် ရင်းမှ… “အေးပါကွာ... အေးပါ… ငါပြောပါမယ် ….” ဟု နှ စ်သိ သ မ့်ိ လိုက် ရသည် …။ ဒီသူ သငယ် ငူ ယ် ချင်းတွေ ချင်းတွေ ကတော့တစ် ကယ် ပါပဲ ပါပဲ…။ …။ ဟို၂ကောင် ကလည်းး ကျေ်ာမြဆိုအမြဲ စချင် ၊ နောက် ချင် ၊ ဒီကောင် ကောင် ကလည်းး မခံနိုနိင်ငနှန့် င်ငှ …။ …်။ “ကဲ… ဒါဆိုငါတိုပြန့်  လိုက် မယ် မယ် …. နောက် တစ် လ မင်းတို့နဲန့ဲ ပြန်ဆု ဆံမယ်ု… ကျေးဇူးအထူးဇူးအထူးပါ သူငယ် ငယ် ချင်းတိ ချင်းတို့….” ….” ဟု နှု တ် ဆက် ရင်းမှ သူ လည်းး ဟန်နီန လက့်ီ လေးကိုဆွဲပြီးထွ က် လာခဲ လာခဲ့လိုက် သည် …။ ကားပေါ်အရောက် တွ တွင်င်… “ကို့ သူငယ် ငယ် ချင်းတွေ ချင်းတွေ က အရမ်းရီရတယ် ရတယ် နော်… ပျော် စရာကြီး…” အချစ် တက္က အချစ် တက္ကသိ သုလ်ိ
ဟု ပြောလာသော ချစ်ဇနီ ချစ် ဇနီးအသစ် စက် စက် စက် လေးကိုသူ ပြုးကြည်ံ့ရင် ရင်းမှ… “အင်း… ဟု တ် တယ် တယ် …. ဒီကောင် ကောင်တွေ တွေ က ဒီ လိုပဲ ဟိုကောင် ကောင် ကျေ်ာလင်းက မျက် နှာရူးလေ… ကျေ်ာမြနဲ့  အမြဲ တကျက် ကျက် ပဲ ပဲ ပြီးတော့လည်းး ဘာမှ မဟု တ် ဘူး…” သူ ကားကိုမီးနီ တွင်င် ဘရိ တ် နင်းလိုက် ရင်းမှ… “ဟန်နီန…ီကြီးမေရော အိ မ် မှာလား….” “ဟင့် အင် အင်း…ကို… ကြီးမေ သူ့ သူ သငယ် ငူ ယ် ချင်းချင်းတစ်ယောက် ယောက် အိ မ် ထွ က် သွားတယ် …ညမှ ပြန်ရောက် ရောက် မယ် မယ် လိ လို့ ပြောသွားတယ် …” သူ မျက် နှာမချိုမချဉ် ဖြစ်သွ သားရင်ွး… “ဟာ… ကြီးမေက တစ် ကယ် အလိုက် သိ တယ် ကွ ကွာ…. ချစ် စရာ ချစ် စရာ ကောင်းလိုက် တာ….” တာ….” “ဘာလဲ…. …. ဘာအလိုက် သိ တာလဲ… ကိုနော နော် ….” ဟု ပြောလာရင်းသူ လက့်  မောင်းကိုလှ မ်းဆိ တ် လေသည် …။ “ဟာ…. ကားမောင်းနေတာနော် ကောင် မလေး…. အလားလား…” အလားလား…” ဟု သူပြောလိ ပြောလိုက် ရာ… “ဟွန်နး….်ဘာလဲ…. …. မသိဘူ ဘးမျူား ထင်နေလား…. ထင် နေလား…. ဒါကြောင့်ကိုအောင် အောင် ၀င်းစိုးကြီးက ပြောတာနေမှာ….” စူ ပု ပ် စွာပြောလာသော ကောင် မလေးကိုသူချစ် မ၀စွ ချစ် မ၀စွာငေးကြည့် ရင် ရင်း… “ဘာလဲ… ဘာပြောတာလဲ မသိဘူ ဘး….ူဟန်နီန….” …ီ.” ဟု မသိချင်ယောင် ချင် ယောင်ဆောင် ဆောင် ပြီးမေးလိုက် ရာ… “သွား… သွားမသိဘူ ဘး….ူဟွန်န့်….” ….” လူ့ ဘ၀တွ ဘ၀တွင်င် တစ် ကြိ မ်၊ ဒါမှ မဟု တ် ၂ကြိ မ် လောက် ကံကောင် ကောင်းတတ် သည် ဟု ဟု ဆိုပါလျှင် သူ ယခုအကြိ အကြိ မ် ကိုတစ် ကယ် ကံ ကံကောင် ကောင်းသည် ဟု ဟု ယူဆလိ ဆလိုက် ပါသည် ပါသည် …။ လောကကြီးက ဒီ တစ် ကြိ မ်တော တော့သူ ကိ့ုကံကောင် ကောင်းခွ့ င်င် ပေးမည် ဟု လည်းး သူ မှ တ် ယူ ယူ လိုက် ပါသည် ပါသည် …။ လွဲချော် မှုတွေ တွေ ကိုသူ ပင် ပန်းလှ့ ခဲခ ပြီဲဖြစ်သည် သည် …။ ဟန်နီန တီု့  တိုက် အရောက် ကား ကိုပါကင် ထိုးခဲ့လိုက် ပြီ ပြီးသူ လည်းး အပေါ်သို့ လိုက် တက် တက် ခဲ့လိုက် သည် …။ “ကို..ရော ..ရော့ …. ရေသောက် ဦးနော်…. ဟန်နီနီ ရေချုးလိးလိုက် ဦးမယ် ... ငြီးစီ စီ ကြီး….” သူ ကိ့ုရေတစ်ခွခ က်ွခပ်ပေးပြီ ပေးပြီးအနောက် ကိ ကိုဝင်သွ သားသွောဟန်နီန့ီ နောက် ကျောကိုကြည့် ရင် ရင်းသူ ငေးကြည့် နေမိ နေမိသည် သည် …။ သေးကျဉ် သောခါး၊ ပြည့်တင့်းလုံးဝန်းသော တင်၊ အောက် ဖက် တွ တွင်င် ပါးပြင်းရိ ပ် ထနေသော ပေါင် တံ များနှင်ျားနှ့ င် လိုလေးသေးမရှ လေးသေးမရှိလှ လွန်နးနေသော်ဇနီးချောလေးကိုကြည့် နေရင် နေရင်းမှ တစ် စုံတစ်ခုခ ကုဆွဲဆောင် ဆောင်ခံခရသူ ရံ သူ လိုသူအနောက် အနောက် ကိ ကိုထလိုက် သွားလိုက် မိ မိသည် သည် …။ ဟန်နီန တီု့ အိ အ မ်ိ မှ ရေချိုး ခန်းက ခန်းက သာမာန် တိုက် ခန်းတွေနဲန မတူ့ဲ စိ တ် တိ တိုင်ငးက်ျ ပြန် လည် ပြု ပြုပြင် ထားသဖြင် ပင် ထားသဖြင့်ရေချိုး ကန် အသေးစားလေးတစ်ခုခ၊ု နောက် ရေပန်းတိုဖြင့့်အတော်လေး ကျယ် ၀န်းလေ ၀န်းလေ သည် …။ အိ မ်သာကိ သာကိုသီးသန့်ဲခွ ထု တ် ထားသဖြင် ထားသဖြင့်လည်းး ဖြစ်ုနိနင်ငိ သည် သ်ည် …။ သူအပေါ်မှ အပေါ်မှ အ၀တ် မ များကိုဘယ် လိ လိုချွတ် ပစ် ပစ် လိုက် မှ မှန်နးမသိ်၊ ရေချိုး ခန်းခန်းတံခါးအ၀ကိ ခါးအ၀ကိုလက် ဖြင် ဖြင့်အသာတွန်နးလိ်ု က် ရာ ဟသွားသည် …။ သူ လည်းး အထဲ ၀င် လိုက် ပြီ ပြီးကြည့်လိုက် ရာ တံတွေ တွေးတောင် နင်သွ သားသလွို ဖြစ်သွ သားရသည်ွ…။ ကြည့် ဦးလေ ဦးလေ သူ မလေး လု ပ်နေပု နေပုံက မတ် တပ် တပ်ရပ် ရပ် လိုက် လှ လျှင် ဒူးဆစ်လောက် လောက် ရှိမည့်ရေချုးကန်ိးကန်လေးထဲ လေးထဲသိ သုိ့ ကုန်နးက်ာအမွှေးဆပ် ပြာ ထည် ထ ည့် နေပု နေပုံမှာလုံးဝန်းတစ်ရစ် ရစ်နေသော နေသော တင်သားနှ သားနှ စ်ခုခ၏ုကြားထဲ မှာသဖန်းသီးမှဲ့ရောင် ရောင်လေးက လေးက ဟတတလေး ဖြစ် နေသည် မှ မှာသူ့ ညီ ညလေးကိေီ လးကိုတောင် တောင် ချက် ခြင် ခြင်းဆတ် ကနဲ ကနဲ မတ် လာစေသည် လာစေသည် …။ သူအသာလေး အသာလေး နောက် သို့ခြေသံ ခြေသံ မကြားအောင် လျှောက် သွားပြီးညီလေးကိ လေးကိုအသာလေး ကြားလေးထဲ ထောက် လိ လိုက် မိ မိသည် သည် အထိ ကိုဖြစ်သွ သားစေသည်ွ…။ “အို… အမေ့…. …. ကိုကလဲ လန့် သွ သားတာပွဲ…..” …..” အချစ် တက္က အချစ် တက္ကသိ သုလ်ိ
ဟု မျက် လု လုံးလေး ပြူးကာပြောလာပုံလေးမှ လေးမှာအရာရာအားလုံးကိုမေ့လှေ လျှော့ သွားစေလေသည် …။ သူနှုန တ်ှုခမ်းနီ မပျက် သေးသော နီနီနီရဲရရဲရဲနှု တ် ခမ်းလေးကိုအသာလေးငုံပြီးစု ပ် လိုက် သည် …။ နောက် လက် တစ် တစ် ဖက် ကလည် ကလည်းး ၀င်းမွ တ် နေ သော နို့လေးတစ် လေးတစ် လုံးပေါ် ဆု ပ်နယ် နယ် လိ လိုက် ရင်း၊ လက် တစ် တစ် ဖက် က က တင်သားလု သားလုံးလုံးလေးပေါ် အသာလေး ပွ တ် သပ်ရင် ရင်းအကွဲကြောင် ကြောင်းလေး ကြားအတိုင်င်း စုန်နချီဆန် ခ်ျီ ဆန်ချီချီ ပွ တ် ပေးနေလိုက် သည် …။ မြန် ဆန် လာသော အသက် ရှုသံ သ မျာံးနှ့ င်င်အတူ အတူ သူ နမ်းနေရာမှ ခွာလိုက် ပြီ ပြီး၊ ဘောင်ပေါ်ကိ ပေါ်ကိုထိုင်င်ုခိခင်ငိးလိ်ု က် ပြီ ပြီးပေါင်နှန စ်ှ ချောင်းကိ ချောင်းကိုဆွဲကားလိုက် ရင်းလှ ပစွာခပ်ရိရ ပ်ိ ရိရ ပ်ိ လေး လေး ပေါက် နေသော အမွှေးစု စုလေးအောက် လေးအောက် မှ မှ အနီရောင် ရောင် စမ်းချာင်းလေးအတိးချာင်းလေးအတိုင်င်း လျှာကိုအပြားလိုက် လျက် တင် လိုက် သည် …။ “အ.. အာ….ီရှး…. ကို.... ချွေးတွေ နဲန့ဲ မရွံဘူ ဘးလားကွူာ… ရေဆေးလိုက် မယ် မယ် လေ…. နော်…” သူ စကားမပြန်နိုနိင်င ပါ…။်ခေါင်းသာ ခါပြလိုက် ရင်းလျှာကိုချွန် လိ န် လိုက် ပြီ ပြီးတွင်ငးဝလေးထ်ဲသိ သုိ့ ထိုးပြီးမွှေ လိုက် သည် …။ “အား…. အ…. သေပါပြီ ကိုရယ် ရယ် ….ီရှး…. အ… အ….” သူ့ ဆံ ဆ ပင်ံများကိုလက် နှ စ် ဖက် နှင့် င် တင်းတင်းကိုင်င က်ာညည်းညူးညူနေသံ က က သူ ကိ့ုအားပေးနေသလိုပင်…။ …။ သူအဆက် အဆက် မပြတ် အကြင်နာတွေ နာတွေ ပေးနေရင်းမှ၊ ခံ စားမှုပေါင် ပေါင်းစုံတို့ စုဝေးရာ ဝေးရာ ထိ ပ် ဖူးလေးကိုငုံပြီးခပ် ပြင်းပြင်းစု တ် လိ လိုက် ရာ… “အား… အ.. အ… ဘယ် လိ လိုလု ပ် လိုက် တာလဲ တာလဲ ကိုရယ် ရယ် ... ပြီး… ပြီး… ပြီ… အ… ရှီး… အ...” သူ့ ခေါင် ခေါင်းကိုပိုမိုတင်းကျပ် စွ ပ် စွာဆု ပ် ကိုင်င လာမှုနှနင့် င်ှအတူ အတူ သူ မလေး အထွဋ်ဋ ထ်ိပ်သိ သုိ့ ရောက်ိရှသွ သားလေသည်ွ…။ သူ လည်းး ထလိုက် ပြီ ပြီးပါးစပ် မှ ပေနေသည် မ များကိုလက်ံခုနှန့ င်ငှ သု သ်တ်ုလိ လိုက် ရင်း… “ကောင်းလား ဟန်နီန….”ီ….” “အိုး…. တအားပဲ…. …. အသက် ရှုတောင် တောင် မှားတယ် ….” ဟု သူ ပါးစပ့်  ကိုမျက် နှာသု တ် ပု ၀ါလေးနှင့် င် သု တ် ပေးလိုက် ပြီ ပြီး… “ဒီ တစ်ခါ ခါ ဟန်နီနအလှ အီလှည် ည့် နော နော် … ကိုမငြင်းနဲ့ နော နော် …” ဟု ပြောရင်းဒူးထောက် ထိ ထိုင်င်ချလိ ချလိုက် ပြီ ပြီး၊ သူ့ ညီ ညလေးကိေီ လးကိုပါးစပ်လေးဟကာ လေးဟကာ အသာလေး လျှာလေးပေါ်တင် ပြီာလေးပေါ်တင် ပြီးပါးလေးများ ခွ က် ကာ ကာ စု ပ် ယူ လိုက် လေသည် …။ သူချက် ချက် ခြင် ခြင်းပဲ ၀ဋ် လည် ခြင် ခြင်းဆိုတာကိုလက် ခံ လိုက် ရသည် …။ မျက် နှာလေး နီရဲရ လာအောင်ဲသူ့ ညီ ညလေးေီ လး ကိုစု ပ် ယူရင် ရင်းလျှာလေးနှ့ င်င် ဆီးထွ က် ပေါက် လေးကိုထိုးကစား လိုက် ချိ န်န မှ်ာတော့သူ့ ပေါင် ပေါင်ကြောမ ကြောများ ပင်နဆလင် ပင် နဆလင် ၅ သိန်နးအာ်းအထိုးခံ လိုက် ရသလို(ကျွန်တော န် တော်တော့အထိုးမခံဘူ ဘးဖူးနော်၊ အဲ လိုပဲ လို့ ကြားဖူးတာဆရာတို့ ဟီး…၊ ကြိကုာ ထားတာ၊ တော်ကြာ ဟိုလူ ကြီးကိုကြပ် က ယုံရတာမဟု ရတာမဟု တ် ဘူး၊ လာမေးနေမှာစိုးလို့… ဟီး…) တောင့်တင်းကာ အကြောများ တဆတ် ဆတ် တုန်နသွ သ်ားရတွော့ သည် …။ လျှာလေးနဲ့ာလေးနဲ့  သူ ကိ့ိုနှ ပ် စက် နေရင်းမှ လက် လေးတစ် ဖက် က က အောက် မှ မှ ဥကိုပွ တ် သပ်နေရာ နေရာ သူဘယ် ဘယ် လိ လိုမှ မခုံနိနင်င်ိတော တော့ပဲ အသစ် စက် စက် စက် ဇနီးလေး ပါးစပ် ထဲသိ သုိ့ ပန်းထွ က် ကုန်န်တော တော့သည် …။ “အားလား… ကောင်းလိုက် တာ တာ မိန်နးမရယ်… တစ် ကိုယ် လံ လုံးအကြောတွေ ဆွဲဖြတ် လိုက် သလိုပါပဲ လား….” သူ ပြောရင်းပခုံးလေးကိုဆွဲထူရင် ရင်းရေပန်းကိုဖွင့် င လိ်ု က် သည် …။ တစ်ဘက် ဘက် လေးကိုရေဆွ တ် ပြီ ပြီးနှု တ် ခမ်းလေးမှ ပေကျံ နေသည် နေသည် မ များကိုတစ် လှည် ည့် ပြန်သု သ တ်ုပေးလိုက် သည် …။ နောက် နှု တ် ခမ်းလေးကိုဆွဲငုံင လို က် ရင်းပေါင် ကြားလေးမှ အကွဲကြောင် ကြောင်းလေးကိုစမ်းကြည့်လိုက် ရာ ချွတဲ တဲ တဲလေးနှ လေးနှ့ င်င် အ၀လေးကိုစမ်းမိသည် သည် နှ့ င်င် သူ မလေး လိုချင်နေပြီ ချင် နေပြီဆိ ဆုတိာသိ လိုက် သည် …။ အသာလေး ပွ တ် ပေးပြီုးနိ့ လေး လေး တစ် ဖက် ကိ ကိုအားနှ့ င်ငငုံင် ကာုစု ပ် လိုက် ရာ… “အာ… အ.. ကို… ကို… ဟင်း…. ဘယ် လိ လိုစိ့ နေတာလဲ နေတာလဲ ကွာ….. ရင် ထဲ က အသဲတွေ တွေ… နှ လုံးတွေ…. …. ပြုတ် ထွ က် ကုန်နတောေ် တာ့မယ် ….” အချစ် တက္က အချစ် တက္ကသိ သုလ်ိ
နား နားကပ် ကာ တိုးညှင်ငးစွ်ာ ပြောလာရာ စောစောက ခဏမျှပင် ပန် ပင် ပန်းသွားသော ညီတော တော်မောင် က တဖြေးဖြေး ပြန် မတ် လာတော လာတော့သည် …။ သူုနိ့ လေးကိ လေးကိုစိ့ နေရာမှ နေရာမှ ရပ် လိုက် ပြီ ပြီးအသာလေး ဆွဲလှည် ည့က်ာပေါင်လေး လေး တစ်ချောင်းကိ ချောင်းကိုရေကန်လေးဘောင် လေးဘောင်ပေါ် ပေါ် ထောက်ုခိင်ငးလိ်ု က် ပြီ ပြီးလက် လေးနှ စ်ဘက် ဘက် ကိ ကိုရေချိုး ခန်းခန်းနံရံရ တွံင်င် ထောက် စေ လိုက် သည် …။ ထို့နောက် နောက် တဖြစ် ဖြစ် ဖြင့်တောင့်တင်းလာသော ညီတော တော်မောင် ကိုစိ စွ တ် နေသာ ၀တ် ရည် တွ တွင်ငးလေ်းအ၀ တွင်င် တေ့ လိ လိုက် ပြီ ပြီးအသာလေး ထိုးသွင်ငးလိ်ု က် ရာ စိုစွ တ် နေသာ အရှိန်န ဖြင့်် စီးပိုင်င စွ်ာတစ် ၀က် ခန့်  ၀င်သွ သားလေသည်ွ…။ “အား လား…. ဟင်း.. ဟင်း… ကောင်းတယ် ကိ ကို… အ… ဆက် သွင်ငးပါ…်အ…” သူ လည်းး အသာလေး အသွင်ငးထ်ုတ် လု လု ပ်ရင် ရင်းတဖြေးဖြေး ချော့ သွင်ငးရ်ာတနဲ့ နဲန ဖြင့်ဲ့အဆုံးတိုင်င် ဆီးခုံနှန့ င်င်ှကပ် မိသွ သားလွေတော့သည် …။ မဆောင့် သေးပဲ သေးပဲ စိ မ် ထားရင်းမှ အသာလေး ကပ်မွှေ မွှေပေးလိ ပေးလိုက် ရာ… “ကိုရေ…. ကို… အ… အ… ထိ တယ် …. ထိ တယ် ကွ ကွာ…. ဟင့် … ဟင့် ... ... အ…. ရှီး….” ခေါင်းလေးကိုမော့ လာကာ ညည်းညူးညူနေတာ ကြည့်ကြည့် ရင် ရင်း… စွိ….. ….. စွပ် ပ် ….. ….. ဖတ် …. …. ဖတ် ….. ….. ပြွတ်…. … . ပြွတ်…. …. စွိ…. …. စွိ…. …. တဖြေးဖြေဲးရွှ လာသော အချစ် ရည် ရည် လေးများကြောင့်သူ ဂျိုငးအောက်းအောက်မှ မှ နို့လေး လေး နှ စ် စ် လုံးကိုကိုင်င က်ာဆောင့် လေတော လေတော့သည် …။ ဖန်း…း… ဖန်း….း…. ဖတ် …. …. ဖတ် ….. ….. စွိ…. …. ပြွတ် …. …. သူ့ ဆောင် ဆောင့် ချက် ချက် မ များနဲ့ျားနဲ့ အညီ အညီ ဆံ ပင်လေးမ လေးများ ၀ဲ ကနဲ ၀ဲ ကနဲ ဖြစ်သွ သားပွုံလေးကိ လေးကိုကြည့် ရင် ရင်းသူအရှ အိရှန်န ကိ်ု မြှင့် င လိ်ု က် လေသည် …။ ဖောင်း….း…. ဖောင်း…..း….. “အား… အ…. ကိုရေ…. ရေ…. အင်း…. ဟင်း.. ဟင်း… ဆောင့်ပါ… ဆောင့် …. …. နာ.. နာလေးဆောင့် … အင်း… ဟု တ် တယ် တယ် … အာယား…..” တတွ တ် တွ တွ တ် ရေရွ တ် သံ များက သူ့  သူ ကိ့ုပိုတက် ကြွ ကြွစေသလိ စေသလိုပင် သူအရှ အိရှန်န်ချဖိ ချဖိုကိ့ုလုံးဝစိ တ် မကူ မကူးပါ…။ ဖောင်း…း… ဖောင်း….း…. ဖန်း….း…. ဖန်း….း…. ပြွတ်…. … . ပြိ …. …. “အား…. အား…. ဟု တ် တယ် တယ် ….. အီး…. အာလား… ဆောင့် …. …. ပေးပါ…. ဆောင့် …. …. ကွဲချင် ကွ ချင် ကွဲပစေကို….” ….” သူ လည်းး ချွေးတွေ ဖြင်းတွေ ဖြင့်ရွှဲနေပြီ နေပြီ ဖြစ်သည် သည် …။ ဒါပေမဲ့ပြနဿာမရှိပါ…။ မျက် နှာမှ လည်းး ချွေးစက် တိ တို့ စီးကျလာနေသော်လည်းး သူ ဂရု မစိုက် နိုင်င ပါ…။်ခါးလေးကိုလက် နှ စ် ဖက် ဖြင် ဖြင့်ပြောင်းကိုင်င ပြီ်း တရကြမ်းဆောင့် တော တော့သည် …။ “ရွှီ…ိစွ… ဖြောင်း… ဖြောင်း… ဖုန်နး…်ဖုန်နး…်ဖတ် … ဖတ် ….” “အင်း… ဟင်း…. ဟင်း…. အင်း… အင့် … အင့် ... ... အိ….” ….” သူ လီးတစ်ချောင်းလု ချောင်းလုံး အဖု တ် လေးထဲ မှ ဆွဲညှ ည စ်ှ မှု ကိုအန် တု ကာ အသားကုန်န် ဆောင့် တော တော့သည် …။ သူ မလေးကလည်းး အော် ဟစ်ညည် ညည်းညူးညူသ မံများအစား အံ့  အံ ကိ့ုကြိ တ် ကာ ကာ တင်းတင်းရင်ဆိ ဆုင်ငိ နေပုေ် နပုံရလေသည် …။ “ကို.... .... ကို…. …. အား… အား… အ.. အ.. ပြီးပြီ… အ… ထွ က် … ထွ က် …. ကုန်န….ပြီ …်.ပြီ…” …” သူ မလေး ပြီးသွားသည် ကိ ကိုသိသည် သည် နှင့် င် တစ် ပြိုင် နက် နက် သူ လည်းး ဆက် တိ တိုက် ဆောင့် ချကာ ချကာ စိ တ် စိ တ် ကိ ကိုလျှော့ ပေးလိုက် တော့ရာ သူ လည်းး ခရီးဆုံးရောက် သွားတော့သည် …။ ခုနက နက အကြောများပြတ် သလိုဆိုပါလျှင် ယခု တစ် ကိုယ် လု လုံးကိုမြစ် တစ် စင်းဟိုဘက် ဘက် ကမ် ကမ်းဒီဘက် ဘက် ကမ် ကမ်းမနားတမ်းကူးလိုက် ရသလိုပင်…။ …။
“David I think you need to put one more M.C.B here and two fuses for D.B and I want you to finished by tomorrow ok!” “Mr.Nay your phone! It’s say urgent matter, from your friend…” သူ ပြန် လာပြီး၂ပတ် ထဲ ထဲ ရှိနေပြီ နေပြီ ဖြစ်သည် သည် …။ ယခု လည်းး ဆိုက် တစ် တစ်ခုခု ပရောဂျက် အတွ က် သူ လက့်  ထောက် Supervisor
ဒေးဗစ် ကိုလိုအပ် အပ် တာများ မှာနေစဉ် မှာနေစဉ် ဆိုက် ထဲ ထဲ မှ တာဝန်ခံခံ “စလုံး”မလေးမှ ယာယီံရုရးခန်ုးအတွင်င်း ထားခဲ့ သော သော သူ ဖု့  န်န်း လာနေကြောင်းလာပြောနေခြင်းဖြစ်သည် သည် …။ “ok! I’ll be coming Jenny thank you…” “David! Make sure you finish this by tomorrow ok! If you don’t finished, you will be sitting on the fire and tell those workers, after they finished the work, do housekeeping and put the tools and equipments back in proper place…”
သူ မှာစရာရှိသည် သည် မ များ မှာပြီ မှာပြီးံရုးခန်းရှိရာသိ ရာသို့ ဆင်းလာခဲ့လိုက် သည် …။ “ဟဲ လို… ဟု တ် ကဲ ကဲ့ ... ... ပြောပါ နေရောင်ကေ ကျေ်ာ ခန့်  ပြောနေပါတယ် …” “ကျေ်ာခန့်  ငါ... ကျေ်ာမြ… သူငယ် ငယ် ချင်းချင်းမင်းအလု ပ်ရှုရ တ်ှုနေလား…” ကျေ်ာမြ ဒီကောင် ကောင် ဘယ် တု တုန်နးကမ်ှအခု လိုသူ့ ဆီ ဆီ တကူးတက ဖုန်နးမဆက်ဖူ ဖူးဘူး…။ ပြောစရာ မှာစရာရှိလည်းး မေးလ် သာ ပို့ပေးလိ ပေးလိုက် စမြဲ စမြဲ…။ …။ “ယောက် ဖပြော…. ဖပြော…. ထူးထူးဆန်းဆန်း… ဘာလဲ ကွ…” …” “မင်းစိ တ်ုခိင်ငုခိခ် င်ငိ ထားနော် … သူငယ် ငယ် ချင်း…. ချင်း…. ဟန်နီနီ ကားခြင်းတိုက် မှု မှု ဖြစ် လို့ ခုဆေးရု ဆေးရုံရောက် ရောက် နေတယ် …. ခုတော တော့ဘာမှ မစိုးရိ မ်ရတော ရတော့ဘူးလို့ ဆရာဝန်တွေ တွေ ကပြောတယ် …. ကြီးမေရော ငါရော အနားမှာရှိတယ် သိ လား… သူငယ် ငယ် ချင်း…. ချင်း…. အဲဒါ ဒါ မင်းကိုလှ မ်းပြောတာ….” သူ့ ခေါင် ခေါင်းထဲုမိ က် ကနဲ ကနဲ ရင် တစ်ခုခ လုံးမီးပုံထဲ ပစ်ချလိ ချလိုက် သလိုပင်၊ ခု ပဲ ဟိုကောင် ကောင် ဒေးဗစ်ဆိ ဆုတဲိ့ကောင် ကောင် အသုံးမကျလို့ စိ တ် ထဲ ထဲ မှာမပါပေမဲ့ပြောခဲ့ ရတာ ရတာ ခု သူချက် ချက် ခြင် ခြင်းမီးပုံပေါ် ပေါ် လက် ငင်းတက် ထိ ထိုင်င် လိုက် ရသလိုပင်…။ …။ “ယောက် ဖ…. ဖ…. သူငယ် ငယ် ချင်း… ချင်း… ငါ ကို့သေချာပြောစမ်းပါ… သေချာပြောစမ်းပါ… ငါ ရင်တွေ တွေ ပူနေပြီ နေပြီ…. …. ဘယ် လိ လိုဖြစ် တာလဲ… ဘယ် တု တုန်နးကလဲ်…. …. ဘယ် မှ မှာလဲ…. …. သူငယ် ငယ် ချင်း… ချင်း… ခုဘယ် ဘယ် ဆေးရုံမှာလဲ….” ….” သူ စိုးရိ မ် စိ တ် မ များ ရေဆူ မှ ရေဆူ မှ တ် ဂိ တ် ဆုံးရောက် သွားသလိုပင် တစ် ကိုယ် လု လုံး ပူ စပ် ပူလောင် လောင် ဖြစ် ကာ ထိုင်ငရမလိ ရ် မလိုထရမလိုအခု ပဲ အတောင်ိရှရရင် ရှ င် သူချက် ချက် ခြင် ခြင်းပျံ သွ သားမွိမှာအသေချာပင် …။ …။ “ဖြစ် တာကတော့မနေ့ က ညနေကပဲ… ဖြစ် ဖြစ် ဖြစ် ဖြစ် ခြင်းငါ ကို့ ကြီးမေ လှ မ်းဖုန်နးဆက်လိ လို့ ငါချက် ခြင် ခြင်းထလိုက် သွားတယ် …. ယာဉ် ထိန်နးတွေ်က ဟန်နီနီ ဖုန်နးထ်ဲက နံ ပါတ် တွေ တစ်ခုခ ပြီုးတစ်ခုခု လိုက် ဆက် တာတဲ တာတဲ့ … နောက် ဆုံး အိ မ် ဖုန်နးကိ်ုရပြီ ရပြီး…. ကြီးမေနဲ့  အဆက် သွ ယ် ရသွားတယ် …. အဲဒါကြီ ဒါကြီးမေက ငါ ကို့ လှ မ်းဖုန်နးဆက်ခေါ်လို့….” ….” “ခုရော…. ရော…. ခု ဘယ် လိ လိုနေသေးလဲ နေသေးလဲ…. …. ဘာဖြစ်သွ သားသေးလွဲ…. …. ယောက် ဖ မြန် မြန်ပြောကွ ပြောကွာ…. ငါ ဘယ် လိ လိုမှ နေလိုမရ့  တော့ဘူး…” ကျေ်ာမြ စကားတောင် မဆုံးသေး သူ အငမ်းမရ မေးမိသည် သည် …။ “ကျေ်ာခန့်  စိ တ် ငြိ ငြိ မ် ငြိ မ် ထားစမ်းပါ… ခု ဘာမှ မဖြစ်ဘူ ဘူး ဖြစ် ကာစက ဟန်နီနီ သတိမေ့ မေ့နေတယ် နေတယ် လိ လို့ ပြောတယ် …. ခုတော တော့ဆေးရှိန်နနဲန့်ဲ အိ ပ်နေတယ် နေတယ် …. မစိုးရိ မ်ရဘူ ရဘူးခုငါတိ ငါတို့ ဆရာဝန်တွေ တွေနဲန့ဲ တိုင်င ပင်ပြီးဟန်နီန တီု့ အိ အ မ်ိ နဲန့ဲ ပိုနီနးတဲီ့ ပန်းလှိုင် အထူးကု ဆေးရုံကိုပြောင်းထားလိုက် တယ် တယ် … စိ တ် မပူ မပူနဲန့ဲ သူငယ် ငယ် ချင်း… ချင်း… ငါရော ကြီးမေရော ဟန်နီန့ နားမှ နီားမှာရှိတယ် နော်…. ဟိုကောင် ကောင် တွေ လည်းး တော်ကြာနေ လာတော့မှာ… ထူးရင် ထပ် ပြီးလှ မ်းဖုန်နးဆက်လိ လိုက် မယ် မယ် … နော်….” “ကျေ်ာမြ… သူငယ် ငယ် ချင်း…. ချင်း…. မင်း.. မင်း… ငါ့ ကိုမလိ မ် ပါဘူးနော်…. ဟန်နီနီ ဘာမှ မဖြစ်ဘူ ဘးနောူ် …. သေချာတယ် နော်….” အချစ် တက္က အချစ် တက္ကသိ သုလ်ိ
သူဘယ် ဘယ် လိ လိုမှ စိ တ် မအေးနိ မအေးနိုင်င ပါ…။်ဖြစ် မှ ဖြစ်ရလေ ရလေ ဟန်နီနီရယ် ရယ် …။ ဟန်နီနီသာ သာ တစ်ခုခခုခု ဖြစ်ုသွားခဲ့ သော သော်သူ ဆက် မတွေ မတွေးရဲတော တော့သူ ဖုန်နးကိ်ု လက် ထဲ ထဲ မှာတင်းတင်းဆု ပ် ကိုင်င ထားသည်မှ မှာကျေ်ာမြအသံ ကြားမှ သတိ ပြန် ၀င် လာသည် …။ “သူငယ် ငယ် ချင်း… ချင်း… ကျေ်ာခန့်  ငါမလိ မ် ပါဘူး…. စိ တ် အေးအေးထား ဟု တ် လား…. လား…. အားလုံးခု အေးဆေးပဲ…. …. ငါတုထပ့်ိ ပြီးလိုတာတွေ စစ်ဆေးဦးမယ် ဆေးဦးမယ် နော်….. ဟု တ် ပြီ ပြီ လား…. စိ တ် မပူ မပူနဲန့ …” …ဲ” “ကျေ်ာမြ တိုက် သွားတဲ့ သူ သ…. …ူ. သူဘာနဲ ဘာနဲ့  တိုက် တာလဲ တာလဲ…. …. အဲဒီဒ တီု က် သွားတဲ့သူရော ရော ခုဘယ် ဘယ် မှ မှာလဲ….” ….” “အင်း… ဟန်နီနီနဲန့ဲ တိုက် မိ မိ တာကလည်းး မိန်နးကလေးတစ်ယောက် ယောက် မောင်းလာတာပဲ…. …. အဲဒီဒ မီ န်နးကလေးလည်းးခု ဆေးရုံမှာပဲ…. …. သူ လည်းး သတိမေ့ မေ့နေတယ် နေတယ် လိ လို့ သိရတယ် ရတယ် …” “အဲ…အဲ …အဲဒီ မိန်နးကလေးက်ဘယ် ကလဲ ကလဲ…. …. ဘယ် အရွ ယ် လဲ လဲ… ‘တောက် ’ ကားသေချာ မမောင်းတတ် မမောင်းတတ် ဘူးလား…. ငါကွာ….” “အင်း… သူငယ် ငယ် ချင်း…. ချင်း…. မင်းထပ် ပြီးစိ တ် အေးအေးထားနော်… သိ လား… အဲဒီဒ မီ န်နးကလေးက်ပန်းပွင့် င်သန္တာ သန္တာ ပဲ….” ….” ဖုန်နးစကားပြောခ်ွက် မှ မှ ကျေ်ာမြ၏ုရိးရှင်ငးသောဝါက်ျ က ယခု မှ ယခု မှ သူ စိ့  တ် ကိ ကိုပိရှုရ တ်ှုထွေးသွား စေသလိုပင်…။ …။ “ဘာ…. ဘာပြောတယ် ကျေ်ာမြ…. ပန်းပွ့ ငသန္တာ သ်န္တာ ဟု တ် လား…..” လား…..” “အင်း…. ဟု တ် တယ် တယ် သူငယ် ငယ် ချင်း….. ချင်း….. ပန်းပွ့ င်ငသန္တာ သ်န္တာ ပဲ…..” သူ့စိ တ် တွေ ချောက် ထဲ ထဲ ထိုးကျသွားသလိ သွားသလိုပင်…။ …။ ရပ်နေသော နေသော နေရာတစ်ခုခ လုံးခြာခြာလည် သွားသည့်အလား…။
သံယောဇဉ် ယောဇဉ်အပူ အပူတွေ တွေနဲန့ဲ (ငါ့ကို) နောက် သလိြုေ ပာင် ပာင်သလိ သလို(ငါ ကိြေ လာမလောင် လာမလောင် ကျွမ်းပါနဲ မ်းပါနဲ ကွ့  ယ် ယ်…။ …။ အငွေ ပ့ျံ ပျောက် ကွ ကွ ယ် သွားမှာပျောက ငါ ကိ့ကိုယ် ငါ မစိ မစိုးရိ မ် ပါဘူးကောင် ကောင မလေးရဲ မလေးရ့်…။ဲ။ … ကောင်းကင် မှာငွေ့ ရည် ရည် ဖွဲဖွ ပြီ့းမိုးအဖြစ် ဖစ် ပြန် ပြန် ပြနရွရ်ာချတွဲ့အခါ အခါးအြ ငါ့ြေ ကြောင့်မင် မင်းတစ် ကိုယ် လံ လုံး စိုစွ တ် မှ မှာကိုပဲ စိုးပါတယ မင်းခိုက် စိုစိးစန်)းပါတယ် …။ …။ (မင် ( မင်
လေဆိ ပ်အထွ အထွ က် ကာစတမ် ကောင် တာကိုဖြတ် ပြီ ပြီးသည် နှ့ င်င် သူ ကိ့ုလာစောင့် နေသော နေသော ကျေ်ာမြကိုတွေ လိ့ုက် သည် …။ သူအထု အထု ပ်ဆွ ဆဲပြွီး၊ ကျေ်ာမြနှင့် င်အတူ အတူ ကားပါကင်သိ သုိ့ လျှောက် လာခဲ လာခဲ့လိုက် သည် …။ ဘာစကားမှ မပြောမိ၊ ကျေ်ာမြကလည်းး ဘာမှ မမေး…။ ကားနောက် ဖုံဖုးကိုဖွ့ င်င် ပစ္စည် ညးမ်းများထည့်ပြီးတံခါးကိ ခါးကိုဖွ့ င က်ာရှေ့ခန့် ခန်းမှာဝင် ထိုင်င လိ်ု က် သည် …။ “သူငယ် ငယ် ချင်းချင်းဆေးရုံပဲနော နော် ….” အချစ် တက္က အချစ် တက္ကသိ သုလ်ိ
ပထမဆုံး ၀ါကျအဖြစ် ကျေ်ာမြမေးလာသည် …။ သူ ခေါင်းသာ ငြိ မ့်ပြမိသည် သည် …။ စကားလုံးတို့ ဆွံ့အနေ အနေ သည် …။ ဘာစကားမှ လည်းး ပြောချင် စိ ပြောချင် စိ တ် မရှ မရှိ…။ …။ ရင် ထဲ မှာဖိ စီးနေသော အပူ တို့သာ သာ ကြီးစိုးနေသည် …။ သူအလု အလု ပ် ကိုအကျိုးကြောင်းကြောင်းပြောပြီးံပု မှန်န ထက်၂ ပတ် စောပြီးပြန် လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် သည် …။ ကျန် နေသေးသည် နေသေးသည် မ များကိုအွန်န လိ်ုင်ငးမ်ှဆက် လု လု ပ်ပေးမည် ပေးမည် ဟု ဟု တာဝန် ယူ့ ခဲခဲသည် သည် …။ သူ့  လူ ကြီးကလည်းး နားလည် မှု မှိုရှရှတော တော့အားလုံး အဆင် ပြေသွားသည် …။ တစ် ကယ် လိ လို့ သူ စိ တ် ပြောင်းခဲ့မည် ဆိုပါကလည်းး အချိ န်န မရွေ်း ပြန် လာနိုင်င်ကြောင် ကြောင်းဘာကြောင်းဖြင့်လည်းး ပြောလာ သည် မ များ တစ် ခုခ မှု စိ တ် မ၀င် မ၀င် စားမိ…။ …။ ကားက အင်းစိန်နဘက် ဘ်က် သို့ ၀င် လာသည် …။ “ယောက် ဖ…. ဖ…. ခုအခြေနေ အခြေနေ ဘယ် လိ လိုရှရ လှဲ…” …” ကျေ်ာမြဆီ မှ ချက် ခြင် ခြင်းအဖြေမရ…။ “ယောက် ဖ…..” ဖ…..” သူ စိ တ် မရှ မရှည် ည စ်ွစွာထပ်ခေါ်လိ ခေါ်လိုက် မှ မှ သူ့ ဘက် ဘက် လှ လှည် ည့ကြည့်် ပြီး… “အင်း…. ကောင်းပါတယ် …. ကောင်းပါတယ် … ဟိုရောက် ရောက် ရင် မင်းတွေ့ ရမှ ရမှာပါ…” သူဘာမှ ဘာမှ ဆက် မမေးချင် မမေးချင် တော တော့…။ ခု ပဲ ဆေးရုံသာ သာ အမြန်ရောက် ရောက် ချင်နေမိ ချင် နေမိသည် သည် …။
ဆေးရုံကားပါကင် မှာရပ် လိုက် သည် နှင့် င် သူဆင် ဆင်းလိုက် သည် …။ ကျေ်ာမြ တံခါးပိ ခါးပိ တ် နေသည် မှ မှာနှေးလွန်နးသည်ဟု ဟု ထင် မိသည် သည် …။ “လာ… သူငယ် ငယ် ချင်း… ချင်း… ငါတို့ ဆရာဝန် ကြီးနဲ့  သွားတွေ့ ရအောင် ရအောင်…” …” “ဟ…. ဘာလိုလဲ့  …. …. ငါ ဟန်နီန ကိ့ီုသွားတွေ မယ့်  လေ… အရင်… ဘာလု ပ် ဖိုလဲ့  …” …” “ခဏလေးပါ... ခဏလေး… ဟိုမှာမင်းကိုရှင်ငးပြချင် တာလေးတွေးပြချင်တာလေးတွေ မင်းသိချင် တာလေးတွေ ချင် တာလေးတွေ လည်းး မေးလို့ရတာပေါ ရတာပေါ့ … မဟု တ် ဘူးလား…” ကျေ်ာမြ ပြောသည် မှ မှာဆီလှေ လျှော် နေသဖြင့်သူ ပြန် မပြောနေတော့...။ ရင် ထဲ မှာတော့သိ ပ် မရှင်ငးချင်…။ …။ သူ တို့ အောက် ထပ် ထပ် မှ ဦးနှောက် နှ့ င်င် အာရုံကြော ကြော အထူးကုဆရာဝန် ဆရာဝန် ကြီးဦးထွန်နးဟ်ုနာမည် တပ် တပ် ထားသော အခန်းတွင်င်း ၀င့် ခဲခ ကြသည်ဲ…။ သပ်ရှရှင်ငးသပ်ရပ် ရပ်သော သော အခန်းတွင်င်း ၀င် လိုက် သည် နှ့ င်င် တည် ကြည် ကြည် အေးချမ်းသော အေးချမ်းသော မျက် နှာနှ့ င်င် လူနာမ နာများ မြင် လျှင် အားကိုးချင် စရားချင် စရာ ဥပဓိရုရ ပ်ု ပိုင်ငရှရ်ှင်င် အသက် ၆၀ ၀န်းကျင် ဆရာဝန် ကြီးကိုတွေ လိ့ုက် ရသည် …။ (အူးထွန်နး…်ချိ တ် ချိ တ် မချိ မချိုး နဲ့  နဲ့ နော နော် .. နော်… လို့…. …. ဟိ…) …) “ကိုကေ ကျေ်ာ မြ… လာကြပါ…. ထိုင်င ကြပါ…်ဒါ ကိုနေရောင် နေရောင်ကေ ကျေ်ာ ခန့်  ထင် တယ် ….” သူ တိုကိ့ုအပြုးနှံ့င်င် ဆီးကြိုသော ဆရာဝန် ကြီ ဆရာဝန် ကြီးကိုသူ ပြန် ပြုးပြလိုံ က် မိ မိသည် သည် …။ “ဟု တ် ကဲ ကဲ့ … ကျနော် နေရောင်ကေ ကျေ်ာ ခန် ပါ…့  ဆရာကြီး… ကျနော် ကိ့ုကျေ်ာမြခေါ်သလိုကျေ်ာခန် လိ့ု့ ခေါ်လို့ရပါတယ် ရပါတယ် …” သူ ထိုင်ငခုံခ် မှုာဝင် ထိုင်ငရင် ရ် င်းပြောလိုက် သည် …။ “ဟု တ် ကဲ ကဲ့ကိုကေ ကျေ်ာ ခန့်  တွေ့ ရတာ ရတာ ၀မ်းသာပါတယ် …. ကျနော် လည်းး ကိုကေ ကျေ်ာ ခန့်  လူနာနဲ နာနဲ့  မတွေ့ ခင် ခင် မှာလိုအပ် အပ် တာလေး တွေ အသိပေးချင် လိ ပေးချင် လို့ ခု လိုဒီ ကိုခေါ်လိုက် ရတာပါ…” မျက် မှ မှန်န ကိ်ု ချွတ် ရင်းသူ ကိ့ုပြုံးကြည့်ပြီးပြောလာသည့်ဆရာဝန် ကြီးကိုသူခဏအတွ ခဏအတွင်ငးမှ်ာပင် ခင် မင် မိသွ သားသည်ွ…။ အချစ် တက္က အချစ် တက္ကသိ သုလ်ိ
“ဟု တ် ကဲ ကဲ့ဆရာကြီးပြောပါ ခင်ဗျာ…. ဗျာ…. ကျနော် နားထောင်ချင် ပါတယ် ချင် ပါတယ် …. စိ တ် လည် လည်းး ၀င် စားပါတယ် …. ဒါပေမဲ့တစ်ခုခု လောက် တော့သိချင် တာ….” ချင် တာ….” သူ စကား ခဏရပ် ထားပြီးမှ... ... “ဟို.... လေ… ကျနော့် အမျိုး သမီးသမီးအခြေနေ မစိုးရိ မ်ရဘူ ရဘူးမဟု တ် လား… လား… ဆရာကြီး….” မတတ်ုနိင်င ပါ…။်သူ ဟန် မဆောင်ုနိနင်ငိ ပါ…။်ရင် ထဲ မှာဗလောင်ဆူ ဆနေပြီေူ နပြီ ဖြစ်သည် သည် …။ ဆရာဝန် ကြီးမှ ကျေ်ာမြကိုတစ်ချက် ချက် လှ မ်းကြည့်ပြီး… “ကိုနေရောင် နေရောင်… အဲ… ကိုကေ ကျေ်ာ ခန့်  ခင်ဗျား ဗျား psychology အကြောင်းတွေ ဘာတွေ များ လေ့ လာဖူ လေ့ လာဖူးသလား မသိဘူ ဘး….”ူသူ ကိ့ုတည် ငြိ ငြိ မ် စွာကြည့် ရင် ရင်းမေးလာသည့်ဒေါက် တာကိ တာကိုကြည့် ရင် ရင်းသူ့ ရင် ရင် ထဲ မှ အပူ များ ဒီ ဂရီ ဒီ ဂရီ မြင့်တက် လာသလိ လာသလိုခံ စား လိုက် ရသည် …။ “ဗျာ… ဘာ… ဘာဖြစ် လိ ဘာဖြစ် လိုလဲ့  ဗျာ… ဗျာ… ဆရာကြီး… ဆရာကြီး… ဘယ် လိ လိုကြောင် ကြောင့်လဲ… ဟို… ကျနော့် အမျိုး သမီးသမီးဘာများဖြစ် လျိားဖြစ် လိုလဲ့  ဆရာကြီး…” အငမ်းမရ မေးလာသည့်သူ ကိ့ုကြင်နာသော နာသော မျက် ၀န် ၀န်းများနှ့ င်င် ကြည့်ပြီး… “ခင်ဗျား ဗျား အမျိုး သမီးသမီးအခြေအနေ ကောင်းပါတယ် …. အင်း… ခင်ဗျား ဗျား အမျိုး သမီးပေါ သမီးပေါ့.... ဗျာ…” သူ နားမလည် ပါ…။ ပါ…။ ဘယ် လိ လိုမှ နားမလည်ုနိင်င ပါ…။်“ဆရာ… ကျနော့် ကို့ သေချာလေး ရှင် ရှ င်းအောင် ပြောပါလား… ဆရာရယ် …. ကျနော် ရင်တွေ တွေ ပူ လာလိုပါ….”့  ဆရာဝန် ကြီးမှ ဒု တိ ယအကြိ မ်မြောက် မြောက် ကျေ်ာမြကိုထပ် မံ ကြည့်လိုက် ပြီ ပြီး… “ဒီ လိုကိုကေ ကျေ်ာ ခန့်  စိ တ် အေးအေးထားပါ…. ခင်ဗျား ဗျား အမျိုး သမီး…. သမီး…. အင်း… ခင်ဗျား ဗျား ဇနီးပေါ ဇနီးပေါ့ဗျာ….” ဗျာ….” ခဏမျှရပ် ထားလိ ရပ် ထားလိုက် ပြီ ပြီးသူ စိ တ် ၀င် ၀င် တစာုးစိးရိ မ် စွာနားစွ့ င်င်နေလိ နေလိုက် သည် …။ “အက် ဆီးဒင့်ဖြစ် တုန်နးက်ခေါင်းကိုနည်းနည်းနည်းး ထိုခိခ က်ိသွားတယ် ဗျ…. ကျနော် တိုလည့်းး သေချာစစ် ဆေးပြီ ဆေးပြီးကုသထား သထား ပါတယ် …. ဦးခေါင်းခွံရော ရော body scan ရော… စသည် ဖြင် ဖြင့် ပေါ ပေါ့ ဗျာ…. ဗျာ…. အားလုံး all round check လု ပ် ထားပါတယ် … ဒါပေမဲ့ ….” ….” ဆရာဝန် ကြီးမှ နှု တ် ခမ်းကိုတင်းတင်းစေ့ ပြီးလက် ချောင်းလေးမ ချောင်းလေးများက စားပွဲပေါ် ပေါ် တစ်ဒေါက် ဒေါက် ဒေါက် ခေါက် ရင်းတစ် စုံတစ်ခုခ ကို စဉ်းစားနေဟန် ဖြင့်သူဘာစကားမှ ဘာစကားမှ ၀င် မမေးမိ…။ …။ “အင်း… ကိုကေ ကျေ်ာ ခန့် …. …. ဒီ လိုဗျ… ဗျ… ခု ခင်ဗျားဇနီးက ဗျားဇနီးက ကျနော် တို့ ဆေးပညာနယ် ပယ် ပယ် မှ မှာတစ်ခါ ခါမှ မကြု ဖူံး မတွေ ဖူ့းတဲ့ကိ စ္စ ဖြစ်နေတယ် နေတယ် … ကျနော် တိုက…့  ဒါကိုဆေးပညာနယ် ပယ် ပယ် မှ မှာ… ကြားသာကြားဖူးတာ…. ကျနော့်ဆရာဝန် ဆရာဝန် လု ပ်သက် သက် အနှ စ် ၃၀ ကျေ်ာအတွင်ငးမှ်ာ တစ်ခါမှ ခါမှ မတွေ ဖူ့းဘူး….” ဆရာဝန် ကြီးမှ ဆက် ပြီ ပြီး… “ခင်ဗျားဇနီးဗျားဇနီးခု ဖြစ် တဲ့ဟာက…. ကျနော် တို့ ဆေးပညာနဲ့  သိ ပ် မပက် တော့ဘူးဗျ…. ခု က ခု က စိ တ် ပညာနဲ ပညာနဲ့  ဆိုင်ငနေတယ်ေ် နတယ် …. ဒါကိုစိ တ် ပညာလောကမှ ပညာလောကမှာmind transparent changing လို့ ပြောရမယ် …. (စကီဇိုဇိုနိန ဖရီိးယား) လို့ ခေါ်တဲ့စိ တ် ကစဉ် ကစဉ့်ကလျှား ဖြစ် ခြင် ဖြစ် ခြင်းထဲ ပါတာပေါ့….” သူ ဘယ် လိ လိုမှ နားမလည် ပါ…။ ပါ…။ ခေါင်းတွေတောင် တောင် တစစ် စစ် ကိုက် လာသလိ လာသလိုပင်…။ …။ “ဆရာကြီး… ကျေးဇူးပြုးဇူးပြုပြီးပီးကျနော် နားလည် အောင် ပြောပြပေးပါလား ခင် ဗျာ…. ဗျာ…. ကျနော် ဘယ် လိ လိုမှ နားမလည် နိုင်င လိ်ု့  ပါ….” ဆရာဝန် ကြီးမှ ခေါင်းကိုတဆတ် ဆတ် ငြိ မ့် ရင် ရင်းမှ…
“ဒီ လိုကိုကေ ကျေ်ာ ခန့် …. …. ခု ခင်ဗျားဇနီးက ဗျားဇနီးက သူ ကိ့ုယ် သူ ဟန်နီန စီံ မဟု တ် ဘူး…. သူ ကိ့ုယ် သူ သူ ဟာ ပန်းပွင့် င်သန္တာ သန္တာ ပါလို့ ပြောနေတယ် ….” “ဗျာ……..” ခုနက နက ခေါင်းကိ ခေါင်းကိုက် နေရုံဆိုလျှင်၊ င် ၊ ခု ဟာက ခု ဟာက သူ စကားလုံးတောင် ရှာမတွေ့ တော တော့...။ သေချာသည် က က သူ ခုချိချိ န်န မှ်ာရူးသွားခဲ့ ရင် ရင်တောင် တောင် သက် သာမည် ထင် မိသည် သည် …။ ကံ ကြမ္မာဆိုသည် သည် ကိ ကိုသူ လက် ခံ ပါသည် …။ ကံ တရားတစ်ခုခု နှ့ င်င် ပက် သက် ပြီ ပြီးတော့လည်းး သူဘယ် ဘယ် တု တုန်နးကမ်ှပျက် ရယ် မပြု မပြုခ့ဲ ဘူ ဘးပါ…။ူဒါပေမဲ့ဒီ တစ်ခါ ခါ ကံ ကြမ္မာက သူ ကိ့ုပျက် ရယ် ပြု ပြု လိုက် သည် မှ မှာအတော်လေး လွန်န်သွ သားခွဲ့ ပြီ ဟု သူ ထင် မိသည် သည် …။ လက် နှ စ် ဖက် ဖြင် ဖြင့်ခေါငးမ်ှဆံ ပင် များကိုထိုးဖွရင် ရင်းမျက် စိ စိ ကိုံစု မှိတ် ထားလိ ထားလိုက် မိ မိသည် သည် …။ နားထင် မှ သွေးကြောမှသွေ သွေးများ တဒိ တ် တဒိ တ် ဒိ တ် တိုးနေသည် ကိ ကိုလည်းး သူခံခ စားနေမိံသည် သည် ..။ ဆရာဝန် ကြီးမှ လည်းး နားလည် စွ စွာဖြင့်ဘာစကားမှ ထပ် မပြောတော့အခန်းလေး တစ်ခုခ လုံးဒတင်္ဂ တိ တ် ဆိ တ် သွား သည် …။ ကျေ်ာမြ သိရမည် ရမည် ပေါ့…။ ဒါဆိုဒီကောင် ကောင်ဘာလိ ဘာလို့ သူ ကိ့ုမပြောတာလဲ…။ …။ ဘယ် တု တုန်နးက်စဖြစ် တာလဲ…။ …။ သူ့ ခေါင် ခေါင်းထဲ မေးခွန်နးပေါင်းများစျွာားစွာအလုအယက် အယက် ပေါက် ကွ ကွဲတော့မည့်ံဗုးလိုဆူ ပွ က် နေကြသည် …။သူ စိ တ် အနည်းငယ်းငယ် လျှော့ လိုက် ပြီ ပြီးမှ... ... “ဒါဆိုခု ကျနော် ဟန်နီနနဲနီ့ဲ တွေ လိ့ု့ရမလား…. ရမလား…. ဆရာ….” ဒေါက် တာက တာက သူ ကိ့ုကြင်နာစွ နာစွာကြည့်လိုက် ရင်းမှ… “ရပါတယ် … ကိုကေ ကျေ်ာ ခန့် …. …. ရတာပေါ့... အဲ… တစ်ခုခ ပဲု …” …” သူ နားစွင့် င်နေလိ နေလိုက် သည် …။ ဆရာဝန် ကြီးမှ နှု တ် ခမ်းကိုကိုက် လိ လိုက် ပြီ ပြီး… “ခင်ဗျား... ဗျား... ခု ချိန် ချိ န် မှာမေးခွန်နးတွေ်ဘာတွေ သိ ပ် မမေးစေချင် သေးဘူ သေးဘူး…. ကျနော် တို့ သူဘာပြောမလဲ ဘာပြောမလဲ…. …. ဘယ် လိ လိုတုန်န ပြန့်် မလဲ ပဲ စောင့်ကြည့်စေချင် သေးတယ် သေးတယ် ….” သူ နားလည် ပါသည် ပါသည် …။ လေးပင် စွ စွာခေါင်းညိ တ် ပြရင် ပြရင်းထိုင်င်ုခံခ မှံ ထရပ် လိုက် သည် …။ ဆရာဝန် ကြီးဦးဆောင်ရာ ရာ နောက် သို့ သူ တို့ လိုက် ခဲ့ကြရင်းသီးသန့် ခန် ခန်းတစ်ခုခုရှေ ရှေ့ ရောက် တော့တံခါးကိ ခါးကိုဆွဲဖွ့ င်င ပြီ်း ၀င် လိုက် ကြ ကြ သည် …။ အခန်းတွင်ငးမ်ှအေးစိ မ့် နေသော နေသော အဲ ကွန်နးမ်ှလေက သူ့ ရင် ရင် ကိုမအေးမြစေနိုင်င ပါ…။်အခန်းတွင်င်း ဧည့် ခန် ခန်းနေရာမှာထိုင်ငနေသောေ် နသော ကြီးမေ သူ ကိ့ုမြင်သည် သည် နှ့ င်င…်“သား… နေရောင်... ... ကြီးမေ.. သမီးလေးကိုကယ် ပါဦ ပါဦးသားရယ် …. ကယ် ပါဦ ပါဦး…. သူ.... သူ… ကြီးမေကိုမသိဘူ ဘးပဲူပြောနေတယ် … သားရယ် … ဟင့် … ဟင့် …” …” ငိုယိုကာ မျက် လု လုံးများ မို့အစ် အစ်နေသော နေသော ကြီးမေကိုသူ အသာ ပခုံးမှ ဖက် လိ လိုက် ရင်း… “စိ တ် ချပါ… ကြီးမေ ကြီးမေ ကျနော် … အစွ မ်းကုန်န် ကြိုး စားမှာပါ…. စားမှာပါ…. ခု ကြီးမေလည်းး ပင် ပန်းနေပြီ…။ …။ အိ မ် ပြန် ပြီးခဏနားလိုက် ပါ ပါ လား… တစ်ခုခခုခုဆိ ဆို ကျနော် ဆက် သွ ယ် လိ လိုက် မယ် မယ် လေ…နော်…. ခု ကျနော် ရောက် လာပြီ လာပြီ ပဲ… မစိုးရိ မ်နဲန့ နောေဲ နာ် …. ကြီးမေ…” ပူနေသော နေသော အပူသည် သည် ခြင် ခြင်းပေမဲ့သူ လူ ကြီးတစ်ယောက် ယောက် ခု လိုခံ စားနေရတာကိုမမြင်ရက် ရက်ုနိင်င ပါ…။်နောက် သူ လိ မ်ညာပြီ ညာပြီးမှ နှ စ်သိ သ မ့်ိ ခြင်းလည်းး မဟု တ် ပါ…။ ပါ…။ သူ တစ် ကယ့်ကိုဟန်နီန ကိ့ီုပြန်ရဖိ ရုဖိ့  ကြိုးစားမည် ဖြစ် ဖြစ်သည် သည် …။ သူ ကြီးမေကိုပြောပြီးအနောက် ဘက် ခု တင်ပေါ်တွ ပေါ်တွင်င မှီ် ကာ ထိုင်င်နေသော နေသော ဟန်နီန့ အနားကိ အီနားကိုအသာ လျှောက် သွားလိုက် ပြီ ပြီးခု တင်ဘေးတွ ဘေးတွင်င် ၀င် ထိုင်င လိ်ု က် သည် …။ ခေါင်းကိးကိုငုံကာ့  ထိုင်ငနေသဖြင်ေ် နသဖြင့်ဆံ ပင် များ ဖုံးကွ ယ် နေသော မျက် နှာလေးကိုကြည့် ရင် ရင်း… “ဟန်နီန…ီကိုပြန်ရောက် ရောက် လာပြီ လာပြီလေ… လေ… ဟန်နီနီ ဘယ် လိ လိုနေသေးလဲ နေသေးလဲ…. …. သက် သာရဲ့လား… ဟင်…” …” သူ ညင်သာစွ သာစွာမေးလိုက် သော မေးခွ န်းသံအဆု အဆုံးမှာကိုယ် လေး သိ မ့်ကနဲ ဖြစ်သွ သားတာကွို တွေ လိ့ုက် ရသည် …။ သူ အသာ ပခုံးလေးကိုခပ် ဖွ ဖွ ကိုင်င လိ်ု က် ပြီ ပြီး… အချစ် တက္က အချစ် တက္ကသိ သုလ်ိ
“ဟန်နီန…. …ီ. ကို… မေးနေတယ် လေ…” ထိုတော တော့မှ သူ လက့်  ကိ ကိုအသာဖယ် ချလိုက် ပြီ ပြီးံငု ထားသော့  ခေါင်းကိုမော့ လာကာ မျက် ရည် မ များ ပြည့် နေသော နေသော မျက် ၀န် ၀န်းများနှ့ င်င... .် .. “နေရောင်… ဆောရီးပဲနော နော် … တို့… ယူ့ ဇနီ ဇနီး.. ဟန်နီန မဟီုတ် ဘူး…. တိုက့  ပန်းပွ့ ငသန္တာ သ်န္တာ ပါ….” သူ ကိ့ုစူးစိုက် ကြည် ကြည့်ပြီးပြောလာသည့်မိန်နးကလေးကိ်ု သူ ပါးစပ်အဟောင် အဟောင်းသားဖြင့်ဘာပြန်ပြောရမှ ပြောရမှန်န်း မသိ…။ …။ “ကျေးဇူးပြုးဇူးပြုပြီး…. ပီး…. တို့အိ အ မ်ိ ကိုဆက် သွ ယ် ပေးပါလား…. နေရောင် … ဟိုအဘွ အဘွားကြီးကလည်းး တိုကိ့ုသမီး… သမီးနဲ့ … တို့ စိ တ် က ကျ ဉ်းက ဉ်းကျပ် လိ ပ် လို့…” …” သူ ဘာဆက် လု လု ပ်ရမှ ရမှန်နးမသ်ိဖြစ်နေစဉ် နေစဉ် အနောက် ဘက် မှ မှ အားကိုးရာ ကယ် တင် တင်ရှရှင်င် အသံအဖြစ် အဖြစ် ဆရာဝန် ကြီး၏ အသံ ကိုကြားလိုက် ရသည် …။ “ဆရာတို့ သမီးပြောတဲ့  အိ မ် ကိုလှ မ်းဆက် သွ ယ် ထားပြီ ထားပြီးပြီ သမီး…. သမီးသာ အေးဆေးနားနေလိုက် နော်…. ဘာမှ ခေါင်းထဲ မတွေးနေနဲ့  သမီး…. နော်…. ဟု တ် လား…” လား…” တဆက် ထဲ ထဲ သူ ကိ့ုမျက် ရိ ပ် ပြပြီးခေါ်လိုက် သောကြောင့်သူ အသာထိုင်ငနေရာမှေ် နရာမှ ထလိုက် ပြီ ပြီးဆရာဝန် ကြီးနောက် လိုက် လာခဲ လာခဲ့လိုက် သည် …။ အခန်းပြင်ဘက် ဘက် ကော်ရစ် တာအရောက် တွ တွင်င် ဦးထွန်နးမ်ှသူ တို့ဘက် ဘက် လှ လှည် ည့လိ်ု က် ပြီ ပြီး… “မြင် တဲ့ အတိ အတိုင်ငးပ်ဲကိုကေ ကျေ်ာ ခန့် … ကျနော် တိုလည့်းး သူပြောတဲ ပြောတဲ့ အတိ အတိုင်င်း သူ့ အိ အ မ်ိ ကိုလှ မ်းဆက် သွ ယ် ထားတယ် ထားတယ် … သူ တို့ ဒီနေ့ နေ့ ညနေလောက် ရောက် လာလိ လာလိ မ့်မယ် …” “ကျနော် … ကျနော် …. ဘာလု ပ်ရမလဲ ရမလဲ ဆရာ….” သူ ကိ့ုလေးနက် စွ စွာုစိ က် ကြည် ကြည့် ရင် ရင်းမှ…. …. “ခု ခင်ဗျားလု ပ် ဗျားလု ပ်ရမှ ရမှာခဏလောက် စိ တ် အေးအေး ထားပြီးနေဖိုပါပဲ့  ….” ….” ဆက် ပြီ ပြီး.. “ခင်ဗျားလည် ဗျားလည်းး ခု မှ ခရီးဝေးက ပြန်ရောက် ရောက် လာတာ လာတာ အိ မ်ခဏြ ခဏပြန် ပြီးနားလိုက် ပါ…. ပါ…. ခင်ဗျား ဗျား သိ ချင် တာတွေ ချင် တာတွေ ကိုခင်ဗျား ဗျား သူငယ် ငယ် ချင်းချင်းကိုကေ ကျေ်ာ မြ ရှင်ငးပြပါလ်ိမ့်မယ် …. ညနေ ဟိုဘက် ဘက် က က မိသားစု သားစုတွေ တွေ ရောက် လာမဲ လာမဲ့အချိ န်နလောက်ေ် လာက် ပြန် လာခဲ့လိုက် ပေါ့….” မတတ်ိနုင်င ပါ…။်ဆရာဝန် ကြီးပြောသည် မှ မှာနည်းလမ်းလမ်းကျနေသောကြောင့်သူ စိ တ် မသက် မသက် သာစွာခေါင်းညိ တ် ပြလိ ပြလိုက် ရင်း… “ဟု တ် ကဲ ကဲ့ဒါဆိုညနေမှ ကျနော် တို့ ပြန် လာခဲ့လိုက် မယ် မယ် ဆရာ…. ခု ခွ့ င်င ပြုပါဦး….”ါဦး….” သူ ကျေ်ာမြကိုကြည့်လိုက် ရင်းမှ… “သူငယ် ငယ် ချင်း… ချင်း… မင်းကြီးမေကိုသွားခေါ်လာခဲ့ကွာ…. ငါ ဒီ ကပဲ စောင့် နေလိ နေလိုက် မယ် မယ် …” “အေး… ငါ သွားခေါ်လိုက် မယ် မယ် ….” ပြောပြီးထွ က် သွားသော ကျေ်ာမြ နောက် ကျောကိုသူငေးကြည် ငေးကြည့် နေရင် နေရင်းရပ် ကျန် ခဲ့ ခဲသည် သည် …။ “ကဲ… သူငယ် ငယ် ချင်း… ချင်း… ငါ ကို့ ရှင်ငးပြပါဦ်း… ဘယ် လိ လိုတွေ တွေ ဖြစ် ကုန်န တာလဲ်… ငါဘာမှ နားမလည် တော့ဘူး…” ကြီးမေကိုပိ ပြီ့းသူ တိ့ုက် ခန်းဧည့် ခန် ခန်းဆိုဖာပေါ် မသက် သာစွာထိုင်င်ချလိ ချလိုက် ပြီ ပြီးသူကေ ကျေ်ာ မြကိုမေးလိုက် သည် …။ ကျေ်ာမြ ခေါင်းကိုတဆတ် ဆတ် ငြိ မ့် ရင် ရင်းမှ… “မင်းဆီ ကို… ငါဖုန်နးဆက်တဲ တဲ့အချိ န်န မှ်ာဟန်နီနီ သတိရနြေ ရနေပြီနော နော် …” “အေးလေ… မင်းပဲ သက် သာတယ် ခုဆေးရှ ဆေးရှိန်န်နဲန့ဲ အိ ပ်နေတယ် နေတယ် ဆို…”
“အေး…. ဟု တ် ဟု တ် တယ် တယ် … သူ သတိရ လာ လာခြင်းမှာပဲ ၀ုန်နးဒိ်ုင်င်း လု ပ်တော တော့တာပဲ…. …. သူ က ဟန်နီန စီံ မဟု တ် ဘူး…. သူ က ပန်းပွ့ င်ငသန္တာ သ်န္တာ ပါ ဆိုပြီးလု ပ်တော တော့တာပဲ…” …” ခဏမျှရပ် လိ ရပ် လိုက် ပြီ ပြီးရေအနည်းငယ်းငယ် သောက် လိ လိုက် ပြီ ပြီး… “ငါလည်း…း… ဘာလု ပ်ရမှ ရမှန်န်း မသိဘူ ဘး….ူအဲဒါ ဒါ ဆရာဝန် ကြီးဦးထွန်နးတိ်ု့  ပြေးခေါ် ဆရာဝန် ကြီးက ချော့ မော့နှ စ်သိ သ မ့်ိ ပြီးဆေးတစ် လုံး ထိုးပေးလိုက် မှ မှ အဲဒီဒနေ့ေီ န့ က ငြိ မ်သွ သားတာ….”ွသူ အနည်းငယ်းငယ် စဉ်းစားလိုက် ပြီ ပြီး… “နေပါဦး… ဟိုမိန်နးမကရော….်သူ တို့ဘက် ဘက် ကရော ကရော ဘယ် လိ လိုလဲ အခြေနေ ဘယ် လိ လိုရှိရ လှဲ….” ….” “အင်း… ဟိုမိန်နးမက်မစိုးရိ မ်ရတော ရတော့ဘူးပြောတယ် …. သူ က ခေါင်းနည်းနည်းနည်းကွးကွဲပြီးလက် က ကျိုးသွားတယ် သွားတယ် ပြောတယ် ... သူ လည်းး ခု ထိ သေချာ သတိ မရသေးဘူ သတိ မရသေးဘူးလို့တော တော့သိရတယ် ရတယ် ….” “ခု မင်း…. သူ တိုကိ့ုဆက် သွ ယ် တော့ဘာပြောလဲ…. …. ဘာတဲ့လဲ….” ….” ဒီအချက် အချက် တော်တော်အရေးကြီးသည် …။ သူ တို့ဘက် ဘက် က က တုံပြန့်  မှု က အရေးပါသည် လေ…။ “အင်း… ငါ ဆရာကြီးမှာထားသလိုဘာမှတော တော့သေချာမပြောလိုက် ဘူး…. ဒီဘက် ဘက် က က ဆရာဝန် ကြီးက တွေ့ ချင် လိ ချင် လို့ လာစေချင် တယ် လာစေချင် တယ် …. သူ တို့ ဒီညနေ ညနေ လာမယ် ပြောတယ် …. ဒါပေဲ လ…” သူ ခေါင်းတွေ တော်တော်နောက် နေပြီ ဖြစ်သည် သည် …။ အိ ပ်ရေးပ ရေးပျက် တာလည် တာလည်းး ၄ ရက် ၅ ရက် လောက် ရှိပြီ ထင်သည် သည် …။ ဒီ ကိ စ္စ စဖြစ် ကတည်းကးက သူ ကောင်းစွာမအိ ပ်ခဲ့ ခရသေး…။ဲရသေး…။ ကျေ်ာမြက သူ ကိ့ုကြည့်လိုက် ရင်း… “သူငယ် ငယ် ချင်း… ချင်း… မင်းခဏလောက် အိ ပ် လိုက် ပါလား… ပါလား… ဒါမှ မဟု တ် နားလိုက် ပါလား… ပါလား… ငါညနေ မင်းကိုလာခေါ်မယ် လေ... ငါ ကို့ သော့အပိုသာ သာ ပေးလိုက် … မင်းအိ ပ်ပေ ပျော် နေလည်းး ငါ ၀င်ခေါ်လိ ခေါ်လိုက် ပါမယ် ပါမယ် …. ဟု တ် လား…..” လား…..” သူ ဘာမှဆက် ဆက် ပြီ ပြီးမစဉ်းစားချင် တော တော့စဉ်းလည်းး မစဉ်းစားနိုငအောင်အောင် ခေါငးတွေ်လည်းး ထူ ပူနေပြီ နေပြီ ဖြစ်သည် သည် …။ ခေါင်းပဲးပဲ ငြိ မ့်ပြလိုက် တော့သည် …။ ကျေ်ာမြ တံခါးပိ ခါးပိ တ် ပြီ ပြီးထွ က် သွားတော့သူ ခု တင်ပေါ် ပေါ် အ၀တ် တောင် မလဲုနိနငိ ပဲ် ပစ် လှဲချချ လိုက် သည် …။ မျက်ံခွ တို့ လေးလံ စွာပိ ကျလာသည် ကိ ကိုခံ စားလိုက် ရပြီးသူ ဘာမှ မသိတော တော့...။ “ကျေ်ာခန့် … ကျေ်ာခန့် … သူငယ် ငယ် ချင်း... ချင်း... ထစမ်း... သူငယ် ငယ် ချင်း…. ချင်း…. ကျေ်ာခန့် ….” ….” သူ ပခု့ံးကိုကိုင်င က်ာအတင်းလှုပ်နှုိနှုးနေသော ကျေ်ာမြကြောင့်သူ အလန် တကြာ့း  မျက် လု လုံးဖွ့ င်င ကြည့်် လိုက် ပြီ ပြီးထထိုင်င် လိုက် မိ မိသည် သည် …။ “ကျေ်ာမြ…. သူငယ် ငယ် ချင်း… ချင်း… ဘာဖြစ် လိုလဲ့  … ဟင်... ... ဘာလဲ….” ….” သူ အိ ပ်ပေ ပျော် သွားတာကိုတော တော့မှ တ် မိ မိ လိုက် သည် …။ အိ ပ်ရေးပ ရေးပျက် တဲ တဲ့ညတိုမ့ျားပြီ လေ…။ လေ…။ ကျေ်ာမြက သူ ကိ့ုကြည့်ပြီး… “ကျေ်ာခန့် …. …. ငါ.. ငါလည်း…း… ဘာ.. ဘယ် လိ လိုပြောရမလဲ မသိဘူ ဘး….ူ၁၂ နာရီလောက် လောက် က က ငါ့ဆီ ဆ ကီု ဟိုမိန်နးမဘက်က က ဖုန်နးဝင်လာတယ် …. ဘာပြောလဲသိ သ လား…ိမင်း….” သူ မျက် မှောင် ကြုံ့လိ့ လိုက် မိ မိရင် ရင်း…. “ဟာ… ငါဘယ် သိ မလဲ ကွ…. …. ဘာလဲ… သူ တို့ ဘာပြောလိုလဲ့  …” …” ကျေ်ာမြက အံ့သြနေသော အမူရာဖြင် ရာဖြင့် ... ... “ဟိုမိန်နးမ်သတိရနေပြီ ရနေပြီ တဲ့ကွ… ပြးတေီာ့ … ပြးတေီာ့ ....” တုံ့နှေ နှေးတုံ့နှေ နှေးဖြစ်နေသော နေသော ကျေ်ာမြကိုသူ ပခုံးကိုလှ မ်းကိုင်င လိ်ု က် ပြီ ပြီး... “ဟေ့ ကောင်… ပြောလေကွာ…. ဘာဖြစ်နေတာလဲ နေတာလဲ….” ….” “အေး… ဟိုမိန်နးမက်သူ ကိ့ုယ် သူ ဟန်နီန စီံ လို့ ပြောနေတယ် တဲ တဲ့ကွ…” …” “ဘာ…………….” အချစ် တက္က အချစ် တက္ကသိ သုလ်ိ
သူ့ အသံ အသံ ကျယ် လောင် စွာထွ က် သွားသည် …။ ဘာတွေ ဘယ် လိ လိုဖြစ် ကုန်န တာလဲ်...။ ...။ ဘာတွေ လဲ…။ …။ သူ့ ခေါင် ခေါင်းထဲ ပြင်းထန် စွာပေါက် ကွ ကွဲထွ က် သွားသလို၊ ကျေ်ာမြက ဆက် ပြောနေသည် …။ သူ စိ တ် တိ တို့ မနည်းစုးစု စည်းရင်းရင်းသတိ လွ တ် မသွ မသွားအောင် နားထောင်နေရသည် နေရသည် …။ “အဲဒါ… ဒါ… ငါလည်းး ဘာလု ပ်ရမှ ရမှန်နးမသ်ိလို့… ဆရာကြီးဦးထွန်နးဆ်ီလှ မ်းဖုန်နးဆက်လိ လိုက် တယ် တယ် …. အဲဒါ ဒါ ဆရာကြီးက အဲဒီဒ မီ န်နးမကိ်ု ပါ ညနေခေါ်လာဖို့ ဆေးရုံပြောင် ပြောင်းဖို့ လု ပ် လိုက် တယ် တယ် …. အဲဒါ ဒါ ခု မင်းဆီ ပြေးလာပြောတာ…” သူ့ ဘ၀မှ ဘ၀မှာအမတန် ရှု တ် ထွေးသော ကိ စ္စ များ၊ အလု ပ် အလု ပ် များ အားလုံးကိုတည် ငြိ ငြိ မ် စွာဖြေရှင်ငးနိ်ုင်င့်ခဲခသည် သဲည် သာဖြစ်သည် သည် …။ ဘယ် လောက် ပင် ပင် ခက် ခဲ ခက် ခဲ သူ လွ ယ် ကူ ကူ စွာပင် မတုန်န လှုပ် ပဲ ရင်ဆိ ဆုင်ငိ နိုန်ိင်ငခဲ့ ခ် မြဲဖြစ်သည် သည် …။ ခု ကိ စ္စ က သူဘယ် ဘယ် လိ လိုမှ မမျှော် လင့် ခဲ့ ခဲ ခု လိုမျိုး လည်းး သူ ကြုံတွေ တွေ့ ရလိ ရလိ မ့်မည် ဟု ဟု မထင် မှ တ် ထားခဲ ထားခဲ့ …။ …။ ကဲ ခုတော တော့ကံ ကြမ္မာက သူ ကိ့ုအငြိုး တကြီးတကြီးခြုံခိုတိုက်ုခိ က် ပြီ ပြီ ဖြစ်သည် သည် …။ ကဲ ဖြစ် မှတော တော့ကွာလာစမ်းပါ ဟု တ် သည် လေ သူရင် ရင်ဆိ ဆုင်င်ိရမည် ရမည် သာ ဖြစ်သည် သည် ပဲလေ..။ လေ..။ --------------×--------------------×----------------×----------------------
“ကို… ဒီ မှာထမင်းဘူးနော်…. ညနေစားချင် တာရှ ညနေစားချင် တာရှိရင် ရင် လှ မ်းဖုန်နးဆက်လိ လိုက် နော်…. ဟန်နီနချက် ချီက် ထားလိ ထားလိုက် မယ် မယ် ….” သူ ကိ့ုအချစ် တိ အချစ် တိုဖြင့့်အရည် လည် လည် နေသော မျက် ၀န် ၀န်းတိုဖြင့့်ကြည့်ကာပြောလာသော မိန်နးကလေးကိ်ု သူ စိ တ် မသက် မသက် သာ စွာကြည့်ပြီးခေါင်းပဲ ညိ တ် ပြလိ ပြလိုက် မိ မိသည် သည် …။ ထိုစဉ် ဧည့် ခန် ခန်းဆိုဖာပေါ်ထိုင်ငနေသောေ် နသော မ်ိန်နးကလေးတစ်ယောက် ယောက် မှ မှ သူ တိုကိ့ုလှ မ်းကြည့် ရင် ရင်း…. “ဟင်း… ဟင်း… မလိုပါဘူးဟန်နီနရယ် ရီ ယ် … ယူ့ ယောက် ယောက်ျားက ညနေအိ မ် ညနေအိ မ် ပဲ အချိ န်န တန်ံပု မှန်န ပြန်လာပါစေဦး…. မင်ုးမိ လိ့ု့ အပင် ပန်းခံချင်နေတယ် ချင် နေတယ် …. ဟင်း… ဟင်း….” “တောက် ……” သူ မေးရိုးများ ထောင် ထလာအောင် ထောင် ထလာအောင် ထောင်းကနဲ ထွ က် လာသော လာသော ဒေါသကိုအတင်းမျိုချပစ် လိ လိုက် သော်လည်းး ပါးစပ် မှ တောက် ခေါက် သံ ကတော့ထွ က် သွားမိသည် သည် …။ “အိုး… ဟိုး…. ဒေါသတွေ ထွ က် သွားတယ် ပေါ့ ဟု တ် လား… လား… ဟင်း… ဟင်း… ယူရယ် ရယ် … ဘာလို့ အဲလောက် လောက် တောင် ဒေါသတွေ ကြီးနေရတာလဲ…. …. ဟင်း… ဟင်း…” သူဘာမှ ဘာမှ ပြန် မပြောနေတော့ပဲ ဧည့် ခန် ခန်းစားပွဲပေါ်မှ ပေါ်မှ ကားသော့နှ့ င်င် ဖုန်နးကိ်ု လှ မ်းယူ ကာ တံခါးဖွ ခါးဖွ့ င်င ပြီ်း တိုက် အောက် သို့ ဆင်းသည့်ဓါတ် လှေ ကားရှိရာသိ ရာသို့ ထွ က် လာခဲ လာခဲ့လိုက် တော့သည် …။ သူ ကားပေါ်ထိုင်င က်ာစက်ိနှုးရင်းဖုန်နးကိ်ု ကျေ်ာမြ နံ ပါတ် သို့ လှ မ်းနှိပ် လိုက် သည် …။ “အေး… ယောက် ဖ…. ဖ…. ငါ…. မင်းထွ က် လာပြီ လာပြီ လား…. ငါံရုးခန်းကပဲ စောင့် နေလိ နေလိုက် မယ် မယ် … အေး…. အေး… ပြီးရော…” သူ ဂီ ယာထိုးကာ ကားကိုထွ က် လာခဲ လာခဲ့လိုက် သည် …။ ယခုဆိ ဆုလျှိင် ၂လခန့်  ရှိသွ သားပြွီဖြစ်သည် သည် …။ အားလုံးသော ပြဿ နာများကိုနှ စ် ဖက် အသေလဲ ညှိနှိုနှုင်ငးပြီ်း ယခု ပန်းပွ့ င်ငသန္တာ သ်န္တာ ဖြစ်နေသော နေသော ဟန်နီနနှနီ့ှင်င် ဟန်နီန ဖြစ်ီနေ နေ သော ပန်းပွ့ င်င်သန္တာ သန္တာ ၂ယောက် စလု စလုံး သူ့ အိ အ မ်ိ ပေါ် ပေါ် ရောက် နေပြီ ဖြစ်သည် သည် …။ အဓိ က ကတော့ပန်းပွင့် င်သန္တာ သန္တာဆိ ဆုသောေိ သာ မိန်နးမကြောင့်် ဆိုလျှင် ပိုမှန်န လ်ိမ့်မည် ဖြစ် ဖြစ်သည် သည် …။ နောက် တစ်ကြောင် ကြောင်းကလည်းး ဆရာဝန် ကြီးဦးထွန်နး၏်မေတ္တာရပ်ခံခ မှုံ ကြောင့် နှန့ င်င်ှစိ တ် ရောဂါ အထူးကု ဆရာဝန် ကြီးဒေါက် တာ တာ ဦးအေးခိုင်င တိ်ု့  ကြောင့်လည်းး ပါသည် ဟု ဟု ပြောရမည် ဖြစ်သည် သည် …။ အားလုံး သဘောတူညီ ညချက် ချီက် ကြောင့် ရော၊ ရော၊ ဟိုမိန်နးမကြောင့်် ပါ ယခု သူ့ အခန် အခန်းတွင်င် ၂ယောက် လု လုံး ခေါ်ထား အချစ် တက္က အချစ် တက္ကသိ သုလ်ိ
ရခြင်းဖြစ်သည် သည် …။ သူ (…….)plazaိရှ ကားပါကင် တွင်င် ကားကိုထိုးပြီးယခု show room နှင့် င်ံရုးခန်းတွဲရက် ရက်ိရှရာသူ ရာသူ့  ရုံးခန်းသို့ ထွ က် လာခဲ လာခဲ့လိုက် သည် …။ Show room က ယခင် mini mart နေရာဖြစ်ရာ ရာ ယခု သူ ဖွ့ င မည့်် လျှပ် စစ် ပ် စစ် ပစ္စည် ည်းးအရောင်းပြခန်းအတွ က် ပြန် ပြီးပြင်ဆင် ဆင်နေရာ နေရာ မပြီးသေး…။ စိ တ် တိ တိုင်ငးက်ျ လု ပ် လု ပ်နေသောကြောင် နေသောကြောင့်လည်းး ဖြစ်သည် သည် …။ သူ ယခု လု ပ် မည် မှ မှာမီးဆိုင်ငးမ်ျား၊ နံ ရံရ ကပ်ံအလှ မီးလုံးများ စသည် တိ တို့ ဖြစ်သဖြင် သဖြင့်အသေချာ ဒီဇိ ဒီုဇိင်ငးကိ်ု ဆင် ပြထားချင် သော သော ကြောင့်လည်းး ပါသည် …။ “Morning သူငယ် ငယ် ချင်း….” ချင်း….” သူ ပစ္စည် ညးစာရင်းစာရင်းများ စစ် နေသောကြောင် နေသောကြောင့်ကျေ်ာမြ ၀င် လာသည် ကိ ကိုမမြင် မိ လိုက် …။ “ဟာ… Morning ယောက် ဖ… ဖ… sorry ကွာ… ငါ ဒီ မှာshow room မှာတင် မဲ့စာရင်းစစ်နေလိ နေလိုက် လိ လို့ မင်းဝင် လာတာ မမြင် လိုက် ဘူး…” သူ့ံရုရးခန်ုးက show room နှင့် င် တစ်ဆက် ဆက် ထဲ ထဲ ဖြစ် ပြီးတစ်ဘက် ဘက် မြင် မြင် မှန်န မ်ျားသာ ကာထားသောကြောင့်ဧည့် သည် သည် မ များနှ့ င်င် ၀န် ထမ်းများကိုမြင်နိုနိင်ငလေသည်ေ် လသည် …။ ဒီ လိုလု ပ် ထားခြင်းဖြင့်လည်း၊း၊ သူရုံရးခန်ုးတွင်င်းိရှနေခိ နေခိုက် ဧည့် သည် သည် မ များနှ င့် င် ၀န် ထမ်းများကြား အခက် ခဲ များကိုတိုက်ုရိ က် မြင် မြင် ပြီးဖြေရှင်ငးပေးနိ်ုင်င မည်ဖြစ်သည် သည် …။ “မင်း… ဘာစားလာလဲ…. …. ကျေ်ာခန့် ….” ….” “အင်း… ငါ ဘာမှတော တော့မစားလာဘူး… ရေတော့တစ်ခွခ က်ွသောက် လာတယ် လာတယ် … အိ ပ်ရာထကတည် ရာထကတည်းက…”းက…” “ဒါဆိုသွားစားရအောင်လေ…. လေ…. ငါလည်းး ဘာမှ မစားရသေးဘူး…. ကော်ဖီလေး လေး သောက် ရင်းပေါ့…” …” သူ လည်းုးဖိင်င ကိ်ု စားပွဲအံ အဆွ ဆဲံ ထွဲထည့်သော့ခတ် လိ လိုက် ပြီ ပြီး… “အင်း… ကောင်းသားပဲ…. …. ဒီ plaza ဘေးအောက် က က ဆိုင်င်လေး လေး မဆိုးဘူးသွားရအောင်….” ….” သူ တို့ စတီးဖြင့်လု ပ် ထားသော ကု လားထိုင်ငလေးတွေေ် လးတွေ တွင်င် ၀င် ထိုင်င်ရင် ရင်းစားပွဲထိုးလေးကိုလှ မ်းခေါ်လိုက် ပြီ ပြီး… “ညီလေး လေး ကိုယ့်ကိုcappuccino တစ်ခွခ က်ွchicken sandwich တစ်ခုခု မင်းရော...” “ကိုယ့်ကိုBlack coffee တစ်ခွခ က်ွလောက် …” “မင်းဘာမှ မစားတော့ဘူးလား….” “တော်ပြီ…. …. ငါ နေ့ လည် ရင် ပြည့် နေမှ နေမှာုစိးလို့…” …” သူ Marlboro light ဘူးအတွင်ငးမ်ှစီးကရက် တစ် တစ် လိ ပ် ထု တ် လိ လိုက် ပြီ ပြီးမီးညိုလိုက် သည် …။ ကျေ်ာမြက သူ ကိ့ုကြည့် နေ နေ ရင်း…. “သူငယ် ငယ် ချင်း… ချင်း… မင်းဆေးလိ ပ်တွေ တွေ သိ ပ် မသောက် နဲ့ ဦးနော်…. ငါ စေတနာနဲ့  ပြောတာပါ….” သူကေ ကျေ်ာ မြကိုပြုးပြလိုံ က် ရင်း…. “အေးပါ… ငါလည်းး သိ ပ် မသောက် ဖြစ် ဖြစ် ပါဘူးကွာ…. ခု တလော မင်းသိ တဲ့ အတိ အတိုင်င်း ခေါင်းစားနေလိုပါ….”့  ကျေ်ာမြက စားပွဲပေါ် ပေါ် လက် တင် တင် လိုက် ရင်း… “ခု အခြေနေ ဘယ် လိ လိုလဲ…. …. သူ တို့တွေ တွေ…” …” သူ စီးကရက် ကိ ကိုခပ် ပြင်းပြင်ိးရှု က် လိ လိုက် ပြီ ပြီးမိးခိုးများ မှု တ် မှု တ် ထု ထု တ် လိ လိုက် ရင်းမှ… “ဒီ တိုင်ငးပ်ဲလေ… လေ… မင်းလဲအသိ အသိ ပဲလေ… လေ… တစ် ပတ် တစ် တစ်ခါ ခါ ဒေါက် တာ တာ ဦးအေးခိုင်ငဆီ ဆ်ီ သွားပြတယ် … စစ် တယ် လေ… ဘာမှ မထူးဘူး….” သူ လက် ထဲ ထဲ မှ စီးကရက် ကိ ကိုပြာခွ က် ထဲ ထဲ ထည့်လိုက် ရင်းမှ… “ဆရာကတော့ဒီ ကိ စ္စ မျိုးဆိုတာ အချိ န်န်ပေးရတယ် ပေးရတယ် လိ လို့ ပြောထားတာပဲလေ… လေ… ငါက ဘာတတ် နိုင်င မှ်ာလဲ… ဟင်း…ဟင်း…” သူ မချိ ရယ် ရယ် ရယ် လိ လိုက် မိ မိသည် သည် …။ ကျေ်ာမြက စာနာစွာကြည့် ရင် ရင်း… အချစ် တက္က အချစ် တက္ကသိ သုလ်ိ
“အေးလေ... ငါလည်းး ရှိတာပဲ…. …. တစ်ခုခခုခုမင်းလိုအပ် အပ်ရင် ရင်သာ သာ ငါ ကို့ပြောပါ ပြောပါ ဟု တ် လား…” လား…” စားပွဲထိုးလေး မှာထားတာတွေ လာချပေးသည် ကိ ကိုစောင့် နေလိ နေလိုက် သည် …။ သူ ကျေ်ာမြကိုကြည့်လိုက် ပြီ ပြီး... “စိ တ် ချ သူ ငယ် ငယ် ချင်း… ချင်း… မင်းကိုမှ မပြောရင် ငါ ဘယ် သူ ကိ့ုပြောရမလဲ ကွာ... ငါ ဘယ် သူ ကိ့ုပြောရမလဲ…. …. မဟု တ် ဘူးလား….” သူ မချိ တရိ မချိ တရိ ပြုးပြီံး ပြောလိုက် မိ မိသည် သည် …။ “အော်… ဒီညနေ ညနေ ဟို၂ကောင် မင်းနဲ့  တွေ့ ချင် လိ ချင် လိုတဲ့့မဆုံဖြစ် တာလည်းး ကြာပြီဆိ ဆုတောေိ တာ့စိ တ် ပြေလက် ပျောက် စကားလေး ဘာလေး ပြောရအောင် တဲ့ …. …. အဲ့ ဒါ ဒါ မင်းဘယ် လိ လိုသဘောရလဲ…” …” “သိ ပ်ကောင် ကောင်းတာပေါ ကွ့ာ…. သိ ပ် သိ ပ် ကိုကောင်းတာပေါ့… ငါ မွန်နးက်ျ ပ် နေတာ နေတာ ကြာနေပြီ… ငါတို့ ဆုံကြတာပေါ့ ညနေကို… ဘယ် နှ စ်နာရီ နာရီ လောက် လဲ လဲ…. …. နေရာကရော….” “၆ နာရီလောက် လောက် နေရာက ငါတို့ ထိုင်င်နေကြ နေကြ ဆိုင်င ပဲ် ပေါ ပေါ့ …” သူ ကော်ဖီ ကိုတစ် ကျိ ကု သောက် လိ လိုက် ရင်း…. “Ok see you evening သယ် ရင်း….”
သူ ကိုယ် အောက် ပိုပိင်ငးဆ်ီမှ နွေးသော စိုစွ တ် သော အထိတွေ တွေ့ ကြောင် ကြောင့်မျက် လု လုံး ဖွ့ င ကြည့်် လိုက် မိ မိသည် သည် …။ သူ့ ပေါင် ပေါင် ကြားတွင်င် ရောက် နေသည် မှ မှာပန်းပွင့် င်သန္တာ သန္တာ ဖြစ်နေသည် နေသည် …။သူ ပု့  ဆိ ဆုးမှိာ ဘယ် အချိ န်န က်ကျွတ် သွားတာလဲ မသိ…။ …။ ဒါမှ မဟု တ် သူ မပဲ ချွတ် လိ လိုက် သည် လား…။ လား…။ သူ လှု့  ပ်ရှရားမှုကြောင် ကြောင့်ထင်သည် သည် …။ သူ မ့ျက် နှာဆီသိ သုိ့ တိုးလာပြီးနူးညံ့ ညင် ညင်သာ သာ နွေးထွေးသော နှု တ် ခမ်းဖြင့်သူ့ နှုန တ်ှုခမ်းကိုဖွ ဖွလေး လေး လာနမ်းနေသည် ကိ ကိုသူ မဟန် တားမိ့  …။ …။ သူ ကြည့် နေမိ နေမိ စဉ်…။ …။ “ချစ် တယ် “ချစ် တယ် ကိုရယ် ရယ် …. ဟန်နီနီ လွ မ်းနေပြီ…. …. ချစ် မယ် ချစ် မယ် နော်… ကို….” ….” ပြောရင်းမှ သူ ကု့ိယ် အောက် ဖက် ဖက် သို့ နိ မ့် ဆင် ဆင်းသွားသည့်ခေါင်းလေးကိုကိုင်င်ရင် ရင်းသူ ဘာလု ပ်ရမလဲ ရမလဲ ဝေခွဲမရ ဖြစ်နေစဉ် နေစဉ် သူ့ ညီ ညလေးကိေီ လးကိုငုံကာ ပါးစပ်လေးအတွ လေးအတွင်ငးသိ်ု့  သွင်ငးလိ်ု က် လေသည် …။ ရင် ထဲနွေ နွေးကနဲ သူ တစ့်  ကိုယ် လု လုံး အကြောများ တုန်နခါသွ ခ်ါသွားသည် …။ ထို့အတူ အတူ အောက် က က သူ့ ညီ ညတောေီ တ်ာမောင် ကလည်းး ဆတ် ကနဲ ကနဲ ရုန်နးတော့် သည် …။ သူ့ အတံ အတံ တစ် လျှောက် ပါးစပ် မှံငု ကာ စု ပ်နေရင် နေရင်းမှ လည်းး သူ့ ပေါင် ပေါင် များ၊ ဆီးစပ် ဆီးစပ် များ၊ ဥများကိုလက် ကလေးဖြင် ကလေးဖြင့်ဖွ ဖွ ပွ တ် သပ်နေသည် နေသည် မှ မှာသူ ပြီးချင် သလိ သလိုဖြစ် လာသည် …။ ထိုအချိန် အချိ န် စု ပ်နေရင် နေရင်းမှ ခေါငးလေးမော့် လာပြီး၊ ဆတ် ကနဲ ကနဲ ည၀တ် ဂါဝန် ဂါဝန် ကိုချွတ် ပစ် ပစ် လိုက် ရာ မိမွေ မွေးတိုင်င်း ဖမွေးတိုင်င်း အလှ များ ပေါ်လာလေသည် …။ အောက် ကိ ကိုစိ က် ဆင်းသွားသယောင်နှန့ င်င်ှအဖျားတွ င်င် ကော့ကာ တက် သွား သော နို့လေးနှ လေးနှ့ င်င် လိုက် ဖက် ဖက် စွ စွာရှ ပ် ပြီးဆင်းသွားသောုဗိ က် သားလေးနှ့ င်င် အောက် ဖက် ဖက် မှ မှာတော့ခပ် ပါးပါး ညီညာစွ ညာစွာစု စုလေး လေး ပေါက် နေသော အမွှေးလေးများကိုသူငေးကြည် ငေးကြည့် နေမိ နေမိရင် ရင်းအညှို့ခံ ထားရသော ခံ ထားရသော သူ ကဲ့ သိ သုဖြစ့်ိ နေသည် နေသည် …။ ကြည့် နေစဉ် နေစဉ် မှာပင် သူ ကိ့ုတစ်ချက် ချက် စိုစိ က် ကြည် ကြည့်လိုက် ပြီ ပြီးအပေါ်မှ ဆောင့် ကြောင် ကြောင့် အနေထား အနေထား ထိုင်င လိ်ု က် ကာ ကာ သူ သ့့ ရဲရဲူတဆတ် ဆတ် တုန်နနေသောေ် နသော ညီလေးကိ လေးကိုလက် ကလေး ကလေး တစ် ဖက် ဖြင် ဖြင့်ကိုင်င က်ာအရည် ကြည် ကြည် တိ တိုဖြင့့်ရွှဲနေသော နေသော အဖု တ် လေး အ၀တွင်င် ၂ချက် ၃ချက် ခန့်  ပွ တ် ပြီ ပြီးမှ အသာလေး တွင်ငးဝလေးအ၀သိ်ု့  တေ့ ကာ ကာ ဆတ် ကနဲ ကနဲ ထိုင်င်ချလိ ချလိုက် သည် မှ မှာ
သူ့ ညီ ညလေးေီ လး အရေပြားတွင်င် တင်းကနဲ ဖြစ်သွ သားပြွီး ထိ ပ် ဖူးမြု ပ်သွ သားသည်ွ…။ နောက် အံလေးကြိ လေးကြိ တ် ကာ ကာ နှု တ် ခမ်းလေးကိုကိုက် ပြီ ပြီးထိုအနေထားအတိ အနေထားအတိုင်င်း အသွင်ငးထ်ုတ် လေး လု ပ်နေရင် နေရင်းမှ နောက် ထပ် ထပ် ဆတ် ကနဲ ကနဲ ဖိချလိ ချလိုက် တော့သည် …။ ဗျစ် …. …. စွိ…. …. ဖောက်…. … . “အ... အာ… အ….”ုရိ လာကိုစတာ စီးသလိုရု တ် တရက် တရက် နိ မ့် ဆင် ဆင်းသွားသလိုဖြစ်သွ သားပြွီး ဆီးခုံခြင်းကပ် မိသွ သားသည်ွ…။ သူ လည်းး အတံ တစ်ချောင်းလု ချောင်းလုံး စု ပ်ခွခ က်ွတစ် တစ်ခုခ ဖြင်ု့ အစု ပ်ခံခ လိုံ က် ရသလိုတင်းကျပ် စီ ပ် စီးပိုင်ငနေသောေ် နသော ဂူလေးအတွ လေးအတွင်င်း ဒီအတိ အတိုင်င်း ငြိ မ်နေမိ နေမိသည် သည် …။ တဆတ် ဆတ် တုန်န်နေသော နေသော ကိုယ် လေးကိုအသာပွေ ထားပြီ့းကျောလေးကိုအသာပွ တ် ပေးရင်းမှ ဘာစကားမှ မပြောမိ…။ …။ ခဏမျှဒီ ပု ဒီ ပုံစံအတိ အတိုင်င်း ငြိ မ်နေပြီ နေပြီးသူ့ ရင် ရင်ဘတ် ဘတ် ပေါ် လက် ထောက် ကာ ကာ ရှေ့နောက့် နောက် လှုပ်ရ်ှရှားတော့သည် …။ အတွင်ငးမ်ှထိ ပ် ဖူးက ဘာကိ ဘာကိုသွားထိ မိနေသည် နေသည် မသိ မသိ ကျင် ကနဲ င် ကနဲ ကျင် ကနဲ င် ကနဲ တစ်ချက် ချက် တစ်ချက် ချက် ဖြစ်သွ သားသည်ွ…။ တဟင်းဟင်းဖြစ် လာရင်းမြင်းစီးနေသော အနေထားမှ ဆောင့် ကြောင် ကြောင့်ပြန် ထိုင်င လိ်ု က် ရင်းသူ့ နှုန တ်ှုခမ်းကိုပြင်းပြင်းတစ်ချက် ချက် စု ပ် လိုက် ပြီ ပြီးကိုယ် ကိ ကိုပြန် မတ် ကာ ကာ ဖတ် ကနဲ ကနဲ၊ ဖတ် ကနဲ ကနဲ ဆောင့် လေတော လေတော့သည် …။ သူ လည်းး တဆစ်ဆစ် ဆစ် ထောင် တက် လာသော လာသော ညီတော တော်မောင်ကြောင် ကြောင့်ခါးကိုကော့ကာကော့ကာ အောက် မှ မှ အဆင်သင် သ့ င် ခံပေးနေမိ ပေးနေမိသည် သည် …။ ဖေါင်း….း…. ဖေါင်း….း…. “အင့် ….. ….. အိ…..” ဖေါင်း…..း….. “အင့် …. …. အင့် ….” ….” ဖန်း….း…. ဖန်း….း…. စွိ…. …. ပြိ …. …. စွိ…. …. “အ…. အ…..” ဖန်း…..း….. ဖတ် ….. ….. စိဲုရွှရ ကွှာလိုက် လာသော လာသော အရည် မ များကြောင့်အ၀င်အထွ အထွ က် မှ မှာလည်းး ခုနကထက် နကထက်ုပိ မိုလွ ယ် ကူ ကူ လာလေသည် …။ သူ နို့လေး လေး ၂လုံးကိုလက် ၂ဖက် ၂ဖက် ဖြင် ဖြင့်အု ပ် ကိုင်င လိ်ု က် ပြီ ပြီးလက် မ မ လက် ညှိုးတိုဖြင့့်ညု စ်ပေးလိ ပေးလိုက် ရာ အသက် ရူသံ သ မျာံး ပိုမြန် လာပြီးဆောင့် ချက် ချက် မ များ ပိုသွ သ က်ွလာတော လာတော့သည် …။ “အ…. အား… အာ…..” ဖန်း….း…. ဖန်း….း…. ဖန်း….း…. စွိ…. …. ပြွတ်…. “အ…. အ… အ… ဟင်း….” ဆောင့် နေရင် နေရင်းမှ မျက် လု လုံးကိုမှိတ် ကာ ကာ ဆတ် ကနဲ ကနဲ သူ့ အတံ အတံ ကြီးကိုညု စ် လိုက် ပြီ ပြီးသူ့ ရင် ရင်ဘတ် ဘတ် ပေါ် လဲ ကျလောသော ကိုယ် လု လုံးလေးကိုသူခါးလေးမှ ခါးလေးမှ ကိုင်င လုိ က် ပြီ ပြီးအောက် မှ မှ ၁၀ ချက် လောက် ဆက် တိ တိုက် ဆောင့်လိုက် ရင်းသူ လည်းး ပြီးလိုက် တော့သည် …။ ဒေါက်… ဒေါက်…. … . “ကိုရေ…. ရေ….ုနိးပြီ လား…. ထတော့လေ…. ကိုရေ….” ရေ….” သူ့ အခန် အခန်းတံခါးကိ ခါးကိုတဒေါက် ဒေါက် ခေါက် လာသော လာသော အသံ ကြားမှ သူ လန့် နိုနးသွိားသည် …။ ပြာပြာသလဲ သူ ထထိုင်င လိ်ု က် ပြီ ပြီးဘေးဘီ ကိုကြည့်မိသည် သည် …။ သူ ပု့  ဆိ ဆုးကို စမ်းကြည့်လိုက် ရာ အနည်းငယ်းငယ်ုစိ တိုတိုဖြစ်နေသည် နေသည် ကိ ကိုတွေ့ ရသောကြောင် ရသောကြောင့်ညတုန်နးက်အဖြစ် ပျက် မှ မှာအိ ပ် မက် ဖြစ် ဖြစ်ကြောင် ကြောင်းသိ လိုက် ပြီ ပြီးစိ တ် သက် သာရာ ရသွားသည် …။ သူ ဒီရက် ရက် တွေအတွ အတွင်င်း စိ တ် ရှု တ် အလု ပ် ပင် ပန်းစသည် မ များကြောင့်မနေ့ က ဟိုကောင် ကောင်တွေ တွေနှနှင့် င် အရက် သွားသောက် ပြီ ပြီးအပြန် ယခု လိုwetdream တွေ မက် တာဖြစ် တာဖြစ် လိ မ့်မည် …။ အချစ် တက္က အချစ် တက္ကသိ သုလ်ိ
ပုဆိ ဆုးကို ဖြန် ကာပြင့်  ၀တ် လိ လိုက် ပြီ ပြီးသူ တံခါးကိ ခါးကိုဖွ့ င်င က်ာအနောက် သို့ ထွ က် လာခဲ လာခဲ့ သည် သည် …။ စောစောက အိ ပ် မက် ကြောင့်အနည်းငယ်းငယ် မာစပြုနေသော ညီတော ညီ တော်မောင် က ယခုပိ ပြီးထလာလေသည် …။ မြင် ကွ ကွင်ငးကိ်ု လည်းး ကြည့်လိုက် ဦးလေ ဟိုမိန်နးမ်အင်းလေ ဟန်နီနပေါေီ ပါ့ အခု၊ စူ ပါရှော့ ဟု ဟု ခေါ်သော ချည် သားဘောင်းဘီ တိုလေးနှ လေးနှ့ င်င် မီးဖိုဘေစင် ဘေစင် မှာတစ်ဘက် ဘက် သိုလှ့  ည် ည့ပြီ်း ဘာလု ပ်နေသည် နေသည် မသိ မသိ…။ …။ ခါးကျဉ် က ဉ် ကျဉ် လေးအောက် လေးအောက် မှ မှာတင်သားမ သားများက တင်းရင် တင်းရင်းကာ ကြားထဲ အမြောင်းလိုက် လုံးကြွနေသည် နေသည် မှ မှာသူ သက် ပြင် ပြင်းချလိုက် ပြီ ပြီးရေချိုး ခန်းထဲ ခန်းထဲ ၀င် လိုက် တော့သည် …။ သူ ရေချိုး ခန်းမှ ခန်းမှ အထွ က် တံခါးရှေ ခါးရှေ့တွ့ တွင်င် တဘက် ကိ ကိုင်င က်ာစောင့် နေသော နေသော သူ မကြောင့်တွန်န ကနဲ့် ဖြစ်သွ သားမွိသည် သည် …။ သူ ကိ့ုပြုးကြည်ံ့ရင် ရင်းတဘက် ကိ ကိုကမ်းပေးလာရာ သူ အသာ လှ မ်းယူ လိုက် ပြီ ပြီး… “ဟိုတစ်ယောက် ယောက် ရော….” “ပန်းပွ့ င်င လား….်သူ အပြင်ခဏသွ ခဏသွားတယ် …. ကို့ရဲရ….” …ဲ.” “အော်… အင်း….” သူ လည်းး တဘက် ကိ ကိုကိုယ် မှ မှာပတ် ရင်းအိ ပ်ခန် ခန်းတွင်င်း ၀င် လိုက် သည် …။ ထိုစဉ် သူ့ နောက် နောက် မှ မှ ကပ် ပါလာသော သူ မ ကြောင့်အံ့သြသွားပြီး… “ဘာ… ဘာလု ပ် မလိုလဲ့  …. …. မင်း… အပြင် က စောင့် နေလေ…. နေလေ…. ပြောစရာရှိရင် ရင်…” …” သူ ပြောလိုက် ရာ မျက် နှာလေး ညိုးသွားပြီ သွားပြီး… “ကိုကလဲ… ဟန်နီန ကီတစိ မ်းလား…. ကိုကိ့ုအ၀တ် စားတွေ စားတွေ ထု တ် ပေးမလို့လေ….” လေ….” “အာ… ရတယ် … ရတယ် … အပြင် ကသာ စောင့် နော နော် … ကိုယ့် ဘာသာကိ ဘာသာကိုယ် ထု တ် လိ လိုက် မယ် မယ် နော်…. ဟု တ် လား….” လား….” သူ ပြောလည်းပြေားပြော သူ မကိုအခန်းအပြင်သိ သုိ့ တွန်နးလွှ်တ် ရင်းတံခါးကိ ခါးကိုပိ တ် လိ လိုက် သည် …။ ဒီနေ့ နေ့ သူ နားသည် မိုမိ့  အိ မ်နေရင် နေရင်းပေါ့ပေါ ပေါ ပါးပါ့းတီရှရ ပ်ှ တစ် ထည် နှ့ င်င် ချည် ပု ပုဆိ ဆုိး တစ် ထည် ၀တ် ၀တ် ကာ ကာ ဧည့် ခန် ခန်းသို့ ထွ က် လာခဲ လာခဲ့လိုက် သည် …။ သူ ဆိုဖာတွင်င် ထိုင်င ပြီ်း ဂျာနယ် တစ် တစ်စောင် စောင် ကောက် ကိ ကိုင်င လိ်ု က် စဉ် စဉ် သူ့ ဘေးသိ ဘေးသို့ စွေ ကနဲ့  ၀င် ထိုင်င လိ်ု က် သော သူ မကြောင့်တွန်န ကနဲ့် ဖြစ်သွ သားသည်ွ…။ သူ ကိ့ုကြည့်ပြီး… “ကိုက…. ဒီနေ့ နေ့ အရမ်းသန့် နေပါလား….” နေပါလား….” သူ ဘာမှ ပြန် မပြောမိ န် မပြောမိ…။ …။ ဂျာနယ် ကိ ကိုသာ သာ စိ တ် ၀င် ၀င် စားချင် ယောင် ယောင် ဆောင်နေလိ နေလိုက် သည် …။ ဟု တ် သည် လေ ဘေးနားမှာလာကပ် ပြီးပွ တ် ပွ တ် သီးပွ တ် သပ် လာထိုင်င်နေသည် နေသည် က က အမတန် လှ ပပြီးသူ တစ်ချိန် ချိ န် က အရူးမူးဖြစ့် ခဲခဲရသော ရသော သူ့ ဇနီ ဇနီးဟောင်း၊ နောက် ကြည့် ရတာ ရတာ စောစောစီးစီးထပြီးရေမိုးချိုးချိုး အလှ ပြင် အလှ ပြင် ထားသည် ထင်သည် သည် …။ အေးမြမြ အမွှေးရနံ့  ကလည်းး သူ့ နှနာခေါင်ှးဝတွင်င် တိုးဝှေ က့ျစယ်ီစယ်ီနေသည် …။ နောက် ဘောင်းဘီအတိ အတိုအောက် အောက် မှ မှ စိ မ်းမြနေသော ပေါင် တွင်ငးသာ်းသွေးကြောလေးများ ပေါ်နေသော ပေါင် တံ ပေါင် တံ တစ် စုံနှနှင့် င်…။ …။ ဟန်နီန ဟီုဘယ် လိ လိုပဲ ပြောပြော၊ တစ် ကယ် ပဲ ပဲ ဖြစ် ဖြစ် ဟန်နီနီ ဖြစ်သည် သည် ထားဦ ထားဦးလောလောဆယ် ခန္ဓာကိုယ် က က ဟိုမိန်နးမကိ်ု ယ် နှ့ င်င်၊ သူ စည်းမဖောက်းမဖောက် ချင် ပါ…။ ချင် ပါ…။ သူ ဟန်နီန့ီ ကိုသစ္စာရှိချင် ပါသည် ချင် ပါသည် …။ ဒါကြောင့်လည်းး သူ ကြိုး စား စောင့်ထိ့န်နးနေခြင်း ဖြစ်သည် သည် …။ အံ့သြစရာကောင်းသည် က က ဟိုမိန်နးမရော၊်ဟန်နီန ပီါသူ့ ရဲ့ ရဲ အလစ်အငိ အုငိ က် မေးခွန်နးမ်ျားကိုမှန်န ကန်စွာဖြေဆိုနိနင်ငိ ခြင်းကြောင့်လည်းး သူဒီဒီအဖြစ် အဖြစ် ပျက် ကိ ကိုလက် ခံရမလိ ရမလိုဖြစ်နေသည် နေသည် …။ “ကို… ကိုလို့…. ဘာတွေ စဉ်းစားနေတာလဲ…. …. ဟန်နီန ကိ့ီုစကားလေး ဘာလေး မပြောတော့ဘူးလားလို့….” သူ လက့်  မောင်းကိုလက် လေး၂ဖက် ဖြင် ဖြင့်ံစုပွေ ပွေ ဖက့်  ကာ ကာ မေးလာသော သူ မကြောင့်သူရင် ရင်တွေ တွေ တဒိန်နးဒ်ိန်န်း ခုန်န လာရ်သည် …။ “ပြော… ပြောလေ…. ဘာပြောမလိ ပာမလိုလဲ့  …” …” သူ ခြောက် ကပ် ကပ် စွာမေးလိုက် သည် …။ အချစ် တက္က အချစ် တက္ကသိ သုလ်ိ
“အင်…. …. ကိုကလည်း…း… အရမ်းတစိ မ်းဆန် တာပဲ…. …. ဟင့်ဟန်နီန ကီု ဂရု လည်းမစိးမစိုက် ဘူး… ပစ် ထားတယ် … ဟင့် ….” ….” သူ စိ တ် ညစ်သွ သားသည်ွ…။ သက် ပြင် ပြင်းတစ်ချက် ချက် ချရင်းမှ ချရင်းမှ သူ မဘက် လှည် ည့လိ်ု က် ပြီ ပြီး… “ကဲ…. …. တိ တ် … တိ တ် … နော်…. မငိုနဲန့ ….ဲ…. ကိုဘာလု ပ်ပေးရမလဲ ပေးရမလဲပြော….” ပြော….” “အင့် .... .... ဟင့် … ဟင့် … ဟန်နီန ကိ့ီုဖက် ထားပေး ထားပေး ဒါဆို…. ဟင့် ….” ….” သူ ဆတ် ကနဲ ကနဲ ဖြစ်သွ သားမွိသည် သည် …။ မိန်နးကလေးမ်ျားသည် အမတန် နူးညံ့ သော သော ပန်းပွင့ လေးမေ် လးများ၊ ဒါမှ မဟု တ် ကြောင် ကလေးများနှ့ င်င် တူသည် သည် ဟု ဟု သူ စာတွေ ထဲ မှာဖတ် ဖူ ဖူးပါသည် …။ သူ တို့ချစ် ချစ် သော သော သူ များ၏ ယု ယကြင် ယကြင်နာမှု နာမှု ကိုလည်းး လိုလားတောင့်တတတ် မှ မှန်နးလည်းးသူ သိ ပါသည် …။ ဒါပေမဲ့သူ အမတန် ၀န်လေးနေမိ လေးနေမိသည် သည် …။ုပိဆိ ဆုးသည်ိမှ မှာညကမက် ထားသော ထားသော အိ ပ် မက် ကြောင့်လည်းး သူုပိ ၀န်လေးမိ လေးမိနေခြင် နေခြင်းဖြစ်သည် သည် …။ သူ က ပု ထုဇဉ် ဇဉ် မဟု တ် လား…။ လား…။ ပြီးတော့ဒီ မိန်နးကလေးကလည်းးဘာမှအပြစ် အပြစ်ပြောစရာ ပြောစရာ မရှိသော သော ကိုယ် လု လုံးကိုယ် ပေါက် ပိုပိင်ငရှရ်ှင်င…။ …်။ သူ သနားသွားမိသည် သည် …။ သူအသာလေး အသာလေး ပခုံးလေးပေါ် လက် ဖြင် ဖြင့် ပွေ ပွေ ထားလိ့ုက် သည် …။ သူ ကိ့ုယ် လု လုံးကိုလက် နှ စ် ဖက် ဖြင် ဖြင့်တင်းတင်းပြန် ဖက် လာပြီ လာပြီးသူ လည့်  ပင် ပင်းကိုနွေးထွေးနူးညံ့ သော သော နှု တ် ခမ်းလေးများဖြင့်ထိ လာသည် …။ သူ ရင်တွေ တွေ အဆမတန် အခုန်န မြန်လာနေသည် …။ နောက် လက် သည်းလေးမးလေးများဖြင့်သူ့ ရင် ရင်ဘတ် ဘတ် ကိ ကိုဖွ ဖွလေး လေး ကု တ် ခြစ် ခြစ်နေပြီ နေပြီးကိုယ် လု လုံးလေးက လူးလွန်န့ နေရ်ာနေရာ တဖြေးဖြေး တစ် ကိုယ် လု လုံး သူ့ ရင် ရင်ဘတ် ဘတ် တွ တွင်င်း ရောက် နေပြီ ဖြစ်သည် သည် …။ သူ ဘာလု ပ် ရမှန်နးမသ်ိဒီအတိ အတိုင်င်း ခဏငြိ မ်နေမိ နေမိသည် သည် …။ ထို့နောက် နောက် ဖြတ် ကနဲ ကနဲ ဟန်နီန မ့ျီက် နှာလေးကိုမြင်ယောင် ယောင် လိုက် မိ မိ ပြီးသူ့ ရင် ရင်ခွခင်င်ွထဲ ရောက် နေသော ကိုယ် လု လုံးလေးကိုအသာတွန်နးဖယ်လိ လိုက် ပြီ ပြီးသူ အိ ပ်ခန် ခန်းထဲ ၀င် လာခဲ့လိုက် သည် …။ “အို…. …. ဟင့် … ဟင့် …. …. အင့် …. …. ဟင့် ….” ….” နောက် ကျောမှ အင့်ကနဲ ရှိုက် ငိုသံ သံ ကြားလိုက် ရသော်လည်းး သူ မတတ် နိုင်င ပါ…။်ကြာလျှင် လက် တွေ့ အိ အ ပ်ိ မက် ထဲ ထဲ ရောက် သွားနိုင်ငသည် သ်ည် လေ...။
ချစ် သူ သ ကသာူခ်ွငင့ ပြု့မည် ဆိုလျှင်င် ကျ မတေးသွ မတေး မတေးသွ မတေးသ သွားကွို ရပ် ထားလိုက် ပါမည် ပါမည် …။ …။ ချစ် သူ သူ နှ လုံးအိ မ် ကိုရုန်နးကစေမည်းကစ်ေမည် ဆိုလျှင်င် ကျမမျက် လုံးများကျိားကို သူ မ့ျက် နှာမှ အဝေ ဖယ် ခွာပေးပါမည်ာပေးပါမ ည် …။ အေ ၀းသိ ၀၀းသို့ ဖယ်ာပေးပါမည် …။ ကျ မရှ မရှိနေသည့ နေသည့်အတွ က် ကြောင့်ချစ် သူ သသည် သူည် သွားလမ် ပင် ပမ်းရသည် ဆိုလျှင်င်ားလမးမှ်ာ ပင် ဘေးဘီ ကိုရောက် သည် အထိ အခြားလမ်းမှ က ကျ မ မ လျှောက် ပါမည် ပါမည် …။ …။ ချစ် သူ သ ပန်ူပန်းကုံးသီရန် ရန် အနှောင့် အယှ အယှ က် ဖြစ် ဖြစ်ရသည် ရသည် ဆိုလျှင်င် သူ့  ပန် ပန်းတောမှးတောမှ ဝေေ၀းရာသိ ၀၀းရာသို့ ကျ မ မ ယိ ယိုယိ့  မ်းထွ က် ခွာပေးပါမည်ာပေးပါမ ည် …။ာပေးပါမည် …။ ချစ် သူ သူ ရေပြင်အလ အလျ င် ကိ င် ကိုလှိုင်ငးတိ်ု ဖြင့်တိ တိ မ်းမှောက် ပပျိ့ု အန် စေသည် စေသည် ဆိုလျှင်င် သူ့  ကမ့်  ကမ်းခြေမှ ကျ မ မ လှော် တက် တက် ကိ ကိုလွှ လွှ တ် ချလိုက် ပါမည် ပါမည် …။ …။ (ငါ့ ရင်ခွခင်ငွ ကြားက်နှင်ငးဆ်ီဓားသွားတစ် …။ တာရာမ တာရာမင်င်းဝေ (ငါ့ရင်ားတစ လက်…။ တာရာမင်းေ ၀) ၀၀)
ဒီနေ့ နေ့ အလု ပ် လု ပ်ရတာ ရတာ သိ ပ် စိ တ် မပါ…။ မပါ…။ တစ်ခုခခုခု ကို ရင် ထဲ မှာလစ် ဟာနေသလို၊ တစ်ခုခခုခု ကို လိုအပ် အပ်နေ နေ သလိုစိ တ် ထဲ ထဲ မှာဖြစ်နေသည် နေသည် …။ မနက် က က သူအိ အ မ်ိ မှ ထွ က် လာတော လာတော့လည်းး ဟိုမိန်နးမ်ဟန်နီနီ မျက် နှာသိ ပ် မကောင်း၊ သူ ကိ့ုံပု မှန်န်အတိ အတိုင်င်း ထမင်းဘူးထည့် ပေးဘာပေးနှ ပေးဘာပေးနှ့ င်င် အရင် ကလိုသိ ပ် ပြုးပြုံးရွှံင်င်ရွှရွှင်င် မတွေ့ ရ…။ ရ…။ သူ ထွ က် လာခါနီ လာခါနီးသူ ကိ့ုနက် ကတိ ကတိုင်ငစောင်ေ် စာင်းနေသည် ဟု ဟု ပြောပြီးပြင်ပေးသေးသည် ပေးသေးသည် …။ မျက် နှာကတော့ညိုးနေသည် …။ သူ ဘာဖြစ် လိုလဲ့  မေးတော့သူ ကိ့ုသေချာစူးစိ သေချာစူးစိုက် ကြည် ကြည့်ပြီးတစ် စုံတစ်ခုခု ပျောက် ဆုံးသွားသလိုမျိုး အကြည့်ဖြင့်စက္ကန်န့် အနည်းငယ်းငယ် သေချာ စိုက် ကြည် ကြည့် နေခဲ နေခဲ့ သည် သည် …။ မဟု တ် သေးပါဘူး…။ တစ်ခုခခုခုလွဲမှားနေသလိုပဲ…။ …။ သူ ရင် ထဲ ထင့် နေသည် နေသည် …။ ဘာလဲတော တော့မသိ…။ …။ သူ ဒီညနေ ညနေ စောစောအိ မ် စောစောအိ မ် ပြန် လိုက် မည် မည် ဟု ဟု တွေးလိုက် သည် …။ ဘာလိုလိုနဲန့ဲ ဟိုမိန်နးမပ်ါအိ မ် မှာရောက် နေသည် မှာဒီနေ့ နေ့ဆိ ဆို ၃ လပြည့်ပြီ ဖြစ်သည် သည် …။ သူ တိုက် ခန်းတံခါးကိ ခါးကိုတွန်နးဖွ့်ငရင် ရ် င်းဝင် လိုက် သည် …။ ဧည့် ခန် ခန်းတွင်င် ဟန်နီနီ ဟိုမိန်နးမပေါ့် …။ နောက် ကျေ်ာမြ၊ ကြီးမေ ထိုင်င်နေကြသည် နေကြသည် ကိ ကိုတွေ လိ့ုက် ရသည် …။ သူအံ အ့သြစွာံဖြင့်လျှောက် သွားလိုက် ရင်း.. “ဟာ… ကြီးမေရောက် နေပါလား…. ဟေ့ ကောင်… မင်းက ဘယ် ချိန် ချိ န် က ရောက် နေတာလဲ…. …. ကြီးမေကရော….” ကျေ်ာမြက သူ ကိ့ုလှ မ်းကြည့်လိုက် ပြီ ပြီး…. “သူ ယ် ချင်းချင်းကျေ်ာခန့် …. …. ငါတို့ မင်းကိုပြောစရာရှ ပြောစရာရှိတယ် … အရေးကြီးတယ် ပြောလို့ရသလိ ရသလို…. …. အရေးမကြီးဘူးပြောလည်းး ရတယ် ….” အချစ် တက္က အချစ် တက္ကသိ သုလ်ိ
သူ ဟန်နီန့ီဘက် ဘက် တစ်ချက် ချက် လှ လှည် ည့ကြည့််ရင် ရင်း… “ဟိုတစ်ယောက် ယောက် ရော….” ဟု မေးလိုက် သည် …။ ကျေ်ာမြက သူ ကိ့ုလက် ကာပြရင် ကာပြရင်း… “အဲဒီဒအကြောင်ီအကြောင်းပဲ…. …. ငါတို့ပြောမလိ ပြောမလို့ သူငယ် ငယ် ချင်း…. ချင်း…. ဟန်နီနီ အရင်ဆု ဆံုး ရှင်ငးပြလ်ိမ့်မယ် … မင်းနားထောင် လိုက် ပါ…. ပါ…. ပြီးတော့မင်းသိ လာလိ မ့်မယ် …. ဟု တ် လား….” လား….” သူ နားမလည် စွ စွာဖြင့်လှည် ည့ကြည့်် မိသည် သည် …။ ဟန်နီန ကီသူ ကိ့ုပြုးပြလိုံ က် ရင်းမှ… “ဒီ လို… ကို့ရဲရ…ဲ.. လွန်န့်ခဲခ တဲ့ ၄လကျေ်ာလောက် ကပေါ ကပေါ့ … ဟန်နီနီ အလု ပ် မှိာရှနေတု နေတုန်န်း နေ့ လည် ဘက် ပေါ့….” ….” --------------×--------------------×----------------×----------------------
“ဟန်နီန…ီဟန်နီန…ီနင့် ဧည် ဧည့် သည် သည် တဲ တဲ့အပြင် မှာရောက် နေတယ် …” ဟန်နီန စီံ သူ ကိ့ုလာပြောသော သူငယ် ငယ် ချင်းမကိ ချင်းမကိုမော့ ကြည့်လိုက် ပြီ ပြီး... “ဟင်…. …. ဘယ် သူ လဲ မာယာ…. ဘယ် ကလဲ ကလဲ….” ….” “မသိဘူ ဘးဟ…ူမိန်နးကလေးတစ်ယောက် ယောက် ပဲ ပဲ…. တို့လောက် လောက် ပဲ ပဲ… ဒီုဇိဇင်ငိးကတော့်ုမိ က် တယ် တယ် …” “အေး.. အေး... ငါ ခုတွေ တွေ လိ့ုက် မယ် မယ် …. ကျေးဇူးပဲးဇူးပဲနော နော် သူငယ် ငယ် ချင်း…” ချင်း…” ဧည့် သည် သည် မ များလာရင် တွေ့ သော သော အခန်းတွင်ငးတ်ွင်င် စတိုင်ငဘောင်ေ် ဘာင်းဘီပေ ပျော့ ပျော့ အနက် ရောင်အရှ အရှည် ည်နှ့ င်င် အပေါ်မှ ခပ် ပွ ပွ ဘလောက် စ် စ် အဖြူရောင် ကိ ကိုကု တ် အနက် နှ့ င်င တွ်ဲ ကာ ၀တ် ထားသော ထားသော မိန်နးမခြင်းပင် ငေးလောက် သော မိန်နးမတစ်ယောက် ယောက် ကိုတွေ လိ့ုက် ရသည် …။ “ကျမ ဟန် နီန စီံ ပါ…. ဘယ် သူ လဲ မသိဘူ ဘးနောူ် ….” ဆတ် ကနဲ ကနဲ လှည် ည့ကြည့်် လာသော မျက် လု လုံးများကိုဟန်နီန ပင်ီငေးကနဲ ဖြစ်သွ သားမွိသည် သည် …။ ထူးဆန်းစွာပင် ဒီ မိန်နးမကိ်ု ရင် ထဲ မှ သူ မ ခင် မင် မိသွ သားသည်ွ…။ “ဟန်နီန စီံ နော နော် … ဟု တ် လား… လား… တိုက့  ပန်းပွင့် င ပါ….်နာမည် အပြည့်စုံက ပန်းပွ့ င်ငသန္တာ သ်န္တာ လို့ ခေါ်တယ် ….” ဟန်နီနီ ခေါင်းထဲ ချက် ချင်းချင်းမှ တ် မိ မိ လိုက် သည် …။ ကိုတစ်ခါ ခါ ပြောဘူးသည်းသည့်ဒီနာမည် နာမည် ကိ ကိုသူ တစ်ခါပြောရု ခါပြောရုံထဲနှနင့် င်ှသူ မ မှ တ် မိ မိနေသည် နေသည် …။ “ဟု တ် ကဲ ကဲ့ … ပြောပါ… မပန်းပွ့ င်င် ကျမ ဘာကူ ညီ ညရမလဲ ရီ မလဲ….” ….” မျက်ံခုးကိုတွန်န ကာ့် သူ မကိုကြည့်လိုက် သည့်အကြည့်မှာအနည်းငယ်းငယ် အံ့သြသွားဟန် ပါသည် ကိ ကိုမိန်နးမခြင်းမို့ သတိ ထားမိ လိုက် သည် …။ “မင်းက… တိုကိ့ုသိ လိုလား…..”့  “ဟု တ် ကဲ ကဲ့ကျမကြားဖူးပါတယ် မကြားဖူးပါတယ် ….. ကိုက ပြောဖူးပါတယ် …” “ဟု တ် လား…. လား…. အိုး… ဟိုး…. စိ တ် ၀င် ၀င် စားဖို့ ကောင်းသွားပြီ….” ….” နှု တ် ခမ်းကိုခပ် ဟဟ လု ပ် ပြီးပြောလိုက် သည် မှ မှာရု ပ်ရှရင်ငှ ထ်ဲမှ မင်းသမီးတွေတောင် တောင် ငေးသွားနိုင်င်သည် သည် …။ “တို့… မင်းနဲ့  စကားအေးဆေး ပြောချင် လိ ပြောချင် လို့…. …. တနေရာကိုခဏလောက် လိုက် လိ လို့ရနိ ရုနိင်င မလား….”်“ကျမ ခု အလု ပ် ထဲ မှာဖြစ်နေတယ် နေတယ် မပန် မပန်းပွ့ င်င…. …်. ညနေဆိုဖြစ် ပါတယ် …” “ok.. ဒါဆိုညနေ မင်းရုံးဆင်းတဲ့အချိ န်န်လောက် လောက် စိ မ်းလန်းစိုပြေကိ ပြေကိုလာခဲ့ နိုနိင်င မလား….်တို့စောင် စောင့် နေမယ် နေမယ် … ဘယ် လိ လိုလဲ…” …” အချစ် တက္က အချစ် တက္ကသိ သုလ်ိ
“အင်း…. ဖြစ် ပါတယ် ကျမလည်းး စိ တ် ၀င် ၀င် စားပါတယ် …” တစ် ကယ် လည် လည်းး သူ မ စိ တ် ၀င် ၀င် စားပါသည် ….။ ဒီ မိန်နးမ်ဘာကြောင့်သူ့ ဆီ ဆ လာတာလဲီသူ မလည်းး သေချာသိ ချင် ပါသည် ချင် ပါသည် ..။ ဒါကြောင့်လည်းး တွေ ဖိ့ု့ တထိုင်င ထ်ဲဆုံးဖြတ် လိ လိုက် ခြင် ခြင်းဖြစ်သည် သည် …။ သူ လည်းး တစ် ကယ် စိ တ် ၀င် ၀င် စားသွားသည် …။ ဟန်နီနီ စိ တ် ၀င် ၀င် စားသွားထက် ကိ ကိုပိတောင် တောင် ပိုနိနင်ငိ လ်ိမ့်မည် …။ “အင်း… ဆက် ပြောပါဦး…. ဟန်နီနီ ဘာတဲ့လဲ… ကိုအရမ်းစိ တ် ၀င် ၀င် စားသွားပြီ….” ….” “အင်းပါ…. ကို့ရဲရ….ဲ…. ပြောမှာပေါ့….” ….” စိ မ်းလန်းစိုပြေထဲ ပြေထဲ ၀င် လိုက် သည် နှ့ င်င် သိ ပ် ကြာကြာ မရှာလိုက် ရပါ…။ ကန် စပ်ဘေး ဘေး စားသောက် ဆိုင်င် စားပွဲဝိုင်ငးတ်ွင်င် ထိုင်ငနေသည်ေ် နသည့်ပန်းပွ ပန်းပွ့ င်င်သန္တာ သန္တာ ကိုသူ မ အလွ ယ် တကူ တကူ ပဲ တွေ လိ့ုက် ရသည် …။ ခုံကိုဆွဲကာ ထိုင်င လိ်ု က် သည် နှင့် င် ရေပြင်ဘက် ဘက် ငေးနေရာမှ လှည် ည့ကြည့်် လာပြီး… “တစ်ခုခခုခုသောက် ပါဦ ပါဦးလား…. တို့ စောင့်ုနိနင်ငိ ပါတယ်…” “ရွှ တ် …. ချာတိ တ် ချာတိ တ် … တိုကိ့ုသံ ပုရာတစ် ရာတစ်ခွခ က်ွလောက် ….” မှာပြီး…. “ဟု တ် ကဲ ကဲ့ … ပြောပါဦး…. မပန်းပွ့ င်င... .် .. ဘာများလဲ လျိားလဲ လို့…” …” ရှေ့တွ့ တွင်ငချထားသော ခ်ျထားသော အအေးခွ က် အအေးခွ က် ထဲ ထဲ မှုပိ က် ကိ ကိုမွှေနေရင် နေရင်းမှ… “သိ ပ်ရှရည် ညှ် ရှည် ည်ဝေးဝေး ပြောမနေတော့ပါဘူး… ဟန်နီန…ီမင်းနဲ့  တို့နဲန့ဲ အလောင်းစား တစ်ခုခုလောက် လောက် လု ပ် မလားလိုပါ….့  မင်းသဘောတူ မှ ပါ….” “ရှင်င…်အလောင်းစား…. ဟု တ် လား… လား… ဘယ် လိ လိုမျိုးလဲ … ဘာအတွ က် လု ပ်ရမှ ရမှာလဲ….” ….” တစ် ကယ် ကိ ကိုဟန်နီန စီံ အံ့သြသွားသည် …။ တဆက် ထဲ ထဲ ကိုပြောတာ မမှားဘူး၊ တော်တော်ထူးဆန်းတဲ့မိန်နးမပ်ဲဟု တွေးလိုက် မိ မိသည် သည် …။ “အင်း… ဟု တ် တယ် တယ် …. မင်းနဲ့  တို့နဲန့ဲ အလောင်းစားတစ်ခုခ လုပ် မယ် … မင်းနိုင်ငရင် ရ် င် တို့ မင်းကိုတန်ရာတန် ရာတန်ဘိ ဘုိး ပေးမယ် …. မင်းရှုံးရင်တော တော့…. မင်းမောင်နဲန့ဲ လုံးဝမပက် သက် ရတော့ဘူး… မင်းကျေနပ် မှ နပ် မှာပါ… မင်းရှုံးသွားခဲ့ ရင် ရင်တောင် တောင် မနစ်နာ နာ အောင် တို့ စီ စဉ်ပေးမှ ပေးမှာပါ… ဘယ် လိ လိုလဲ…” …” “ရှင်င….” …်.” ဟန်နီန စီံ အံ့သြမှု တို့ မဆုံးနိုင်င်တော တော့…။ ဒါပေမဲ့သူ မ စိ တ် ၀င် ၀င် စားသည် …။ “ဟု တ် ကဲ ကဲ့ … ပြောပါဦးပြောပါဦးမပန်းပွ့ င်င…. …်. ဘယ် လိ လိုမျိုိုးလဲ အလောင်းအစားက ကျမစိ တ် မစိ တ် ၀င် ၀င် စားပါတယ် …. ဒါပေမဲ့ချက် ချင်းချင်းတော့အဖြေမပေးနိုင်င်ဘူ ဘးနောူ် ….” “ဟင်း… ဟင်း… ရပါတယ် မင်းစဉ်းစားလေ…. ပြီးမှ တိုကိ့ုအဖြေပြန်ပေးပေါ ပေးပေါ့ … ဟု တ် လား… လား… ဟင်း… ဟင်း…” သူ သဘောပေါက် လိ လိုက် လေပြီ…။ နားလည် လိုက် သလိုလည်းိးရှသွ သားပြွီ…။ …။ “အော်… လက် စသတ် စသတ် တော့မင်းတို့ ဒီ လိုဖြစ် တာတွေ… ဘာတွေ က အလကား ဟန်ဆောင် ဆောင် တာပေါ့… ဟု တ် လား…. လား…. ငါကတော့….ုစိးရိ မ် စိ တ် ပူ ပူ လိုက် ရတာ…. မင်းတိုက့  ငါ ကို့ အရူးဝိုင်ငးလ်ုပ် ကြတာပေါ့လေ…” လေ…” သူ ဒေါသထွ က် သွားမိသည် သည် …။ သူ မှ့ာတော့မအိ ပ်ုနိနင်ငိ မစားနိ်ုင်င ဖြင့်် ဟင် သူ တို့တွေ တွေရဲ့ ရဲ လှည် ည့စားမှုတွေ တွေ အောက် မှ မှာကိုယ် က က ငပေါကြီးတစ်ကောင် ကောင်ပေါ ပေါ့ …။ …။ ဟန်နီန ကီပျာပျာသလဲ ဖြင် ဖြင့် … “မဟု တ် ပါဘူ ပါဘူးကိုရယ် … အဲ လိုမဟု တ် ပါဘူ ပါဘူး…. ဟန်နီနခုခီ လို သဘောတူ လိုက် တာ တာ ကို့အတွ အတွ က် ကြောင့်ပါ….” သူ အံ့သြသွားမိသည် သည် …။ “ဘာ….. ကို့အတွ အတွ က် …. ဟု တ် လား… လား… ဘာတွေ လဲ... ... ဟန်နီန…. …ီ. မင်းရှင်ငးရ်ှင်ငးပြောရင်ကောင်းမယ် …” အချစ် တက္က အချစ် တက္ကသိ သုလ်ိ
ဟန်နီန ကီစားပွဲပေါ်တင် ပေါ်တင် ထားသော စာအိ တ် အညိေု ရာင် ခပ် ကြီ ခပ် ကြီးကြီးတစ်ခုခ ကို ဆွဲယူ ပြီးအထဲ မှ စာချုပ တစ်တစ်စောင် စောင်နှနင့် င်ှဘူးတစ်ဘူ ဘးကိူု ထု တ် ပြလိ ပြလိုက် ရာ သူ အရမ်းအံ့သြသွားတော့သည် …။ “ဟင်… ဒါ…. ဒါ…” သူ မြင် တာနှ့ င်င် မှ တ် မိ မိ ပါသည် …။ မာမီ မျက် ရည် က ကျ ပြီးပြီးပေးလိုက် သော ပစ္စည် ညးပဲ်းပဲလေ…။ လေ…။ တစ်ချိန် ချိ န် လုံး ငြိ မ်နားထောင် နားထောင် နေသော ကျေ်ာမြမှ…. …. “ဟု တ် တယ် တယ် သူငယ် ငယ် ချင်း.... ချင်း.... အဲဒါ ဒါ မင်းတို့ ဘိုးဘွားပိုင်င် ဘယက် ကြီ ကြီးနဲ့  မင်းလျှော် ကြေးအဖြစ် ပေးလိုက် ရတဲ့တိုက် စာချုပ် ပဲလေ…” လေ…” “ဟန်နီန…ီကိုကိ့ုချစ် လွ ချစ် လွန်နးလိ်ု့  ဟန်နီနီ နှ လုံးသားနဲ့  ရင်းပြီးစွန်န စားလိ့်ုက် တာပါ တာပါ ကိုရယ် ရယ် …. ဟန်နီန ကိ့ီုမဆူ ပါနဲ့ နော နော် …” သူ ဘာပြောရမှန်နးတောင်မသိတော တော့…။ သူအရာရာကိ အရာရာကိုသဘောပေါက် နားလည် သွားပြီ ဖြစ်လေသည် လေသည် …။ မာမီ ကတော့သူ့ ခွေ ချွေးမလေးကိုလက် ၀ါးပေါ်တင် ၀ါးပေါ်တင် ပြီးဖူးဖူးမှု တ် ထားမလားပဲ ထားမလားပဲ၊ မာမီ က သူ့ အမေရဲ အမေရဲ့အမေပစ္စည် ညးမိ်းမို့ ယနေ့ ထိ နှမှေ မျှောနေတာ သူအသိ အသိ ပဲလေ…။ လေ…။ “နေပါဦး… ဟိုမိန်နးမရော….်ဒါဆို….” ….” “သွားပြီလေ… လေ… သူအလောင် အလောင်းစားမှာရှုံးသွားပြီ တဲ့ နောက် နောက် … သတ် မှ မှ တ် တဲ တဲ့ အတိုင်င်း ဒီနေ့ နေ့ က ၃ လပြည့် သွ သားပြွီလေ…” လေ…” သူ ဟန်နီန ကိ့ီုစိ က် ကြည် ကြည့်လိုက် ရင်း… “မင်းတော်တော်ဆိုးပါလား… ဟင်…. …. ကိုကိ့ုစိ တ် ပူ ပူအောင် အောင်…. …. လာခဲ့ …..” …..” “ဟဲ့ … ဟဲ့ … နေပါဦးတော်…. ကျုပ တ်ိတို့ ပြန် ပါရစေဦး… နော်…. တော်တိုကလဲ့  ….” ….” ကြီးမေ အသံ ကြားမှ သူ သတိရသွ ရသွားသည် …။ “ဟာ… ကန်တော တော့ကြီးမေ… နော်… ကန်တော တော့…. ကျနော် … မေ့သွ သားလွို့ ….” ….” ကျေ်ာမြနှ့ င်င် ကြီးမေတို့ ထွ က် သွားသည် နှ့ င်င် သူ လှည် ည့ကြည့်် လိုက် ရာ ဟန်နီန မရှီိတော တော့ဘယ် ရမလဲ ခု မှ ဒီ တိုက် ခန်းလေးပေါ်မှာလာပုန်နးနေလိ်ု့ ...။ ...။ သူ အိ ပ်ခန် ခန်းတွင်င်း ၀င် လိုက် ပြီ ပြီးဘီုရိရ တိံခါးကိ ခါးကိုဖွ့ င်င လိ်ု က် သည် နှ့ င်င် မျက် လု လုံးမှိတ် ကာ မချို မချဉ် မချဉ် လု ပ်နေသော နေသော ဇနီးလေးကိုပွေ လိ့ုက် ပြီ ပြီးကု တင်ပေါ် ပေါ် တင် လိုက် ရင်းကိုယ် ဖြင် ဖြင့်ဖိ ထားလိုက် သည် …။ နောက် တော့တခစ်ခစ် ခစ် ရီသံ သ၊ံ ထို့နောက် နောက် အသားခြင်းတဖတ် ဖတ် ဖတ် ရိုက် ခတ် သံ များ၊ သက် ပြင် ပြင်းချသံ မးချသံ များ၊ ကျေနပ် စွ စွာညည်းညူးညူ နေသံ များဖြင့် …။ …။
“Attention all passenger please! Wear your seat belt and switch off your mobile phone and any wireless device, in few minutes our flight will ready to depart from the Yangon and wishes enjoy your flight thank you. This is your pilot Michael and co.pilot is Richard hasbidi”
လေယာဉ် မှုး ၏ ကြေငြာသံ ကိ ကိုနားထောင်ရင် ရင်းမှ ပြတင်းပေါက် မှ မှ မှန်န ကိ်ု လာမှန်န်နေသော နေသော မိုးရေစက် မ များ ကိုငေးကြည့် နေရင် နေရင်းပန်းပွင့် င်သန္တာ သန္တာုမိးရေတို့နှနင့် င်ှအပြိ အပြိင်ုမျက် ၀န်းမှ ကျလာသော မျက် ရည် တိ တိုကိ့ုမတားဆီးမိတော တော့…။ တားလည်းး မတားဆီးချင် တော တော့ပါ…။ ကျပါစေတော့လေ…။ တစ်ခုခ ပဲု တစ်ခုခလေးပဲေု လးပဲ သူ မ မောင့်ကိုသိစေချင် ပါသည် စေချင် ပါသည် …။ စပြီးချစ် မိ ချစ် မိသွ သားကတည်ွးကးက မောင့်ကိုမျက် လု လုံးအောက် မှ မှ အပျောက် မခံ မခံ နိုင်ငလောက်ေ် လာက် အောင် ချစ့် ခဲခ မိဲ ပါသည် …။ အချစ် တက္က အချစ် တက္ကသိ သုလ်ိ
မိခင် ခင် ကြက် သားအု ပ် မကြီးက သူ ကလေးတွေ့  ကိုဂရု စိုက် သလိုမျိုး မဟု တ် မဟု တ် ခဲ့လျှင် ဟု င် ဟု ဆို့ခဲခရင် ရဲ င်တောင် တောင် အဲဒီဒီ ထက် တော့သူ မ မလျေ့ာနည်းခဲးခဲ့ပါ…။ အဲဒီဒီချစ် ခြင် ချစ် ခြင်းတွေ က မောင့် အတွ အတွ က် ပူလောင် လောင် လှသည် သည့်အတ္တတွေ တွေ ဟု မြင် လာတာကိုသူ မ တော်တော်လေး နောက် က ကျ ပြီးမှ ပြီးမှ သိခဲ့ ခဲရပါသည် ရပါသည် …။ မောင့် ဆီ ဆ ကီလျှော် ကြေးကိုသူ မ မလိုချင် ချင့် ခဲ ပါ…။ မောင်နှနင့် င်ှနေခဲ့ဖူးသည့်အမှ တ် တရအဖြစ် တရအဖြစ်သာ သာ သိ မ်းထားမိ လိုသည် သည့်အတွ က် သာ၊ အရာရာအားလုံး သူ့ အတွ အတွ က် လမ်းဘေးမှ မောင် တစ်ခါကောက် ခါကောက် ပေးခဲ့ဖူးသည့်ကျောက် စရစ် စရစ်ခဲခဲ ဖြူဖြူလေး တစ် လုံးလောက် တောင် တန် ဖိုးမရှိခဲ့ ခ ပါ…။ဲမခံချင် စိ ချင် စိ တ် ၊ အရှုံးမပေးလိုချင် စိ ချင် စိ တ် မ များဖြင့်တုန်န ပြန့့်် ခဲခ ခြင်ဲးသာ ဖြစ် ပါသည် …။ မေမေတို့၊ တီ တီ တို့ ဘွားဘွားတို့ ပြောသလိုမောင် မဟု တ် မှ မှန်န်း စပြီးညားကထဲ က သက် သေပြချင် မိ သေပြချင် မိသည် သည့်သူ တဇွ့  တ် ထိ ထိုး နားမလည် မှု မှု အမှားတွေကြောင် ကြောင့်မောင် နာကျင် သွ သားခွဲ့ရမှ ရမှန်န်း သိ လိုက် ချိ န်န မှ်ာအရမ်းနောက် က ကျ သွားခဲ သွားခဲ့ပြီ ဖြစ်သည် သည် …။ မောင် က မာနကြီးစွာဖြင့်သူ မကိုလက် ထပ် ထပ် ပြီးကွဲကွာသွားသည့်အချိ န်န ထ်ိအပျိ စု င်ဘ၀ြ င် ဘ၀ဖြ့ င် ထားခဲ့ ချိန် ချိ န် တွင်ငတောေ် တာ့နောက် က ကျ စွာဖြင် စွာဖြင့်လင် ယောက်ျားရဲ့ယု ယကြင်နာမှု နာမှု များကိုအရူးမူးလိုချင် မိ ချင် မိ့ ခဲခသည် သဲည် …။ ဒါကြောင့်လည်းး ဒု တိ ယအကြိ မ်အဖြစ် အဖြစ် ရူးမိုက် စွ စွာမျှော် လင့်ပြီး၊ သူ မ ဟန်နီန စီံ ဆိ ဆုသောေိ သာ သူ မထက် ၂နှ စ်ခန် ခန့်  ငယ် မည် မည့်မိန်နးမကလေ်းတစ်ယောက် ယောက် နှ့ င်င် အလောင်းစား လု ပ်ခဲ့ ခ ခြင်ဲး ဖြစ်လေသည် လေသည် …။ ဒါပေမဲ့သူ မပိုပြီးအံ့သြမှင်င တက်မိရလောက် ရလောက် အောင် မောင် က ဟန်နီန စီံ ဆိ ဆုသောေိ သာ မိန်နးကလေ်းအပေါ်တွင်င် သစ္စာစောင့်ထိန်နးနိ်ုင်င့်ခဲခသည် သဲည် …။ိရှ ပါစေတော့လေ…။ (မောင် ရေ… ကျ မတို့ မိမိန်နးမသားတွေးမသားေ်တွ က မြစ် မြစ်တွေ တွေ လိုကွေ့ ကောက် ကောက် တယ် တယ် လိ လို့ မောင် တို့ယောက် ယောက်ျားတွေ အမြဲ မြေေဲ ပာတတြ ပာတတ် (မောင်ရေ… ရေ ရ… ကားေ တွ အြြေ ကြတယ် ကတယ မဟု တ် လား… လား… ကျ မတို့ မိမိန်နးမတွေးမတ်ေကွပင် ပင် လယ် လိ လိုလည် မာယာများတတ် သတဲ့လား… လား…။ မောင်ရယ် ရယ် … မောင် မောင်ြြ ကတယ်ြြ်မဟု လား လား…။ …။ က လည်းးးမာယာမ လား …။ မောင် မသိ လိုပါ…့  …။ ကျ မတိးမသားေ်တွ က မြစ် တွေဆိ ဆုရင် ရိ င် ကွေ ကွေ့  ကောက်ေ့ ကာက် ရတဲ့အြေ ကာင် ကာင်းရင်းက ကမ် ကမ်းပါးနဲ တူ့  တဲ့မောင် ပါ …။ က မတုိ့ မိမိန်နးမသားတွေြ မစ်ြြ တွေ အြေ မောင် တို့ ယောက်ျားတွေြေ ကြောင့်ပါ… ပါ…။ ကမ်းပါးတွေးပါးတေရဲ့ ရွဲပုံပုသွ သင်ငွးမှုအောက် အောက မ်ှမှာပဲ ပုံပု စံြေ ပြောင်ြးးကြရတာ ကရတာ မဟု မဟု တ် လား… လား… ကျ မတိ မတုက့ိ မာယာ မာယာ ပါ …။ ကမ် လား လား…။ …။ က များတဲ့ပင် ပင် လယ် ဆိုရင် ရင်လေ… လေ လ… ကျမတိ မတုိ့ ရဲရဲ အနားသတ် အနားသတ် ကမ် ကမ်းစပ် က မောင် မောင တိ်ု့  ယောက် ယောက်ျားတွေ ပါပဲားတွေ တွ ပါပဲ…။ နောက် ဆုံး က ကျ မတို့ လ… က အနားသတ် ကမ်ားေ …။ နောက် ပင် လယ် တွေ အားလုံး ကမ် ကမ်းစပ် မှာက ကျ ရှုံးရတော့တာပါပဲ တာပါပ တာပါပဲ မောင် ရယ် ….။ မောင်ရယ် ….။) ။) ဘာပဲ ဖြစ် ဖြစ်လေ လေ ကျမမောင့်ကိုဒီဘ၀ ဘ၀ တစ်သက် သက် စာ စာ ဟိုး အဝေးကြီးကနေပြီးလွ မ်းနေမှာပါ… လွ မ်းနေ… သွားမှာပါ...။
Report "sexy-kiss - Scribd"
Download "sexy-kiss - Scribd"
Share & Embed "sexy-kiss - Scribd"